အိတ်ဖေါ်တီး – Grab Love Story
420 ဟန်ဝင်းအောင် ။
ဟန်ဝင်းအောင်သည် လူလိမ်တယောက်ပါ ။
ဖိုးတွမ်တီးဟန်ဝင်းအောင် လို့ လူသိများတယ် ။
ဖိုးတွမ်တီး ဆိုတာက လိမ်လည်မှုအတွက် ပုဒ်မ …ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၂၀ ကို ပြောချင်တာ ။
ဆိုလိုတာက ဖိုးတွမ်တီး လုပ်လွန်းလို့ ခေါ်ကြတာ ။
ငယ်ငယ်လေးထဲက စောရနက္ခတ်နဲ့ယှဉ်ပြီး မွေးဖွားလာခဲ့သလား မဆိုတတ်ဘူး ။ ဟန်တင့်ကျော်သည်
ငယ်ငယ်ထဲက လိမ်တတ်သည် ။ ခိုးတတ်သည် ။ သူများကို ဂျောက်ချတတ်သည် ။ ကျောင်းသားအရွယ်ထဲက လိမ်သည်။
ကျောင်းက အတန်းဖေါ် အချင်းချင်း လိမ်သည် ။ ဆရာ..ဆရာမတွေကို လိမ်သည် ။ ကျောင်းက ကျောင်းစောင့် ဒရဝမ်ကြီးကိုက အစ သူ လိမ်သည် ။ ကျောင်းရှေ့မှာ လာရောင်းရဲ့ ဘယာကြော်သည်ကုလားကိုလည်း သူလိမ်သည် ။ ကျောင်းအိမ်သာကို ဆေးတဲ့ ကုလားကိုလည်း လိမ်သည် ။
ကျောင်းသွားတက်ပေမယ့် စာကို စိတ်မဝင်စား ။ မဟုတ်တာ တခုခုကို လုပ်ဖို့ဘဲ အမြဲ တွေးနေသည်။လိမ်ဖို့ ညာဖို့ သူတပါး ပစ္စည်းကို မတရားနည်းနဲ့ ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ဘဲ သူ စဉ်းစားနေသည် ။ ဒါကြောင့်ရှစ်တန်းကျ..ကိုးတန်းကျ..ဆယ်တန်းနှစ်ခါကျပြီး သူ ကျောင်း မနေတော့ဘူး ။ ကျောင်းဆက်မနေပေမယ့်
ကျောင်းနဲ့တော့ အဆက်မပြတ် ။ သူသည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အယောင်ဆောင်ပြီး လိမ်တတ်လို့ကျောင်းသား မဟုတ်ပေမယ့် တက္ကသိုလ်ထဲ ရောက်တတ်သည် ။ တက္ကသိုလ်မှ တခုထဲ မဟုတ် ။ တက္ကသိုလ် အမျိုးမျိုးထဲ သူ ရောက်သည် ။ ကျောင်းသားအစစ်တွေရဲ့ ဟန်ပန် အမူအရာတွေကိုလည်း သူ မှတ်သားလေ့လာသည် ။ အတုခိုးသည် ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဂိုက်စတိုင် ဖမ်းပြီး လိမ်သည် ။ ငွေပစ္စည်းတင် မက မိန်းကလေးတွေရဲ့ အချစ်ကိုလည်း လိမ်ညာပြီး ယူသည် ။
ဟန်ဝင်းအောင်သည် လိမ်တတ်ညာတတ် ခိုးတတ် သလို တဏှာလဲ ကြီးသည် ။ ငယ်ငယ်လေးထဲက သူ့လိင်တန်ဆာသည် တခြားရွယ်တူ ကလေးတွေလို မဟုတ်ဘဲ ကြီးမားရှည်လျားနေပြီး လိင်တန်ဆာရဲ့ထိပ်မှာလည်း ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့နီကြီး တလုံး ရှိနေတာကြောင့် ရာဂအား ကြီးမဲ့ကောင်..မိန်းမအမှု ၀ါသနာထုံ
မဲ့ကောင်လို့ သူ့ဘကြီးတယောက်က ပြောဆို ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည် ။
တကယ်ဘဲ ဟန်ဝင်းအောင်သည် မိန်းမလိုက်စား ရှုပ်ပွေသည် ။ မိန်းမကောင်းများကို လိမ်ညာပြီး ရအောင် ယူတတ် အိပ်တတ်သလို လမ်းပေါ်က လိမ့်နေတဲ့ ဂေါ်လီမလေးများ..ကြေးစား မိန်းမပျက်များ နဲ့လည်း ပျော်ပါးသည် ။
ကောလိပ် နဲ့ တက္ကသိုလ်တွေက မိန်းကလေးတွေကလည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းထဲ အမြဲ တွေ့ရသော သူ့ကို ကျောင်းသားဘဲ ထင်မှတ်ကြပြီး သူ့အပြောကို ယုံကြပြီး ပြန်ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေ ရှိသည် ။ ချစ်သူမိန်းကလေးတွေကို သူ့စိတ်ကြိုက် ပျော်ပါးပြီး သူတို့ဆီက အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး လိမ်စားသည် ။
ဆေးကျောင်းသား ဟန်ဆောင်ပြီးလည်း နားကြပ်လေး လက်ကကိုင်ပြီး ဆေးရုံတွေကို ဝင်ထွက်သည် ။ ဟောက်ဆာဂျင်ဆိုပြီး လိမ်ညာသည် ။ သူလိမ်နေရတာကို သူ ကျေနပ်နေတာ ။
တခါတလေ သူလိမ်တာ သူ့အတွက် အကျိုး မဖြစ်ထွန်းလှ ။ သူ့အကြောင်းသိသူတွေက သူသည် ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ရူးနေသူ စိတ္တဇဝေဒနာရှင် တယောက် လို့ ပြောဖူးသည် ။
တဖြေးဖြေးနဲ့တော့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက သူ့ကို လူလိမ်မှန်း သိလာကြသလို မကျေနပ်သူတွေ
က ရဲစခန်းကို တိုင်ကြားကြတာကြောင့် သူသည် ရဲနဲ့ ညိသွားသည် ။ ရဲက သူ့ကို လူလိမ်မှန်း သိသွားသည် ။ ရဲမှတ်တမ်းဝင်သွားသည် ။
ပထမပိုင်းမှာတော့ သူ့မိဘတွေက နံမည်အပျက် မခံဘဲ သူ့အစား လျှော်ပေးတာတွေကြောင့် သူသည်
ကျောင်းမှာ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆွေမျိုးများ ကြားမှာ နံမည်ပျက်ပေမယ့် အမှုတွေ ဘာတွေ မဖြစ်ခဲ့ ။ ရဲအဖမ်း မခံခဲ့ရ ။ ထောင်မကျခဲ့ ။ ဒါပေမယ့် သူက ရပ်တန်းက ရပ်မသွားဘူး ။ မလိမ်ဘဲနဲ့ မနေနိုင်ဘူး ။ မိဘတွေလည်း ကြာလာတော့ သူ့ကို စိတ်ပျက်လာကြသည် ။ သူ့ကို မကယ်တော့ ။ သူ့ဖက်က မနေတော့ ။
ရဲအဖမ်းခံရတဲ့အချိန် နဲနဲ ခြေငြိမ်သွားတယ် ထင်ကြရပေမယ့် အခိုက်အတန့် ခဏတာဘဲ သူ ငြိမ်နေပြီး သူ့အကျင့်အတိုင်း ပြန်လိမ် ပြန်ခိုးတော့တာဘဲ ။
ဟန်ဝင်းအောင် သည် လိမ်ဖို့ မကြောက်ဘူး ။ လိမ်တာပေါ်သွားမှာ မိသွားမှာလည်း မကြောက်ဘူး ။ ပေါ်တင်ဘဲ ။ မျက်နှာသေသည် ။ မျက်နှာပြောင်သည် ။ လိမ်ပြီးရတဲ့ငွေတို့ ပစ္စည်းတို့က သူ့ဆီ မမြဲဘူး ။ သူကလည်း စားသောက် သုံးဖြုန်းပစ်ခဲ့သည် ။ ငယ်ငယ်လေးထဲက အိမ်က လူကြီးတွေကို လိမ်သည် ။ အမျိုးတွေကို လိမ်သည် ။ ပစ္စည်းတွေကို ခိုးရောင်းစားသည် ။ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ခိုးရာပါပစ္စည်း ဘယ်မှာ ရောင်းရမလဲ သူသိသည် ။
အသက်၁၈နှစ် အရွယ်မှာထဲက မိန်းမရှုပ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင် ဓါးထိုးခံရသည် ။ ဘယ်သွားသွား
အမှုပွေတဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်သည် တနေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ထဲကို ဘတ်စကားနဲ့ သွားရင်း လူကြပ်လှတဲ့ဘတ်စကား ပေါ်မှာ မိန်းမတယောက်ကို မျက်စိကျသည် ။ မိန်းမက တင်ကောင်းကောင်းနဲ့မို့ ဟန်ဝင်းအောင် ဒီမိန်းမ အနားကို တိုးကပ်သွားသည် ။ ဒီမိန်းမက သူ့ထက် အသက် အများကြီး ကြီးသည် ။ သုံးဆယ်ခန့်အရွယ် ဖြစ်သည် ။ အသားဖွေးဖွေး နို့ကြီးကြီး တင်ပါးကြီးတွေ ထယ်ဝါသည် ။ တရုတ်ကပြားမ ဖြစ်သည် ။ ဟန်ဝင်းအောင် တိုးကပ်လာတာကိုလည်း ဒီမိန်းမက
သိသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်သည် လူကြပ်တာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒီမိန်းမရဲ့ ဖင်ကားကားကြီးတွေကိုအနောက်ကနေ အပီအပြင် ထောက်သည် ။ ဖင်ကြီးတွေက ထောက်လို့ ကောင်းလှသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင် က မိန်းမတွေကို ဘတ်စကားပေါ်မှာ ထောက်နေကျမို့ သိနေတာက ဒီမိန်းမသည် ထမိန်
တထပ်ထဲ ဝတ်ထားသည် ။ အတွင်းခံပင်တီ ခံဝတ်မထားဘူး ။
သူ့မာတောင်နေတဲ့ ဒုတ်ကြီးက မိန်းမရဲ့ ဖင်တုန်းတွေကြားတဲ့တဲ့ကို ထောက်ထားသည် ။ ဘတ်စကား
မောင်းတဲ့သူက ဘရိတ်ကို ဆောင့်ဆောင့်နင်းလိုက်တဲ့အခါ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါလာတဲ့ ပါဆင်ဂျာတွေသည် ယိမ်းထိုးကုန်သည် ။ သူ့ဒုတ်ကြီးကလည်း ရှေ့က ဖင်အိအိကြီးတွေကြားထဲကို ပစ်ပစ်ဆောင့်နေသည် ။
ရှေ့က မိန်းမ ဖျတ်ကနဲ လှည့်ကြည့်သည် ။ သို့သော် စိတ်ဆိုး မကျေနပ်ပုံ မပြဘူး ။ ဒီတော့ သူ စိတ်
အား တက်သွားသည် ။ သူ့ကို လုပ်ခွင့်ပြုသလို ခံစားလိုက်ရပြီး ဟန်ဝင်းအောင် ပိုကဲလာသည် ။ နောက်ကလဲ ထောက် ထမိန်စ ကြားနေ ရှေ့ဖက်ကိုလည်း သူ့လက်နဲ့ စမ်းလိုက်သည် ။
လေသံလေးနဲ့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တာ သူ ကြားလိုက်သည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လို မကြောက်တတ်
မျက်နှာပြောင်တဲ့ကောင်မို့သာ ဒီလိုတွေ လုပ်ရဲတာ ။ တချို့ ထက်တဲ့ စွာတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့သာ တိုးမိရင်
လူကြားအောင် အော်ဟစ်နိုင်သည် ။ ပါးကိုလည်း ဖြောင်းကနဲ ပိတ်ရိုက်နိုင်သည် ။ အခု မိန်းမကတော့
အဖုတ်ကို စမ်းကာ ပွတ်ကြည့်တာတောင် ငြိမ်နေသည် ။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် သူ ဒီမမကြီးကို ဖြုတ်ချင် ဖြုတ်ရနိုင်သည် လို့ ဟန်ဝင်းအောင် တွက်ဆမိသွားသည် ။
ပိုရဲတင်းလာပြီး စောက်ပတ်ကို ပီပီပြင်ပြင် ကိုင်တွယ်လိုက်သည် ။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ကိုင်
မိပြီး သူ့ဒုတ်ကို ဖိဖိညှောင့်လိုက်တော့ သူ ပြီးခါနီးတောင် ဖြစ်သွားရသည် ။ ရှေ့က မမကြီးလည်း သူ
လုပ်တာကိုင်တာတွေကြောင့် စိတ်တွေ ထကြွနေမှာ အမှန်ဘဲ လို့ သူ တွက်ဆနေသည် ။
“ မှတ်တိုင်ပါတယ် …”
စော်ကြီးရဲ့ အသံတွေက တုန်နေသလိုဘဲ ။
မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းသွားတော့ ဟန်ဝင်းအောင် အနောက်ကနေ လိုက်ဆင်းသည် ။ သူ့ဒုတ်က ပုဆိုးကြား
က ငေါငေါကြီး ထိုးထောင်ထွက်နေလို့ လွယ်အိတ်နဲ့ ကာထားရသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်သည် အရင် အ
တွှေကြုံတွေ ရှိခဲ့ဘူးလို့ ဘတ်စ်ကား စီးရင် လွယ်အိတ် အမြဲပါသည် ။ မြူးကြွနေမှာ ဖြစ်တဲ့ သူ့ဒုတ်ကို
ကာဘာ လုပ်ဖို့ …။
ဖင်တုန်းတွေ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် တဆတ်ဆတ် တုန်ခါလိုက်နဲ့ စော်ကြီး ရှေ့ကနေ တလှမ်းချင်း လှမ်း
“ မမ….မမ….ခဏ….ခဏလေး …. ”
ဟန်ဝင်းအောင်က ဘေးချင်းယှဉ်မိအောင် လျှောက်ရင်း စော်ကြီးကို စကားစပြောလိုက်သည် ။
“ ဘာလဲ…မင်း ကားပေါ်မှာ စော်ကားရတာ အားမရသေးဘူးလား …ဘာထပ် လုပ်ချင်သေးလို့လဲ..”
“ ဟာ..အမရယ်…စော်ကားတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ….”
“ ဘာ မဟုတ်ရမှာလဲ..ဟွန်း..အတင်းလိုက်ထောက်ပြီး …နောက်ပီး…မပြောလိုက်ချင်ပါဘူး..လက်ကလည်း သရမ်းသေးတယ် ..”
“ ဆောရီးပါ..မမရယ်…မမက ဟိုလေ..ကိုယ်လုံးက အရမ်းလှ..အဲ..အရမ်းတောင့်တင်းတော့ မတော်တဆ ထိမိရာက မနေနိုင်တော့ဘဲ…”
“ တော်ပါကွာ..နားရှက်ပါတယ် …ကဲ..ကဲ…မင်းလမ်းမင်းသွား…ငါလည်း လုပ်စရာတွေ ရှိသေးတယ် ..”
“ မမ…မမက ဒီလမ်းထဲမှာ နေတာလားဟင် ..”
“ မမကို ခင်မင်ချင်တာပါ…မမ နံမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲဟင် …ကျနော့်နံမည်က ဟန်ဝင်းအောင် ပါ ..”
“ ဟွန်း..ဉာဏ်ချည်းဘဲ..မင်း အကြောင်း မသိရင် ခက်မယ်…လိုက်မိတ်ဆက်..ပြီးတော့…”
“ မမ နံမည်လေး …”
“ ငါ့နံမည်က အေးအေးပွင့်….ကဲ..ဘာသိချက်သေးလဲ….”
“ မမ က အိမ်ထောင်နဲ့လားဟင်….”
“ အင်း…ဟုတ်တယ်…လင်ရှိတယ်….ကဲ..မောင်မင်းကြီးသားလေး….ဒါဘဲလား..ငါ သွားတော့မယ်…”
“ အိမ်ပြန်မှာလားဟင်…မမ….မမယောက်ျား အိမ်မှာ ရှိလား …”
“ အမလေးတော်…စပ်စုလိုက်တာ..ငါ့လင် အိမ်မှာ ရှိလား ဘာလို့ သိချင်နေရတာလဲ…”
“ အော်..ကျနော်လေ….အိမ်….အိမ်သာ…အိမ်သာ တက်ချင်လို့..ခဏ လိုက်ခဲ့ပြီး အိမ်သာ တက်လို့ရမ
“ အမလေး….မင်းမလဲ..အမျိုးမျိုးဘဲ..ငါ့လင်က အိမ်မှာ ရှိမနေဘူး …သူနဲ့ ငါ စကားများလို့ ငါ သူ့ကို
အိမ်ပေါ်က မောင်းချထားတာ တလကျော်လောက် ရှိနေပြီ …. ”
ဟန်ဝင်းအောင် ထိပ်ကနဲ ဝမ်းသာသွားသည် ။ ဝမ်းသာလုံး ဆို့သွားသည် ဟု ဆိုလျှင် ပို မှန်ကန်လိမ့်
“ ဒါဆို ခဏ လိုက်ခဲ့မယ်နော်….”
ဟန်ဝင်းအောင်သည် လင်နဲ့ ခဏ ကွဲနေတဲ့ စော်ကြီးသည် ဆာနေပုံရသည်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်သည် ။
သူ့ဒုတ်နဲ့ ထောက်တာကို မငြင်းပယ်ခဲ့ဘဲ ငြိမ်ခံနေတာမှ မျက်လုံးတွေကို စုံမှိတ်လို့ ။ အဖုတ်ကို စမ်း
တော့လည်း မရုန်းဖယ်..မငြင်းဆန်ဘူး ။ ဒါဆို အိမ်လိုက်သွားပြီး ထပ်ကြံရင် ၀ါးရနိုင်တယ် လို့ တထစ်ချ
လမ်းအဆုံးက အစွန်ဆုံး အိမ်ကလေးကို ရောက်တော့ အေးအေးပွင့်က အိမ်တံခါးကို သော့နဲ့ ဖွင့်သည် ။
“ ကဲ..အိမ်သာ သွားတက်ပေတော့..ကိုယ်တော်လေး ..”
အနောက်ဖေးဖက်ကို လက်နဲ့ ညွှန်ပြပြီး ပြောလိုက်သည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း အိမ်သာဆီကို ဝင်သွားလိုက်ပြီး သေးပေါက်သည် ။ စိတ်တွေက တထောင်းထောင်းနဲ့ ထကြွ သောင်းကျန်းနေသည် ။
အေးအေးပွင့်ကြီးကို မရရအောင် တက်ဆော်မည် လို့ သူ စိတ်ပိုင်ဖြတ်လိုက်သည် ။
အိမ်ရှေ့ကို သူ ပြန်ထွက်ခဲ့တော့ ကြားထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အခန်းလေးထဲက အသံသဲ့သဲ့ ကြားလိုက်လို့သူ
ကြည့်လိုက်တော့ အေးအေးပွင့် အကျ င်္ီဲလဲနေတာ ။ အပြင်ဝတ်ခဲ့တဲ့ အကျ င်္ီကို ချွတ်ပြီး အိမ်နေရင်း
အင်္ကျီအနွမ်းလေးကို ကောက်ယူ ဝတ်ဆင်နေတာ ..။
သူကြည့်နေတာ မြင်သွားတော့ အေးအေးပွင့်က ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ ကာလိုက်သည် ။
“ ဟေ့..မင်း အိမ်သာတက်ပြီးရင်လဲ သွားတော့လေကွာ..ဘာလာကြည့်နေတာလဲ..”
“ မမ က လှလို့….မမ အရမ်းလှတာဘဲ….”
“ အို..လာမြှောက်မနေနဲ့..ဒါမျိုးတွေ ရိုးနေပြီ …မင်းလေးရဲ့ အကြံကို မသိဘူးများ မှတ်နေလား ..”
သူ အေးအေးပွင့် အနားကို တိုးကပ်သွားသည် ။
“ ဘာအကြံလဲ မမရဲ့…ဟောဒီ အကြံလား…” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း အေးအေးပွင့်ကို ဖက်သိုင်းလိုက်ပါသည် ။
“ မမရယ်…မမကို ကားပေါ်မှာထဲက အရမ်း ကြိုက်နေတာ..သိလား….”
အေးအေးပွင့်ရဲ့ မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းတွေကို နမ်းရှုံ့ရင်း လက်ကလဲ ဖင်ကြီးတွေကို ကိုင်သည် ။
“ ဟိတ်…နှာဘူးလေး …ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲလို့..လွှတ်စမ်းကွာ….”
“ ဟင့်အင်း..မလွှတ်ဘူး..မမနဲ့ အိပ်မယ်….”
ဟန်ဝင်းအောင်က အေးအေးပွင့်ကို ကုတင်ဆီကို ဆွဲဖက် ခေါ်ဆောင်သွားလိုက်သည် ။
“ ဟိတ်..မင်း လုပ်ရပ်တွေက လွယ်လှချည်လား..ခုဘဲသိ..ခုဘဲ ကုတင်ပေါ်တက်…မင်း…မင်း..ငါ့ကို အထင်
“ မသေးပါဘူး….မမရယ်..မမကို အရမ်း ကြိုက်သွားလို့ပါ…”
အေးအေးပွင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူပြဲပြဲတွေကို ငုံ စုတ်နမ်းလိုက်သည် ။ စော်ကြီး အစဘဲ နဲနဲ ရုန်းဖယ်ချင်
ပေမယ့် ခဏကြာတော့ ငြိမ်သက်သွားပြီး သူစုတ်တာကို ခံရုံတင် မကဘဲ သူ့ကိုပါ ပြန်တုန့်ပြန် စုတ်
သူ့လက်တွေက ဖင်တောင့်တောင့်ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ် ပွတ်သပ်နေသည် ။
နှုတ်ခမ်းချင်း အခွာ စော်ကြီးက ..“ ဟူး…မင်းလေးက တော်တော် နမ်းတတ်တာဘဲ…အမလေး…ဖင်ကိုလည်း စိတ်တိုင်းကျကို နယ်နေတာပါဘဲလား….ကောင်လေး ..မင်း ငါ့
ဖင်တွေကို ကြိုက်လား …”
“ ဟား..ကြိုက်တာပေါ့..မမရယ်…မမ ဖင်တုန်းတွေက တကယ် တောင့်တာဘဲ…ခါးသေးသေး ဖင်ကြီးကြီး
နဲ့ မမ ကို မြင်တော့ စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ထောက်မိတာပေါ့ ..ဒီမှာကြည့်လေ..ကျနော့်ဒုတ်က တအားတောင်နေပြီ….”
သူက ပုဆိုးကို ဖြေချွတ်ပြလိုက်လို့ အေးအေးပွင့် မျက်လုံး အဝိုင်းသားနဲ့ လန့်သွားသည် ။
“ ဒါကြောင့် ထင်တော့ ထင်သားဘဲ …”
“ မင်း ထောက်နေတုံးက မင်းဟာကြီးက တော်တော့်ကို ကြီးပါတယ် လို့…”
“ အို့..မင်းနော် …”
အေးအေးပွင့် မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး ပြောလိုက်ပေမယ့် သူကမ်းပေးနဲ့ သူ့ဒုတ်ကြီးကိုတော့ မတွန်း
ဖယ်ပစ်ပါ ။ မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်ထားသည် ။
“ တုတ်လိုက်တာဟယ်…..ဟူး….မလွယ်ဘူး …”
“ မင်းလိုဟာကြီးနဲ့ ကြုံရရင် ပြောပါတယ်…”
အေးအေးပွင့် တခစ်ခစ် နဲ့ ရယ်သည် ။
“ သိဘူး …”
ဟန်ဝင်းအောင် အိုကေပြီ ဆိုတာ သိတာနဲ့ အေးအေးပွင့် အဝတ်တွေကို ချွတ်တော့တာဘဲ ။
“ တော်တော့်ကို ကဲတဲ့ ငကဲလေး….”
သူ့ဒုတ်ကို ပယ်ပယ်နုယ်နယ် ဆုပ်ကစားရင်း မျက်စောင်းလေး ထိုးကာ ပြောလိုက်တဲ့ အေးအေးပွင့်ကို
“ မမ စုတ်ပေးပါလားဟင်…” လို့ သူ နှစ်ကိုယ်ကြားလေး ပြောလိုက်သည် ။
“ ကဲလာပြီကွာ….ကုတင်ပေါ်ရောက်..တုံးလုံးချွတ်..အခု လီးကိုပါ စုတ်ခိုင်းနေပြီ …. အမလေးလေး…”
“ အိုကွာ..လုပ်စရာ ရှိတာ လုပ်..လီးတော့ မစုတ်ခိုင်းနဲ့…”
ဟန်ဝင်းအောင် ပုလွေ မှုတ်ခိုင်းဖို့ အတင်း မကြိုးစားတော့ဘဲ အေးအေးပွင့်ကို ပေါင်ဖြဲကားက တက်လုပ်ဖို့ နေရာ ယူလိုက်တော့သည် ။ နို့ထွားထွား ကော့ကော့..ခါးသေးသေး တင်ကားကားနဲ့ အေးအေးပွင့်ရဲ့ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေ ကြားက စောက်ပတ်မို့မို့ကြီးကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည် ။ အရည်တွေ စိုပြီး ရောင်လက်နေတဲ့အကွဲကြောင်း နီညိုညိုကြီးက နှုတ်ခမ်းသာထူထူကြီးတွေနဲ့ ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်စိနဲ့ မြင်လိုက်တာနဲ့ သူ့စိတ်တွေ ကို ထကြွသထက် ထကြွသွားစေသည် ။
“ လှလို့ပါ မမရဲ့..”
“ အမလေး..စောက်ပတ်များ လှရတယ်လို့ကွယ် ..နှာဘူးလေး …”
ဟန်ဝင်းအောင် အေးအေးပွင့်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကိုင်သည် ။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွေကို စမ်းသည် ။
ပွတ်သည် ။ အကွဲကြောင်းကို သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ လိုင်းဆွဲသည် ။ စောက်ရည်တွေ တအား စိုရွှဲ
နေတာကို စမ်းကိုင်မိရလို့ အေးအေးပွင့် လည်း ခံချင်နေပြီဆိုတာ သူသိသည် ။
လင်နဲ့ ကွဲနေလို့ လိုလားနေတာဘဲ ဖြစ်မည် ။
“ဟေ့..ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲကွာ..ဟင့်ဟင့်..ဒို့ ဖီးတက်လာပြီ….”
ဟန်ဝင်းအောင်က တဟဲဟဲ ရယ်လိုက်ပြီးသူ့ဒုတ်ကြီးကို အေးအေးပွင့်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ တေ့လိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် ထိုးမသွင်းသေးဘဲ နို့ကြီးတလုံးကို ကိုင်ညှစ် ကစား..နောက်နို့ကြီးတလုံး
က နို့သီးခေါင်း နီညိုညိုလေးကို စို့တယ် ။
သူ့ရဲ့ ဖွားဖက်တော် ထိပ်ဖူးကြီးက အေးအေးပွင့်ရဲ့ ပစ္စည်း အပေါက်ဝမှာ ထိလိုက် ကွာလိုက်နဲ့ ရှိနေတယ် ။ ထိုးမသွင်းသေးလို့ အေးအေးပွင့် အနေရ ခက်နေတယ် ။ ဆာပြီဆိုရင် စားလိုက်ရမှ ..။
အခုဟာက အပေါက်ဝရောက်မှ မဆိုင်တာတွေ လျှောက်လုပ်နေတယ် ။ အချိန်ဆွဲထားတယ် ။ ဘာလဲ
“ ဟေ့..လုပ်မှာဖြင့် လုပ်တော့ကွာ..နို့ကိုဘဲ ရန်ရှာနေတော့မှာလား ..”
စောက်ပတ်က ယားလှပြီမို့ ထုတ်ပြောရတော့တာဘဲ ။ ဟန်ဝင်းအောင်က ဒီတော့မှ နို့စို့တာကို ရပ်
လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို သူ့ဒုတ်ကြီး ထိုးနှစ် ဖိသွင်းလိုက်ပါတော့သည် ။
“ အိုး..ဖြေးဖြေး..မင်းဟာကြီးက အရမ်းကြီးတယ်…”
အေးအေးပွင့်က မျက်စောင်းလေးထိုးကာ ပြောလိုက်ပေမယ့် ဟန်ဝင်းအောင်က ဂရုမစိုက် ။ စိုရွှဲအိနေတဲ့
အေးအေးပွင့် စောက်ဖုတ်ကြီးကို တဇိဇိနဲ့ ဖိထည့်ပါတော့သည် ။
“ အင်း..အင်း…အား…..အိုးအိုး….အို့အို့အို့…” ဆိုတဲ့ အေးအေးပွင့်ရဲ့ အော်သံညည်းသံတွေနဲ့ တဖပ်ဖပ်
အသံတွေ အိမ်ကလေးထဲမှာ ဆူညံသွားသည် ။
ဆာလောင်နေတဲ့ လင်နဲ့ ကွဲနေတဲ့ အေးအေးပွင့်ကို ဘတ်စ်ကားပေါ် ထောက်ရင်းနဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲတက်ဆော်ခွင့်ရလိုက်လို့ ဟန်ဝင်းအောင် အားရပါးရ လိုးဆောင့်နေပေသည် ။ အေးအေးပွင့်မှာလည်းလင်ဖြစ်သူ ခြောက်စောင်း( ခေါ် ) မိုးလွင်ကို အိမ်ပေါ်က မောင်းမချခင်ထဲက တကျက်ကျက် ရန်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံမှု မရှိခဲ့ဘူး ဆိုတော့ယောက်ျားလီးနဲ့ ပြတ်လပ်နေခဲ့ရတာ ကြာပြီ။ ဟန်ဝင်းအောင်က ရုပ်ရည် သနားကမားနဲ့ သန့်ပြန့်တဲ့ အားကောင်းမောင်းသန် ကောင်လေး
လဲ ဖြစ် ဘတ်စကားပေါ်မှာ သူ့ဒုတ်အကြီးစားကြီးနဲ့ ဖိဖိညှောင့်ထောက် စောက်ပတ်ကိုလည်း ကိုင်တွယ်ကလိပေးခဲ့တော့ အိမ်ကို ခေါ်လာခဲ့ပြီး သူလိုးတာကို ငြင်းဆန်နိုင်စွမ်း မရှိဘဲ ခံမိလေသည် ။
သည်ကောင်လေးသည် လီးကြီးရုံ သက်သက် မဟုတ်ဘဲ လိုးလည်းလိုးတတ်..အားပါပါနဲ့လည်း ဆောင့်တတ်..ကြာကြာလဲ ထိန်းထားနိုင်တဲ့ ကောင်လေး မို့ အေးအေးပွင့် ကြိုက်သွားရသည် ။ သူမ ပြီးအောင်ပြင်းပြင်းနဲ့ စိပ်စိပ်လေး ဆောင့်လိုးပေးနိုင်တဲ့ ဒီကောင်လေးကို နောင်ကိုလည်း ဒါမျိုး အလိုးကောင်းတွေ
ထပ် လိုးပေဖို့ ချိန်းဆိုလိုက်ရတဲ့ အထိ ကြိုက်သွားခဲ့သည် ။
သို့သော် သူတို့နှစ်ယောက်လုံး မသိလိုက်တာက အေးအေးပွင့်ရဲ့ လင် ခြောက်စောင်း( ခေါ် ) မိုးလွင်သည် လမ်းထိပ်က လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ရှိနေတယ် ဆိုတာကိုပါဘဲ ။ သူ့မယား အေးအေးပွင့် က ကောင်လေးတယောက်နဲ့ လမ်းထဲ ချိုးကွေ့ ဝင်သွားကထဲက ခြောက်စောင်း မြင်လိုက်သည် ။ သုံးနာရီလောက်
ကြာပြီးတဲ့အခါ သည်ကောင်လေး ကုတ်ခြောင်းခြောင်းနဲ့ ပြန်ထွက်သွားသည် ။
အေးအေးပွင့်တယောက် ဒီကောင်လေးနဲ့ လိုးကြမှာ သေချာသည် ။ ဒီကောင်မ တော်တော် တဏှာကြီး
တဲ့ ကောင်မ..ဖေလိုးမ…ကိုယ်မေကိုယ်လိုးမ….။ ခြောက်စောင်း ဆဲရေးတိုင်းထွာနေသည် ။ အချောင် လာလိုးတဲ့ မအေလိုးကိုလည်း နှိပ်ရမည် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
ဟန်ဝင်းအောင်သည် အေးအေးပွင့်ကို သုံးချီ ကောင်းကောင်း လိုးလိုက်ပြီးနောက် အေးအေးပွင့်က မနက်ဖန်ကျရင် လာခဲ့မလားလို့ ခေါ်တဲ့အခါ ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ လာခဲ့မယ် လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။
ဖင်ကြီးထောင်ကုန်းပေးတဲ့ အေးအေးပွင့်ကို ဟန်ဝင်းအောင် စိတ်ကြိုက် လိုးပစ်ခဲ့တာတွေ အပြန်လမ်းမှာ သူ မြင်ယောင်မိနေရင်း မနက်ဖန်ကျရင် ချိန်းထားတဲ့ အချိန် ပြန်လာပြီး ထပ်လိုးဖို့ စဉ်းစားနေသည်။
သုံးချီတောင် လိုးခဲ့လို့ ဘတ်စကားပေါ်မှာ မိန်းကလေးတွေ များတာတောင် သူ လိုက်မထောက်နိုင်တော့ဘူး ။
နောက်တနေ့ ဟန်ဝင်းအောင် အေးအေးပွင့် အိမ်ကို ပြန်လာပြီး အေးအေးပွင့်နဲ့ တွေ့သည် ။ အေးအေးပွင့်က ဒီနေ့တော့ သူ့ကို ကုတင်ပေါ် ပက်လက် အိပ်ခိုင်းပြီး သူ့ဒုတ်ကို ကောင်းကောင်း စုတ်ပေးသည် ။ အေးအေးပွင့်သည် ပုလွေမှုတ် အရမ်းကျွမ်းတာကြောင့် ဟန်ဝင်းအောင် မထိန်းနိုင်ဘဲ
သုတ်ထွက်သွားခဲ့သည် ။ အေးအေးပွင့်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို သူ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်မိသည် ။
အေးအေးပွင့်လည်း သုတ်ရည်တွေကို တကွတ်ကွတ် မြိုချပစ်လိုက်သည် ။ “ ကောင်းလား..” လို့ မေး
လိုက်သည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း “ အရမ်းကောင်းတာဘဲ မမ..” လို့ ဖြေရင်း “ မမကိုရော ဘာဂျာကိုင်ပေးချင်တယ်….” လို့ ပြောလိုက်သောအခါ အေးအေးပွင့်က “ အို..မလုပ်နဲ့..မလုပ်နဲ့….” လို့
ငြင်းဆန်သည် ။ သို့ပေမယ့် ဟန်ဝင်းအောင်က အတင်းဘဲ ထမိန်ကို လှန်တင်ပြီး အရည်တွေ စိုရွှဲနေတဲ့ စောက်ပတ်ကြီးကို ကုန်းကာ မှုတ်ပေးလိုက်တော့ အေးအေးပွင့် သဘောကျသွားပြီး ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ မျက်နှာအပေါ်ကို တက်ခွထိုင်ကာ သူမစောက်ပတ်နဲ့ ဟန်ဝင်းအောင် မျက်နှာကို ဖိကာ ဖိကာ ပွတ်ပါလေတော့သည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ကလည်း အောက်က လျာကို အစွမ်းကုန် ထုတ်ပြီး အေးအေးပွင့် စောက်ပတ်ကို ပြန်ယက်သည် ..။ လျာနဲ့ ထိုးသည် ။
စိတ်တိုင်းကျ လိုးကြပြီးနောက် ဟန်ဝင်းအောင် ပြန်သည် ။ လမ်းထိပ်လည်း ရောက်ရော သူ့ဆီကို လူနှစ်ယောက် လျှောက်လာတာကို တွေ့လိုက်ရပြီး…“ ဟိတ် …ကောင်….ခွေးမသား ..ကြာကူလီ…သေပေတော့..” လို့ အော်သံနဲ့အတူ လျှောက်လာတဲ့ လူနှစ်ယောက်က ဘေးတဖက်တချက်ကနေ သူ့
ဆီကို ချဉ်းကပ်လာကြသည် ။
အခြေအနေ မဟန်တာကို သတိထားမိပြီ ။ သူ လစ်ဖို့ လုပ်ပေမယ့် ဒီလူနှစ်ယောက်က သူ့ကို ချုပ်ကိုင်ပြီးဓါးတွေနဲ့ ၀ိုင်းထိုးကြသည် ။ လက်နဲ့ တွန်းဖယ်ရုန်းကန်ပေမယ့် သူ့ဘိုက်ထဲကို ဓါးတွေ
ထိုးမိသည် ။ သူ့ဘိုက်သူလက်နဲ့ဖိပြီး ထွက်ပြေးသည် ။ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေက ဆေးရုံကို ပို့ပေးကြသည် ။ ကံအားလျှော်စွာ ဟန်ဝင်းအောင် မသေဘူး ။ သည်လို ခံရတာလည်း နောင်တာ မရဘူး ။ သင်္ခန်းစာ မရဘူး ။ နောက်ထပ် မိန်းမတွေကို ထပ်ထပ်ပြီး ကြံစည်ပြန်တာဘဲ ..။
ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ မိဘတွေ ဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင်နဲ့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့သည် ဟန်ဝင်းအောင် သည် ငယ်ငယ်လေးထဲက အခု ဆယ့်ရှစ်နှစ် ရောက်လာသည် အထိ အမျိုးမျိုးြ၈ိုလ်မွှေ ဒုက္ခပေးခဲ့တာကြောင့် ဟန်ဝင်းအောင်ကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိကြ ။ အိမ်မှာလည်း ပစ္စည်းတွေ ကို ခိုးလွန်းလို့ အံဆွဲတွေ ဘီဒိုတွေ အခန်းတွေကို သော့ခတ်ကြရသလို အလစ်လည်း မပေးရဲဘူး ။
လိမ်လွန်းလို့လည်း မျက်နှာပျက် အရှက်ရရတာ များနေပြီ ။ လျှော်ပေးရတာတွေလည်း များနေပြီ ။
ဟန်ဝင်းအောင်သည် ရွှေငွေ အဖိုးတန်ပစ္စည်း ခိုးလို့ မရရင် ရတဲ့ ထမိန် လုံချည်က အစ ခိုး ရောင်းသည် ။ စားပစ်သောက်ပစ် ဆေးရှူပစ်သည် ။ ဆယ်တန်း မအောင်ပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူ ကောလိပ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဆိုပြီး အမြဲ ပြောလေ့ရှိသည် ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဂိုက်ဖမ်းထားပြီး တက္ကသိုလ်တွေထဲက စားသောက်ဆိုင် လဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ထိုင်ထိုင်နေတတ် သည် ။ သည်လို
လုပ်နေလို့လည်း သူ့အတွက် အကျိုးထူးသည် ။
စုမိစံဆိုတဲ့ မိန်းကလေး တယောက် နဲ့သူ ညိသည် ။ စုမိစံနဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်သွားသည် ။
စုမိစံသည် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်နဲ့ ကိုရီးယားမလေး လိုလို ဂျပန်မလေး လိုလို ဒီဇိုင်းနဲ့ ကောင်မလေးပါ ..။
စုမိစံက သူ့ကို ကျောင်းသားဘဲ ထင်သည် ။ သူကလည်း ပိပိရိရိ လိမ်တတ်သည် ။ အတန်းပြီးသွားလို့ ကျောင်းခန်းထဲက ထွက်လာကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေထဲ ဟန်ဝင်းအောင် ပါတာကို စုမိစံ ခဏ ခဏ တွေ့ဖူးသည် ။ စုမိစံသည် ဥပတိရုပ်ကောင်းတဲ့ အနေအထိုင် သန့်ပြန့်တဲ့ ဟန်ဝငိးအောင်ကို အထင်ကြီးသည် ။
ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ အဖေကလည်း အစိုးရ ဝန်ထမ်း ရာထူးရှိသူ တယောက် ဆိုတော့ မျိုးရိုးကောင်း အဆင့်အတန်းနဲ့ နေသူ မိသားစုက ဆိုပြီး ဟန်ဝင်းအောင်ကို လက်ခံတာ ဖြစ်သည် ။
စုမိစံရဲ့ မိဘတွေက ငွေကြေးချမ်းသာ အဆင်ပြေတော့ စုမိစံသည် အဝတ်အစား အဖိုးတန်တွေ ဝတ်စားနိုင်သလို ငွေလည်း သုံးနိုင်သည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်သည် စုမိစံကို လူလည်းရမည်..ပစ္စည်းငွေကြေးလည်း ရမည် ဆိုပြီး ကြံစည်တာ ဖြစ်သည် ။ စုမိစံကတော့ မသိရှာ ။ ဟန်ဝင်းအောင်သည် ချစ်သူဖြစ်ပြီး တလ အကြာမှာဘဲ စုမိစံကို သူ့သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့
တိုက်ခန်းကို ခေါ်သွားသည် ။
ဒီတိုက်ခန်းသည် သူ့သူငယ်ချင်း ဇော်မင်းထိုက်ရဲ့ တိုက်ခန်း မဟုတ်ဘူး ။ ဇော်မင်းထိုက်သည် ကျူ ရှင်တခုမှာ စာရေး အလုပ်ကို လုပ်သည် ။ ဒီတိုက်ခန်းသည် ကျူရှင်ကျောင်းခန်းသာ ဖြစ်သည် ။ ညနေပိုင်း ကျူရှင်ကျောင်း ပြီးစီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ဇော်မင်းထိုက်က ကျောင်းခန်း နဲ့ ဆရာ နားနေခန်းလေးကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရသည် ။ လှည်းကျင်း ရှင်းလင်းရသည် ။ င်္ဒလို လုပ်ဖို့ အတွက် ဇော်မင်းထိုက်ကို ကျူရှင်ဆရာက တိုက်ခန်းသော့ ပေးထားသည် ။
ဇော်မင်းထိုက်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိဘတွေနဲ့ မြို့စွန် ရပ်ကွက်လေး တခုမှာ နေသူ ဖြစ်သည် ။ ကျူရှင် စာရေး အလုပ် လုပ်ပြီး ကျောင်းတက်နေသူ ဖြစ်သည် ။ ဟန်ဝင်းအောင် နဲ့ ဇော်မင်းထိုက်သည်
တနင်္ဂတွေ မနက်တိုင်း ရွှေတိဂုန်ဘုရား ရင်ပြင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်အားပေးတဲ့နေရာမှာ ဆုံသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်သည် သူ့ရဲ့ ပစ်မှတ်တွေကို နေရာတကာမှာ ရှာတတ်သည် ။ လုပ်အားလာပေးတဲ့
မိန်းကလေးတွေ ထဲမှာလည်း သူ ကပ်လို့ ရနိုင်မယ့်သူတွေကို ရှာဖွေဖို့ လုပ်ရင်းနဲ့ ရိုးသား သဘောကောင်းတဲ့ ဇော်မင်းထိုက်နဲ့ ခင်မင်သွားကြတာ ဖြစ်သည် ။ ဇော်မင်းထိုက်က သူ့အကြောင်းတွေ
ပြောပြခဲ့လို့ သူ့ကျူရှင်ကျောင်းသည် ညနေပိုင်းမှာ ပြီးဆုံးပြီး ဘယ်သူမှ မလာတော့ကြောင်းကို ဟန်ဝင်းအောင် သိသွားခဲ့ပြီး ဇော်မင်းထိုက်ကို အစားကျွေး လက်ဆောင်ပေးပြီး စည်းရုံးခဲ့သည် ။
စုမိစံကို ဇော်မင်းထိုက်ရဲ့ ကျူရှင်ကျောင်းကို သူ ခေါ်သွားသည် ။
ဇော်မင်းထိုက် ဆီက သော့ရထားတာကြောင်ံ ဟန်ဝင်းအောင် စုမိစံကို ခေါ်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်သူမှ ရှိမနေဘူး ။ ဆရာ နားနေတဲ့ အတွင်းခန်းလေးထဲမှာ စုမိစံနဲ့ ထိုင်ကြသည် ။ တိတ်ဆိတ်နေပြီး တိုက်ခန်းကြီး တခုလုံး သူတို့ နှစ်ယောက်ဘဲ ရှိနေခြင်းက စုမိစံကို စိတ်တွေ လှုပ်ရှားစေသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်သည် လိမ်ညာနေကျလူ ဖြစ်တာကြောင့် မှင်သေသည် ။ ဟန်ကောင်းသည် ။ ရိုးသား
ဖြူစင်တဲ့ ပုံစံ ဖမ်းထားသည် ။ စုမိစံကို အရမ်းကို မြတ်နိုး ချစ်ခင်တဲ့ ပုံစံလည်း ဖမ်းထားသည် ။
မိန်းမပေါင်းများစွာကို သူ ကြုံဖူး လုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကြောင့် မိန်းမတယောက်ကို ဘယ်လို နှူးနှပ်ရမလဲ ကိုင်တွယ်ရမလဲ သူ ကျွမ်းနေပြီ ။ ဘယ်လိုကိုင်ရင် ဘယ်လို စိတ်တွေ ထကြွလာမည်ကို သူ သိနေပြီ ဆိုတော့ စုမိစံကို မထိတထိလေးတွေ ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်တာတွေ နမ်းတာတွေ လုပ်တော့ စုမိစံသည် အတွေ့အကြုံကလည်း မရှိဘူးတဲ့ အပျိုဖျန်းမလေး တယောက်
မို့ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ အနမ်းတွေ အကိုင်အတွယ် အပွတ်အသပ်တွေကို သာယာမိသွားသည် ။ သူ့ကို တကယ် ချစ်တဲ့ ချစ်သူဆိုပြီး ချစ်သူရဲ့ အလိုကို လိုက်လျော တဲ့အနေနဲ့ ချစ်သူ နမ်းတာတွေ ကိုင်
တာတွေကို မတားဆီး..မကန့်ကွက် ။ ကြည်ဖြူစွာနဲ့ လက်ခံသည် ။
ဆရာ နားနေတဲ့ အခန်းလေးထဲက ကုတင်လေးပေါ်မှာ စုမိစံရဲ့ အကျ င်္ီလေးကိုရော ဘရာစီယာလေးကိုရော ဟန်ဝင်းအောင် ချွတ်ခွာသည် ။
“ ရှက်တယ် ကိုအောင်ရယ် ….”
စုမိစံရဲ့ မျက်နှာလေး နီရဲတွတ်နေသည် ။ အသားက ဖြူဆွတ်လွန်းနေလို့ ဖြစ်မည် ။ နို့လှလှတင်းကော့ကော့လေးတွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေတာ ..။
“ အို…ကိုအောင်ရယ်..စုမိ ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီး ဖြစ်လာတယ်ကွာ..တော်တော့်ကွာ..တော်လိုက်ကြရအောင် ….” လို့ စုမိစံက ဟန်ဝင်းအောင်ကို တောင်းပန်သည် ။ သို့ပေမယ့် စားနေကျ ကြောင်ပါး
ဟန်ဝင်းအောင်က မရပ်ဘူး ။ နို့သီးခေါင်း နီနီလေးတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေနဲ့ ဖွဖွလေး နမ်းနေသည် ။ တချက်တချက် လျာထိပ်နဲ့ တို့ထိသည် ။ ထိုးသည် ။ ယက်သည် ။
“ ဟင့်ဟင့်..ကိုအောင်….ကိုအောင် သိပ်တတ်တာဘဲကွာ…စုမိကို သူဆွတတ်တယ်…..”
စုမိစံ မျက်လုံးလေးတွေ စုံမှိတ်ထားပြီး ဟန်ဝင်းအောင်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထားရင်း သူမနိူ့တွေကို ကလိပေးနေတာတွေကို ခံယူနေသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင် တဖြေးဖြေးနဲ့ စုမိစံရဲ့ နို့တွေကို စို့ပေး
လာသလို သူ့လက်တဖက်ကလည်း စုမိစံရဲ့ ဖင်တွေကို ပွတ်သပ်နေသည် ။တခုပြီး တခု နယ်ကျူးလာတာကို စုမိစံ သတိမပြုမိ ။ နို့တွေကို တဖက်ပြီး တဖက် စို့ရင်း စုမိစံရဲ့ လျော့ရည်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့
ထမိန်စလေးကို ဖြေချလိုက်သည် ။
“ ဟိတ်..ကိုအောင်..ဘာလုပ်တာလဲကွယ် …..”
စုမိစံ က လက်နဲ့ လှမ်းဆွဲလိုက်ပေမယ့် မမှီလိုက် ။ ထမိန်လေး ပြေကျွတ်သွားသည် ။
“ ရှက်ပါတယ်ဆိုကွာ..ကိုအောင် လူဆိုး….ကဲလွန်းတယ် ….”
ပေါင်တန်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေကို ဟန်ဝင်းအောင် ပွတ်နေသည် ။
“ စုမိ….လှဲအိပ်လိုက် …”
ဟန်ဝင်းအောင် ခိုင်းစေတာကို စုမိစံ ဘာလို့ နားထောင်ပြီး လုပ်မိသလဲ မသိဘူး ။ ကုတင်လေးပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်နေပြီ ။ထမိန်ကလည်း ကျွတ်နေပြီ ။ ပင်တီဖြူဖြူလေးရဲ့ အလည်ဂွဆုံနေရာလေးသည် စိုစိုရွှဲနေသည် ။ စုမိစံ စိတ်တွေ တအား ထကြွနေသည် ။ သဘာဝစိတ် ထကြွမှုကြောင့် ပေါင်ကြား မိန်းမကိုယ် အဖုတ်လေးလဲ ဖေါင်းကြွပြီး ယားယံလွန်းနေသည် ။
နို့သီးလေးတွေကို ဟန်ဝင်းအောင် အစို့ မပျက်ဘဲ ပင်တီပေါ်ကနေပြီး ပေါင်ဂွကြားမို့ဖေါင်းဖေါင်း အဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးနေသည် ။ စိုမိစံသည် အရည်တွေ ထွက်ပြီးရင်း ထွက်နေသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေက အကွဲကြောင်းကို လိုင်းဆွဲပေးနေကြသည် ။
“ ကိုအောင်..တော်ကြစို့ကွာ..လွန်ကုန်ပြီ ထင်တယ်…..”
စုမိစံက တုန်ရီတဲ့ အသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ တကယ်တမ်းကျတော့ စုမိစံ သူလုပ်နေတာတွေကို မရပ်လိုက်စေချင်ဘူး ။ စိတ်ထဲမှာ မလုပ်သင့်မှန်း သိပေမယ့် ငြ်းလည်း မငြ်းဆန်နိုင်ဘူး ။
ဒါကို ဟန်ဝင်းအောင်ကလည်း သိသည် ။
“ စုမိ ကိုအောင့်ကို ချစ်တယ် မဟုတ်လား…..”
“ ကိုအောင်ကလည်း စုမိကို အရမ်းချစ်တယ်…ဘာလိုသေးလဲ စုမိ…ကိုအောင်နဲ့ စုမိကြားမှာ အချစ်ဘဲ ရှိတယ်….”
“ ချစ်တယ်..ကိုအောင်….ခုလိုတွေ လုပ်ဖို့..ကောင်းပါ့မလား..သိပ် လွန်နေလား မသိဘူး……”
စုမိစံ ပြောနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ ပင်တီဘောင်းဘီအဖြူလေးသည် ဟန်ဝင်းအောင် ဆွဲချွတ်လိုက်လို့ ကျွတ်ထွက်သွားပြီ ။
အမွှေးလေးတွေ ပါးပါးကျဲကျဲ ပေါက်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်လေးကို ဟန်ဝင်းအောင် တွေ့လိုက်ရသည် ။
စိနေတဲ့ အကွဲကြောင်း နှုတ်ခမ်းသားနီနီလေးတွေ က လှလွန်းနေသည် ။
စုမိစံရဲ့ လက်တဖက်က ပေါင်ကြားနေရာကို ရောက်သွားသည် ။ သူမ ပင်တီကတော့ အဲဒီနေရာမှာ မရှိတော့ဘူး ။ သူမ စမ်းမိလိုက်တာက ပူပူနွေးနွေး လိင်တန်ဆာချောင်းကြီး ဖြစ်နေသည် ။ သူမ
လက်ကလေးကို ပြန်ရုတ်သိမ်းဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လက်က သူမလက်ကလေးကို အုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပြီး အတန်ချောင်းကြီးပေါ်ကို ပြန်ပို့ပေးလိုက်သည် ။
စုမိစံ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည် ။
“ ကိုင်ထား..ဆုပ်ပေး…ပွတ်ပေး..ဒါ စုမိရဲ့ ဟာကြီး…”
စုမိစံ သူ့စကားကို နားထောင်မိပြန်သည် ။ သူ့အတန်ကြီးကို စုမိစံ သူခိုင်းသလိုဘဲ ဆုပ်နယ်လိုက် ပွတ်သပ်လိုက် လုပ်နေမိသည် ။ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ ပါ ။ စုမိစံ တခါဘူးမှ ယောက်ျားလိင်ချောင်းကို ကိုင်ဖို့ နေနေသာသာ မြင်တောင် မမြင်ဘူးခဲ့ ။ အခုလည်း မျက်လုံး စုံမှိတ်ပြီး ကိုင်တွယ်နေတာ ဖြစ်သည် ။ စိတ်ထဲမှာတော့ တွေ့လည်း တွေ့ဖူးချင်လာသည် ။
မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည် ။ ဟယ်တော့..နီညိုညို လိင်တန်ကြီးရဲ့ ထိပ်ဖူးကြီးက ပြဲလန်နေသည် ။ အမွှေးဖွားဖွားကြားက ဒုံးပျံကြီးတချောင်းလို မာကျောမတ်တောင်နေတဲ့ တန်ဆာချောင်း
ကြီးသည် အကြောကြီးတွေ ထောင်ထနေသည် ။ ထိပ်က အပေါက်လေးက အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက် စီးကျနေသည် ။
အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း တိုးတိုး ပြောပြောပြတာတွေကို ဖျတ်ကနဲ သတိရလိုက်သည် ။ တိုးတိုးက ဘဲတွေ များသည် ။ တော်တော် များခဲ့သည် ။ မျိုးစုံ ကြုံဘူးသည် ။ စုမိစံကို သူ့အတွေ့အကြုံတွေ ပြောပြဖူးသည် ။ ခဏခဏ ပြောပြသည် ။ တိုးတိုးက သူ့ဘဲတွေကို စုတ်ပေးခဲ့တာတွေကို ပြောပြဖူးသည် ။ စုမိစံကို မြန်မာအပြာစာအုပ်တအုပ်လည်း ပေးဖတ်ခဲ့သည် ။ စုမိစံ
အခုတော့ လက်တွေ့ တွေ့နေရပြီ ။ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လိင်တန် ပူပူနွေးနွေးကြီးကို လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားမိရက်ာကီး ဖြစ်နေပြီ ။ သူ..သူ..ကိုအောင်..စုမိကို သူ့ဟာကြီးကိုများ စုတ်ခိုင်းနေအုံးမှာလား…။
ဟန်ဝင်းအောင်က စုမိစံကို သူ့ပစ္စည်းကြီးကို မစုတ်ခိုင်းသေးပါ ။ ဟန်ဝင်းအောင် စုတ်လိုက်တာက စုမိစံရဲ့ အင်္ဂါစပ်က အစိလေးကိုပါဘဲ…။
စုမိစံ ခါးလေးကော့တက်ပြီး တကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်ခါအောင် တုန်နေရသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လျာထိပ်ချွန်ချွန်က စုမိစံရဲ့ အစိလေးကို တွန်းထိုးနေသည် ။ အရည်တွေက ရမ်းကို စိမ့်ထွက်နေသည် ။
“ အာ..အာ..အာ….အာ….ကို…ကို…ကို……ကိုအောင် ……အို….အို….အို ………..”
ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လျာပြားကြီးက အောက်ဖက်ကနေ အထက်ကို ယက်ယက်တင်နေသည် ။ စုမိစံ တုန်ခါနေသည် ။ တိုးတိုး ပြောပြတဲ့ ဘာဂျာ မှုတ်ခံရတာ အရမ်း ကောင်းလွန်းတယ် ဆိုတာကို အခု
စုမိစံကိုယ်တိုင် ကြုံနေရလို့ ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်နေရပြီ ။
စုမိစံရဲ့စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက်ကို သူ့လက်နဲ့ ဆွဲဖြဲပြီး သူ့လျာကြီးကို အတွင်းထိ ထိုးထိုးမွှေပေးနေတာ…။
သူ ကလိတာတွေကြောင့် စုမိစံ သူ့အတန်ချောင်း တုတ်တုတ်ကြီးကို စုမိစံရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို ထိုးသွင်းစေချင်လှပြီ ။ ပြောရမှာလည်း ရှက်မိလို့ ပြောမထွက်တဲ့အချိန် သူ့လျာကြီးက အတင်းကြီးကို ယက်လိုက် ထိုးလိုက် လုပ်နေတော့တာဘဲ ..။
“ တော်..တော်ပြီ…ကိုအောင်…တော်တော့ကွယ် …….”
ဆက် မခံနိုင်တော့ဘူး ။ စုမိစံ ယားလှပြီ ။ စောက်ပတ်အခေါင်းထဲက တအားကို လှိုက်လှိုက် ယားနေတယ် ။ ကိုအောင့် လီးကြီးနဲ့ ထိုးထည့်ဆောင့်စေချင်လှပြီ ။ နုတ်က ပြောထွက်တဲ့ စကားတွေ မဟုတ်ပါဘူး ။ စုမိစံ စိတ်ထဲက ပြောနေတာတွေ ပါ ..။
ဟန်ဝင်းအောင်သည် ဘာဂျာကိုင်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး စုမိစံရဲ့ အဖုတ်ကို လိုးဖို့ အချိန်တန်နေပြီ ဆိုတာ သိလိုက်သည် ။ သဘောပေါက်သည် ။
စုမိစံ စောက်ဖုတ်က သူ့မျက်နှာကို ခွာကာ ထလိုက်သည် ။ စုမိစံရဲ့ မျက်လုံးလေးလည်း ပိတ်ထားရာက ဖျတ်ကနဲ ပွင့်လာသည် ။ အို..ကိုအောင်…သူမ စောက်ပတ်ကို လိုးထည့်ဖို့ သူမပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲကားနေသည် ။ လီးတုတ်တုတ်ကြီးကလည်း တဆတ်ဆတ် ခါနေသည် ။ တကယ်တမ်း အလိုးခံရတော့မယ် ဆိုတော့လည်း စုမိစံ လန့်နေသည် ။
ဒစ်ပြဲလန်ကြီးနဲ့ လီးထိပ်ဖူးကြီး သည် စုမိစံရဲ့ စောက်ဖုတ်အဝမှာ လာထိတေ့သည် ။
“ အိ ”
ဆတ်ကနဲ တုန်သွားတဲ့ စုမိစံကို ဟန်ဝင်းအောင်က သဘောကျစွာ စိုက်ကြည့်ရင်း သူ့လီးထိပ်ဖူးကြီးကို ထိုးသွင်းထည့်လိုက်သည် ။
အရည်တွေ နစ်နေအောင် ရွှဲနေတာကြောင့် ချောချောမွှတ်မွှတ်ဘဲ လထစ်ကြီးသည် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ကြားက စပ်ယှက်ပေါက်ထဲကို တိုးဝင်သွားသည် ။ စုမိစံ ပါးစပ်လေး ဟသွားပြီး သူမဘေး တဖက်တချက်မှာ ထောက်ထားတဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လက်တွေကို ဖမ်းဆုပ်ကာ ကိုင်လိုက်သည် ။
စိုအိနေတဲ့ စောက်ပတ်အတွင်းက အသားနုနုလေးတွေထဲ ထိပ်ဖူးကြီး ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ရောက်နေတာက ဟန်ဝင်းအောင်ကို အတွေ့ထူးစေသည် ။ ဖြေးဖြေးချင်း ထိုးလိုက် နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်နဲ့
ကစားပေးနေတော့ စုမိစံ တဟင်ဟင် တဟာဟာနဲ့ ဖင်တွေ မြောက်ကြွသွားလိုက် ပေါင်တန်တွေ ထောင်လာလိုက်နဲ့ ယောက်ျားလီးနဲ့ စစချင်း ကြုံဖူးနေရပြီ ။
ဟန်ဝင်းအောင်သည် စုမိစံက သူ့ကို စွဲသွားအောင် ကာမပညာစွမ်းတွေ ကို တခုပြီးတခု ပြသနေတာ ဖြစ်သည် ။ ဒီကောင်မလေး သူ့ကို စွဲသွားလျှင် သူ လိမ်ညာပြီး အရ ချိုင်တော့မှာလေ ..။
သူ အချိန်မဆွဲတတ် ။ နောက်တခါ ဆိုတာ မရေရာ မသေချာဘူး မဟုတ်လား ။ ဒီနေ့ဘဲ စချိန်း..ဒီနေ့ဘဲ ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည် ။ စောက်ပတ်ထဲမှာ လီးတပ်ရက်နဲ့ နို့စူစူလုံးလုံးလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ညှစ်လိုက် နို့သီးလေးတွေကို စို့ပေးလိုက် ကစားနေပြန်သည် ။ ခဏကြာမှ ပြန်ဖိသွင်းလိုက်သည် ။ သွင်းလိုက် ဆုတ်လိုက် အကြိမ်များစွာနဲ့ လုပ်ပေးတော့ စုမိစံ ခံနိုင်လာသည် ။ လီးတုတ်ကြီး စုမိစံရဲ့ အဖုတ်ထဲမှာ မင်းမူနေပြီ ။ စုမိစံသည် ထင်ထားသလောက် မနာကျင်ဘဲ ချစ်သူရဲ့ လိင်တန်ကို သူမ လက်ခံနိုင်တာကို အံ့သြ ကျေနပ်မိနေသည် ။
ဟန်ဝင်းအောင်ကလည်း အပျိုစင် ငယ်ငယ်ချောချာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးကို တက်လုပ်နေရလို့ အရမ်း ပီတိဖြာ ကျေနပ်နေသည် ။ ကျဉ်းကြပ်လှတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးထဲ ဖိဖိဆောင့်ရင်း ဖြူဖွေး လှပ အချိုးကျတဲ့ စုမိစံရဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး ကိုယ်ခန္ဓာလေးကို အရသာခံ ကြည့်နေသည် ။ တတ်နိုင်ရင် ဗီဒီယိုတောင် ရိုက်ထားလိုက်ချင်သည် ။ အင်း..အင်း..အင်း..နဲ့ အားယူကာ ဆောင့်ထည့်ပစ်လိုက်တော့ စုမိစံ တအားကောင်းတက်ပြီး ကော့လန်တက်သွားသလို ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လီးထိပ်ပေါက်က အရည်ပျစ်ပျစ်တွေ ဒလဟော ပန်းထွက်ကုန်သည် ။
“ အား..ဟားဟားဟား……..အိုး..ကောင်း…ကောင်းလိုက်တာ…စုမိရယ်………စုမိကော ကောင်းလားဟင်…..”
ဟန်ဝင်းအောင် နဲ့ စုမိစံ တိုက်ခန်းပေါ်က ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတဲ့အချိန် စုမိစံရဲ့ စောက်ပတ်လေး ကျိန်းစပ်နေတာကြောင့် စုမိစံ မနည်း ခြေလှမ်း လှမ်းနေရသည် ။
“ ကိုအောင် သိပ်ကြမ်းတာဘဲ..စုမိ အခု အရမ်း စပ်နေတယ်..သိလား …”
စုမိစံက ဟန်ဝင်းအောင်ကို ပြောလိုက်ပြီး လက်သီးဆုပ်လေးနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ ပုခုံးကို ထုလိုက်သည် ။
စုမိစံကို မပြန်ခင် ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ဝင်စားကြတဲ့ အချိန် ဟန်ဝင်းအောင်သည် ကျောင်းလခ လိုသည် ဆိုပြီး ပိုက်ဆံ ဖန်သည် ။ စုမိစံကလည်း တယောက်နဲ့ တယောက် အဆုံးစွန်အထိ ရင်းနှီးပြီးကြတဲ့ ချစ်သူတွေမို့ ဘာသံသယမှ မရှိဘူး ။ ချက်ချင်းဘဲ ထုတ်ပေးသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်သည် အစပျိုး စမ်းလိုက်တာ ဖြစ်သည် ။
စုမိစံ ဆီက ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အခန်း ကြံဖန်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်း ဇော်မင်းထိုက်ကို ထမင်းလိုက်ကျွေးသလို သူလဲ ဘီယာတွေသောက်သည် ။
ညပိုင်းရောက်တော့ စုမိစံ သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်သည် ။ စုမိစံသည် ဟန်ဝင်းအောင် တွက်ဆထားသလိုဘဲ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ အဆုံးစွန်အထိ ဖြစ်ပျက်ပြီးသွားသောအခါ ဟန်ဝင်းအောင်ကို ခိုက်သွားသည် ။ စွဲသွားသည် ။
“ ကိုအောင့်ကိုဘဲ သတ်ရနေတယ်..ကိုအောင့်ကို အရမ်း လွမ်းနေတယ်..ကိုအောင်နဲ့ ထပ် တွေ့ချင်တယ်…” လို့ ဖီလင်သံလေးနဲ့ တတွတ်တွတ် ပြောဆိုနေပြီလေ …။
ကျောင်းက စားသောက်ဆိုင်မှာ ပြန်ဆုံကြတော့ စုမိစံကိုက ဟန်ဝင်းအောင်ကို နောက်ထပ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ကြရအောင်လို့ စပြောလာတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင် အနေနဲ့က ခုတွေ့ချင် ခုချက်ချင်း သွားတွေ့လို့ ရတာ မဟုတ်ဘူး ။ ဇော်မင်းထိုက်ကို ဖုန်းဆက်..သူက ကျူရှင် မရှိတဲ့ ညနေပိုင်းမှာ လာခဲ့ဖို့ ပြောမှ သူက စုမိစံကို တခါ ထပ် ချိန်းရတာ ။ ကျူရှင် ဆရာကလည်း တချို့နေ့တွေမှာ အချိန်ပို သင်တတ်တော့ ဒီလိုနေ့တွေ ဆိုရင် အခန်းက မအားဘူးပေါ့ ။
ဒုတိယ တခါ ချိန်းတွေ့ကြတော့ ဟန်ဝင်းအောင်သည် တွေ့တွေ့ချင်းဘဲ စုမိစံရဲ့ လက်ကလေးကို သူ ဆွဲယူပြီး ချွတ်ချလိုက်လို့ ဘွားကနဲ ပေါ်လာတဲ့ သူ့လိင်ချောင်းတုတ်တုတ်ကြီး အပေါ်ကို တင်ပေးလိုက်တယ် ။ ဟိုတခါထဲက လိင်ချောင်းကြီးကို ကိုင်ဆုပ် ကစားပါတော့တယ် ။
“ ကိုအောင်က ဟိုတခါ ပြေတာ စုမိစံ နားမလည်ဘူး..ဒါက စုမိစံရဲ့ ဒုတ်ကြီးတဲ့..ဒါ ကိုအောင့် ဒုတ်ဘဲဟာ…စုမိစံ ဒုတ် ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မလဲ….”
ဟန်ဝင်းအောင်က ရယ်မောလိုက်ပြီး….“ စုမိစံကို ကိုအောင်က အပိုင်ပေးလိုက်ပြီလေ ..ဒါ စုမိစံရဲ့ ဒုတ်..ဖြစ်သွားပြီ..ဆိုလိုတာက စုမိစံ ကြိုက်တဲ့အချိန် သုံးနိုင်ပြီ…စုမိစံအတွက်…စုမိစံကို ချစ်ပေးမယ့် ဒုတ်ကြီးလို့ပါ …..ကဲ..စုမိစံ စုတ်ချင်လည်း စုတ်လို့ရတယ် …”လို့ ပြောလိုက်သောအခါ စုမိစံလည်း ဖျစ်ညှစ်ကိုင်တွယ်နေရာမှ “ စုမိ မစုတ်တတ်ဘူး …စုမိမှ တခါဘူးမှ ယောက်ျားတယောက်နဲ့ ရည်းစား မထားဘူးတာကို ကိုအောင်ကလဲ..”လို့ မျက်စောင်းလေး ထိုးကာ ပြောလိုက်တယ် ။
“ အရင်က မထားဖူးပေမယ့် အခု ထားဖူးနေပြီးပြီလေ …ကဲ..လာ..လာ..စုမိ..ကိုအောင် ဘယ်လို စုတ်ပေးရတယ် ဆိုတာ လက်တွေ့ ပြမယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်က စုမိစံရဲ့ လက်ညှိုးလေးကို ညင်သာစွာနဲ့ သူ့လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ကာ ဆွဲယူလိုက်ပြီး ဒီလက်ညှိုးလေးကို သူ့ပါးစပ်ထဲ ငုံလိုက်ပြီး စုတ်ပြသည် ။ လျာ
နဲ့ ထိုးကလိပြသည် ။
“ ကဲ..အဲလိုဘဲ ကိုအောင့်လီးကို စမ်းစုတ်ကြည့်…စုမိစံ….”
စုမိစံလည်း တုတ်တုတ်ခဲခဲ လီးတန်ကြီးကို သူပြပေးတဲ့အတိုင်း စမ်း စုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ် ..။
“ လျာလေးနဲ့ ထိုးပေး..ကစားပေး..လူးလှိမ့်ပေး..စုမိစံ….”
ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ သင်ပြမှုနဲ့ စုမိစံ လိင်ချောင်းကြီးကို စုတ်တတ်လာတယ် ။ ဒီနေ့ ဟန်ဝင်းအောင်က
စောက်ပတ်ကို ကောင်းကောင်း ယက်ပေးသလို လိုးလည်း လိုးပေးတယ် ။ စုမိစံ သူ့ကို ရေရေလည်လည် ခိုက်သွားရပြီ ။ဟန်ဝင်းအောင်က စုမိစံကို ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး လိုးတယ် ။ စောက်ပတ် ယက်ရင်းလည်း ဖင်ပေါက်ကိုပါ သူ လျာနဲ့ ဆွတယ် ။ ယက်လည်း ယက်တယ် ။ စုမိစံ
မရိပ်စားမိတာက ဟန်ဝင်းအောင်သည် စုမိစံကို ဖင်ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစား လမ်းဖေါက်နေတာကိုပါဘဲ ။
ကောင်မလေးလည်း သူ့ကို ခိုက်သွား စွဲသွားရော ကောင်မလေးဆီက ဖန်တော့တာဘဲ ။ စုမိစံသည်
အချစ်မှာ မွှန်ထွန်ပြီး သူ့မှာ ရှိတာတွေ ဟန်ဝင်းအောင်ကို ထုတ်ပေးတော့တာဘဲ ။ ဟန်ဝင်းအောင် ဝတ်ဖို့ အဝတ်အစားတွေ..ရွှေဟန်းချိန်း..လက်ပတ်နာရီ ..နေကာမျက်မှန် အကုန် ဝယ်ပေးတော့တာဘဲ။
ဟန်ဝင်းအောင်က သူများနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရင်လည်း “ ငါ့လက်ထပ်မယ့် ဇနီးလောင်း…” လို့ ပြောတာကိုလည်း စုမိစံ တအား သဘောကျမိတယ် ။
ကျူရှင်ကျောင်းမှာ လိုးကြရတာကို နောက်ပိုင်း မလုပ်ချင်တော့ဘူး ။ သူများ ရုတ်တရက် ရောက်လာရင်
ကိုယ်တုံးလုံးတွေနဲ့မို့ အခက်တွေ့မယ်လေ ။
ဒါကြောင့် ဒက်ဒီတို့ မာမီတို့ နယ်သွားကြတဲ့ ရက်တွေမှာ ဟန်ဝင်းအောင်ကို သူတို့ နေတဲ့ အိမ်ကိုလာခိုင်းလိုက်တယ် ။ အိမ်ဖေါ်နဲ့ ထမင်းချက်တို့ အိမ်မှာ ရှိနေပေမယ့် စုမိစံကို သူတို့ ကြောက်ကြရ
တယ် ။ စုမိစံ ဘာလုပ်လုပ် မသိချင်ယောင်ဘဲ ဆောင်နေကြတဲ့ လူတွေပါ ..။
ဟန်ဝင်းအောင်သည် စုမိစံတို့ အိမ်ပေါ်မှာ စုမိစံကို တဝ လိုးပါတော့တယ် ။ စုမိစံကလည်း ကြိုက်တယ်။
စုမိစံမိဘတွေ ဘာတွေ ရှိတယ် ဆိုတာလည်း ဟန်ဝင်းအောင် လေ့လာလို့ ရသွားတယ် ။ မြွေပွေး ခါးပိုက်ပိုက်မိနေတယ် ဆိုတာ စုမိစံလေးကတော့ မသိဘူး ။
ဒီအတောအတွင်းမှာ စုမိစံကို ကျောင်းဝင်းထဲ သွားသွားစောင့်ရင်း ကျောင်းဝင်းထဲက လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ“နပိုလီယန် ” ဆိုတဲ့ သူ့လိုလူတယောက်နဲ့ ဆုံမိပြီး ဘော်ဒါ ဖြစ်သွားတယ် ။ “ နပိုလီယန် ” က ကမ္ဘာကျော် စစ်သူကြီး နပိုလီယန်လိုဘဲ အရပ်ပုတယ် ။ အသားညိုညို ဆံပင်ရှည်ကောက်ကောက် နပိုလီယန်က ရုပ်ရှင်မင်းသား ဒွေးလိုလို သားညီလိုလို ပုံစံ ..။ ဂျင်းဘောင်းဘီခပ်စုတ်စုတ်ကို ဝတ်ထားတတ်တယ် ။
သူ့ကိုယ်သူ တခါတလေ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာသလိုလို..သင်္ဘောသားလိုလို ပြောဆို ဂိုက်ဖမ်းတတ်တယ် ။
မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်ကြတယ် ။ ၀ါသနာတူ စရိုက်တူချင်း တွေ့ကြပြီ ..။
နပိုလီယန်က ကျောင်းသားအစစ်ပါ ။ သို့ပေမယ့် ကျောင်းထဲ လာပြီး လဖက်ရည်ဆိုင် ကင်တင်းဘဲ ထိုင်တဲ့ လူ ။ စာသင်ချင်တာထက် လူတွေကို ညာစားချင်နေတယ် ။ သူက ဟန်ဝင်းအောင် ကျောင်းသား အစစ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သိနေတယ် ။
“ ခင်ဗျား..စော် ရေရေလည်လည် မိုက်တယ်ဗျာ..ခင်ဗျား..သူ့ကို တကယ် မကြိုက်ပါဘူးလေ..ကျနော် သိနေတယ် ..ခင်ဗျား..တခုခု သူ့ဆီက လိုချင်လို့ ကြိုက်ချင်ယောင် ဆောင်နေတာပါ..” လို့ ဒဲ့ဒိုးကြီး သူ့ကိုပြောတယ် ။
“ ကျနော် နဲ့ ခင်ဗျား ပေါင်းလိုက်ရင် မိုးဘယက်က ကြွက်ကြွက်ညံ ဆိုသလို ဖြစ်ကုန်မယ်…ကျနော့်ရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ ခင်ဗျား လှုပ်ရှားလိုက်ရင် နှစ်ယောက်စလုံး အတွက် အိုကေစိုပြေလိမ့်မယ် ..ဘယ်လို
လဲ..ပေါင်းပြီး ရိုက်လိုက်ကြမလား ….ဟန်ဝင်းအောင်…” လို့ ပြောလာတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်ကလည်း စိမ်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်အထိ တက်ရဲတဲ့ကောင် ဆိုတော့ “ လုပ်လိုက်လေ..ကြာသလား …” ဘဲ ။ နပိုလီယန်က သူ့အမတွေ နေတဲ့ ရပ်ကွက်တခုကို ဟန်ဝင်းအောင်ကို ခေါ်သွားတယ် ။
အခု ပုံအတိုင်းတော့ မဟုတ်ဘူး ။ ပုံပြောင်းရတယ် ။ နိုင်ငံခြား ဆန်ဆန် ဝတ်စားရတယ် ။ စကားပြောရင် မြန်မာစကားကို မပီကလာ ပီကလာ လုပ်ပြော..ဘိုလို ဒွတ်ဒက်ရွှတ်ရှက်တွေ ပြောရတယ် ။
မြန်မာငွေကို မသုံးတတ်သလို ဟန်ဆောင်ရတယ် ။ အိတ်ထဲမှာလည်း ဒေါ်လာ တရာတန်တွေ ထည့်ထားရတယ် ။ ပြီးတော့ နံမည် ။ ဟန်ဝင်းအောင် မဟုတ်တော့ဘဲ ..ရော်နယ်လ်မင်းအောင် ..လို့ပြောင်းလိုက်ရတယ် ။
နပိုလီယန်က သူ့အမတွေကို ရော်နယ်လ်မင်းအောင်က ယူအက်စ်အေ လယ်လ်အေ က ခဏ လာလည်တာ..သူ့အလုပ်က သိပ်ကောင်းတာ ..မြန်မာဝန်ထမ်းတွေ သူ့အလုပ်မှာ ခန့်ပေးနိုင်တယ်….ဘာညာ နဲ့ညာတော့တာဘဲ..။ ဟန်ဝင်းအောင်သည် ၁၉နှစ်သာသာ ချာတိတ်တကောင်ဘဲ ဖြစ်ပေမယ့် နပိုလီယန်က အသက်ပိုကြီးတယ် လို့ ညာထားတယ် ။ နပိုလီယန်ရဲ့ အမတွေက သူတို့ ရပ်ကွက်ထဲက ယူအက်စ်ကို သွား အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေကို ရှာပေးတယ် ။ နပိုလီယန်က တယောက်ကို အနည်းဆုံး ၁ဝသိန်းကုန်ကျမယ်…ဘာညာ နဲ့ ဖန်တယ် ။ ခဏချင်းမှာဘဲ လုပ်ချင်သူ သွားချင်သူတွေ တအောကြီး တထောကြီး ရလိုက်တယ် ။ ငွေတွေလည်း တပုံတခေါင်းကြီး ရလိုက်တယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင် ယူအက်စ်ကို ပြန်ထွက်သွားပြီး ခေါ်စာတွေ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ပို့မယ် လို့ ညာလိုက်ကြပြီး ဟန်ဝင်းအောင် ကိုယ်ရောင် ဖျောက်သွားလိုက်တယ် ။ နဂိုထဲက သူတို့ အကွက်ဆင်
ထားတာကို သူတို့ လုပ်ကြတာဘဲလေ ။
တလ လည်း မထွက်ရ နှစ်လ လည်း မထွက်ရ…အယ်လ်အေ မရောက်ဘဲ လူတွေ အလိမ်ခံရလို့ ပူညံပူညံတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး နပိုလီယန့်အမတွေကို မဲကြတော့တာပေါ့ ။ နပိုလီယန်လည်း အိမ်က
ဒိုးတော့တာဘဲ ။ နဲနဲ ပေါက်ရောက်တဲ့ လူတယောက်က သူ့သမီး ခံလိုက်ရလို့ မကျေနပ်ဘဲ ရဲကို တိုင်တယ် ။
ရဲက နပိုလီယန်ကို အပူတပြင်း လိုက်ရှာကြတော့တာပေါ့ ။
နပိုလီယန်နဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်တို့က ရလိုက်တဲ့ ငွေသိန်းပေါင်း တော်တော်များများကို ကိုင်ပြီး ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွေ..တောင်စခန်းမြို့တွေမှာ သူတို့ကိုယ်ကို သူတို့ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးတွေလို အိုက်
တင်ဖမ်းထားပြီး သုံးစွဲနေကြတယ် ။ ဘီယာသောက် ဖဲရိုက် ဖါမတွေ ခေါ်နဲ့ ပျော်လို့မဆုံး ပြုံးလို့ မဝကြဘူး ။
ဟန်ဝင်းအောင် ဉာဏ်စိုးနဲ့အတူ ( စတေးရှောင် ) ရင်း ငပလီကမ်းခြေမှာ သူတို့လိုဘဲ ဖိုးတွမ်တီး လိုက်လုပ်နေတဲ့ အုပ်စုတစု နဲ့ တွေ့ဆုံ ခင်မင်သွားတယ် ။
ဒီအုပ်စုထဲက ညိုညိုညိမ်း ဆိုတဲ့ စော်လေးနဲ့သူ ဆုံတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းက သူ့လိုဘဲ ဖိုးတွမ်တီး ရိုက်စားနေတဲ့ စော်လေး ။
မဆိုးပါဘူး ..။ အသားညိုညက်ညက် နဲ့ကိုယ်လုံးက ရှယ်ဘဲ ..။
ဘဝတူ ဆိုတော့ ပေါင်းမိဖို့ ပို လွယ်ကူတယ်လေ ။ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ဟန်ဝင်းအောင် ပေါင်းပြီး ဂွင်ဖန်ပါလား လို့ ဉာဏ်စိုးက အကြံပေးတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းရဲ့ ဘော်ဒါတွေကလည်း သဘောတူတယ် ။
ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့က လိမ်လည်မှုလောက်ကို သေသေချာချာ မလိုက်ကြဘူး ။ နီးနီးနားနား ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကိုယ့်မြို့နယ်လောက် ဆိုရင်တော့ လိုက်ဖမ်းမှာ ။ အမှုတိုင်တဲ့လူတွေဖက်က စားရိတ် အကုန်အကျခံပြီး အပိုကြေးလည်း ထပ်ဆောင်းပေးတော့ ပါးနပ်လျင်မြန်တဲ့ ရဲတယောက်က နပိုလီယန်နဲ့ ဟန်ဝင်းအောင် နောက်ကို လိုက်ပေးတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်တို့ နှစ်ယောက်ကလည်း လာဖမ်းတဲ့ ရဲကို ငွေပေးပြီး လွတ်မြောက်ရာ လွတ်မြောက်ကြောင်း အတွက် ကြိုးစားပေမယ့် ဒီရဲက မယူဘူး ။ သူ့ကို အမှုတိုင်တဲ့ဖက်က ပေးပြီး ဖြစ်တာကြောင့်ရယ် သူကိုယ်တိုင်က လိမ်တဲ့ကောင်တွေကို မုန်းတာကြောင့်ရယ် ကြောင့် လပ်မယူတော့ဘူး ။
ဒီတော့ ဟန်ဝင်းအောင် နဲ့ နပိုလီယန်တို့ ဂျေးထဲ အောင်းသွားကြရတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင် မိဘတွေလည်း လူကြားထဲ မျက်နှာ မပြရဲအောင် အရှက်ရကြတယ် ။ စုမိစံကတော့ ဘာမှ မသိတော့မျှော်စောင့်နေတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင် ပေါ်မလာလို့ တငိုငို နဲ့ …။
ထောင်ထဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်သွားရတာဘဲ ။
ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ဒီကိစ္စမှာ အဖမ်းခံရ ထောင်ကျပေမယ့် လူတွေကို ဘယ်လို လိမ်လို့ ရတယ်ဆိုတာ ကို သူသိသွားရလို့ သူကျေနပ်တယ် ။ ထောင်ဆိုတာကလည်း လူမိုက် လူဆိုး လူလိမ်တွေ စုဝေးရာနေရာဖြစ်လို့ ဟန်ဝင်းအောင် အတွက် ပိုပြီး လေ့လာဆည်းပူးနိုင်တဲ့ ကျောင်းကြီးတခုလိုဘဲ ။ သူ့ထက် လျင်တဲ့ တော်တဲ့ လူလိမ်တွေကို ထောင်ထဲမှာ ဆုံရ သိရ ခင်မင်ခွင့်ရသွားတယ် ။ သူ့ကိုပညာတော်သင် လွှတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားရတယ် ။ သဘောကောင်းတဲ့ လူလိမ် ဆရာကြီးတွေက ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေကို ဟန်ဝင်းအောင်ကို ပြောပြ သင်ပေးကြတယ် ။
ထောင်က ထွက်လာတော့ သူ့မိဘတွေကလည်း သူ့ကို အမွေဖြတ် သားအဖြစ်က စွန့်ပစ်ကြလို့ နေစရာ မရှိတော့ဘူး ။ ဒါလည်း ဟန်ဝင်းအောင်က ဝမ်းမနည်းပါဘူး ။ ထောင်ထဲမှာ ခင်မင်ခဲ့တဲ့
ဉာဏ်စိုး ဆိုတဲ့ လူနဲ့ ပေါင်းပြီး သင်္ဘောတင်တဲ့ အေးဂျင့်ရုံး ဖွင့်တယ် ။ အားလုံး အင်တွေဘဲလေ ။ သင်္ဘောသား လုပ်ချင်တဲ့လူတွေကလည်း တပုံကြီးဘဲ ဆိုတော့ ဟန်ဝင်းအောင်တို့ရဲ့ ဂွင်ထဲကိုအချဉ်တွေ အများကြီး ဝင်လာကြရော ။ ဉာဏ်စိုးနဲ့သူ ရသမျှ ရိုက်စားလုပ် ခြေရာဖျောက်ကြတယ် ။
သူ့ကောင်မလေး စုမိစံကလည်း သူ့ကို မိဘတွေက သားအဖြစ်က စွန့်ပစ်တဲ့ အကြောင်း သတင်းစာတွေမှာ ထည့်လိုက်တော့ တွေ့သိသွားပြီး သူ့အကြောင်းကို သေသေချာချာ လိုက် စုံစမ်းတော့
အားလုံး သိသွားပြီး သူ့ကို ဖြတ်သွားတယ် ။
သုဘဒ္ဒါကဖေး သည် ခပ်ချောချောကောင်မလေးတွေ စားပွဲထိုးလို့ နံမည်ကြီးတယ် ။
ကောင်မလေးတွေကို လာပြီး အငမ်းတရားပွားချင်လို့ လာစားလာသောက် လာထိုင်ကြလို့ ဒီကော်ဖီနဲ့ မုန့်ဆိုင်သည် လူပြည့်နေတာ များတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင် သည်ဆိုင်က ပက်ဂီလင်း ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို သဘောကျနေတယ်။ ပက်ဂီလင်းသည် ရုပ်ကလေးကလည်း လှတယ် ။ ကိုယ်လုံးလေးကလည်း လှတယ် ။ ပက်ဂီလင်းကို ကြည့်ချင်လို့
ဟန်ဝင်းအောင် သုဘဒ္ဒါကဖေးမှာထိုင်နေတယ် ။
ပက်ဂီလင်းသည် ရွရွကြွကြွလေး လှမ်းရင်း သူ့စားပွဲကို ရောက်လာတယ် ။
မျက်တောင်လေး ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့ ပက်ဂီလင်း မေးတယ် ။ စားပွဲထိုးမလေး တယောက် နဲ့ မတူဘဲ
မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေထဲက မင်းသမီးလေးနဲ့ တူနေတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင် က နို့မပါ သကြားမထည့်တဲ့ ဘလက်ကော်ဖီတခွက် မှာလိုက်တယ် ။
ပက်ဂီလင်း ရွရွကြွကြွလေး ပြန်ထွက်သွားတယ် ။ သူမရဲ့ဖင်လှလှလေးကို ဟန်ဝင်းအောင် ငေးမောရင်း
ကျန်ခဲ့တယ် ။ ခါးသေးသေးလေး အောက်က ဖင်တွေက မကြီးပေမယ့် တင်းတင်းရင်းရင်း လုံးလုံးလေးတွေ ။
“ ကိုဟန်ဝင်းအောင် …”
သူ့နံမည်ကိုခေါ်သံကြောင့် ဟန်ဝင်းအောင် လန့်သွားတယ် ။ ဖိုးတွမ်တီးသမားတယောက်မို့ သူ့မှာ
က ရန်သူ မုန်းသူ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေသည်လေ ။
“ ဟင်…ညိုညိုညိမ်း …”
ငပလီ မှာ ဆုံခဲ့တဲ့ ညိုချောလေး ။
အင်မတန်မှ အမူအရာကောင်းသလို အင်မတန်မှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖိုးတွမ်တီးမလေး ။
“ ဖုန်းလဲ မခေါ်ဘူး..ဘာလဲ..လေစိမ်းတိုက်တာလား ..ပဲများတာလား…”
“ မအားလို့ပါ..ညိုညိမ်းရယ်..ခရီး ထွက်နေရလို့..လာ..ထိုင်လေ..ဘာစားဘာသောက်မလဲ ညိုညိမ်း..”
ညိုညိုညိမ်းက သူနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ထိုင်လိုက်သည် ။ ညိုညိုညိမ်းဆီက အနံ့ပြင်းတဲ့ ရေမွှေးအနံ့ ဝဲပျံလာသည် ။
“ ဘယ်တွေကိုများ ခရီးထွက်နေရတာလဲ ..ဆရာကြီးရဲ့…”
“ အဟဲ…မော်စကို လေ …”
“ ဟင်….ဟုတ်လား..အတည်ပြောတာလား ..”
“ ကိုနပိုလီယန်ကြီး နဲ့ တတွဲထဲလား ..”
“ ဟုတ်တယ်…သူက အထဲမှာ ကျန်ခဲ့တယ်..မထွက်ရသေးဘူး …”
“ ဆောရီးဘဲ..ကြားရတာ..ညိုညိမ်းက ကိုဟန်ဝင်းအောင်က ညိုညိမ်းကိုများ ရှောင်နေတာလားလို့..”
ပက်ဂီလင်း အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ ကော်ဖီခွက် လာချပေးတယ် ။
“ မမှာတော့ဘူး..စားခဲ့ပြီးပြီ …”
ညိုညိုညိမ်းရှေ့မှာမို့ ပက်ဂီကို သူ သေသေချာချာ မငမ်းတော့ဘူး ။
ပက်ဂီလင်း လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ နဲ့ သူတို့ အနားက ထွက်သွားတော့ ညိုညိုညိမ်းက “ ကောင်မလေးက လန်းတယ်နော် ..” လို့ သူ့ကို ပြောလိုက်တယ် ။
သူက “ ညိုညိမ်းလောက် မလန်းပါဘူး..” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းက “ မြှောက်မနေနဲ့..ကျွေးစရာ မရှိဘူး …” လို့ မျက်စောင်းထိုးပြီး ပြောလိုက်တယ် ။ သူက “ ညိုညိမ်းမှာ ကျွေးစရာ
တွေ ရှိပါတယ်လေ…” လို့ပြောရင်း ညိုညိုညိမ်းကို စေ့စေ့စိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်တယ် ။
“ သွား…ဘာတွေ လာပြောနေမှန်းလဲ သိဘူး…ဒီနေ့ ဘာလုပ်စရာတွေ ရှိသလဲ..ဘာဂွင်တွေ ရှိသလဲ..ခိခိ..”
“ ထူးထူးခြားခြားတော့ မရှိပါဘူး ..ညိုညိမ်း အားရင် အေးအေးဆေးဆေး ရှိတဲ့ တနေရာ သွားကြမလား”
ညိုညိုညိမ်းက သူ့ကို ဟိုတယ်ခေါ်ပြီး ဗြုံးချင်နေတယ်ဆိုတာ အထာပေါက်တယ် ။
“ ဒီမှာလည်း အေးဆေးနေတာဘဲ..ကြည့်..အဲယားကွန်းက အေးစိမ့်နေတာဘဲ …မကောင်းဘူးလား..”
“ ဒီမှာက လူတွေနဲ့ မလွတ်လပ်ဘူး…ကိုယ်က ညိုညိမ်းနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ချင်တာ….”
“ ခုလဲ နှစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘဲလေ..ခိခိခိ….အေးဆေးပေါ့..ခဏနေပါအုံး …မေးချင်သေးတယ် …အခု လက်ရှိ ဘာအလုပ်လုပ်နေလဲ..ဘယ်သူနဲ့ လုပ်နေလဲ…အလုပ်ဂွင်တခု
“ လုပ်ချင်တာပေါ့..ဂွင်ကောင်းလေး ဘာလေး ရှိရင် ပြောပါအုံး ..”
“ ရှိတယ်..အဖွဲ့နဲ့ ပေါင်း လုပ်ရမှာ…စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်ပေးမယ် …သူ ဦးလူကြီး ကိုသိလား ..”
“ နယားပျံလူကြီးလား…လူချင်းတော့ ဘယ်သိမလဲ..သူက ဟိုထိပ်ဖျားက ဘီလျံနာ…ကိုယ်က လမ်းပေါ်ကလူ … သူ့အကြောင်း ကြားဘူးနေတာပေါ့..ထောင်ထဲမှာလည်း သူတပည့်တွေနဲ့
“ ညိုညိမ်းလဲ ဘော်ဒါတကောင်က တဆင့် ဦးလူကြီး ကွန်ယက်ထဲ ရောက်သွားတယ် ..ဒီလူကြီးက ခြေတန်လက်တန် တော်တော်ရှည်တာဘဲ ..သူ့အတွက် အလုပ်လုပ်နေတယ်သာ ဆိုတယ်..သူနဲ့လည်း
တခါမှ မဆုံရပါဘူး..သူ့လက်အောက်မှာက မန်နေဂျာတွေ တော်တော်များသား…”
“ ညိုညိမ်းနဲ့ တူတူလုပ်ရမယ် ဆိုရင် လုပ်ချင်တယ် …”
“ ဟိတ်..ဒါက ဘာစကားလဲ …ခိခိခိ….”
“ အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ကို ပြောတာပါ …တလွဲမတွေးပါနဲ့..”
“ အိုကေလေ..ညိုညိမ်း ခေါ်သွားပေးမယ် ..ညိုညိမ်းနဲ့ လုပ်ရတဲ့ ဘော့စ်က ဦးလူကြီးရဲ့ ညာလက်ရုန်း..ဇော်ကြီး….တဲ့..”
သုဘဒ္ဒါကဖေးထဲကနေ ထွက်လိုက်ကြတော့ တက်စီတစီး အသင့်တွေ့တာနဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို သူသွားနေကျ ရွှေဂုန်တိုင်က ဟိုတယ်တခုကို ခေါ်သွားလိုက်တယ် ။
ဟိုတယ်က ဝန်ထမ်းတွေက ဟန်ဝင်းအောင်ကို ဘောစိတယောက် အနေနဲ့ သိထားကြသလို သူတို့ကိုအပိုကြေး ဘောက်ဆူး ( တစ်ပ်စ်) ကောင်းကောင်းပေးမယ် ဆိုတာ သိကြတာမို့ ဘာမှတောင် မမေးဘဲ ဟိုတယ်အခန်းသော့ကို သူ့လက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ် ။
နာရီပိုင်းဘဲ လာဖိမယ် ဆိုတာ သိပြီးသား ။
ဟိုတယ်အခန်းထဲကို ရောက်တာနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်က ညိုညိုညိမ်းကို ဖက်သိုင်းပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကလည်း ပြန်စုတ်တယ် ။ အဝတ်အစားတွေကို နှစ်ယောက်သား အမြန်ဆုံး ကိုယ်တွေပေါ်က ချွတ်ခွာပစ်ကြတယ် ။ ကိုယ်လုံးတီးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာနဲ့ အနားက ကုတင်ပေါ်ကို တက်ကြတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ ငပဲကြီးက မတ်မတ်ထောင်နေပြီ ။ ညိုညိုညိမ်းလည်း ပိန်ချပ်ချပ်နဲ့ ဒုတ်ကြီးတဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ကို ကြည့်ပြီး စိတ်တအားလာတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ကို အရင်ဆုံဖူးကထဲက ညိုညိုညိမ်း ခိုက်နေတာ ။
ဟန်ဝင်းအောင်က ခေါင်းညှိမ့်ပြတယ် ။ ညိုညိုည်ိမ်း သူ့ကို ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှဲအိပ်ခိုင်းပြီး သူ့ဒုတ်တုတ်တုတ်ကြီးကို အရင်နားကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ထိပ်ဖူးဒစ်ပြဲကြီးကို ငုံကာ စုတ်လိုက်တယ် ။ သူ့ငပဲကတုတ်လွန်းတော့ ပါးစပ်ထဲမှာ အပြည့်ဘဲ ။
ညိုညိုညိမ်းရဲ့ ပုလွေက ရှယ်ဘဲ ။ တအားတော်တယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ညိုညိုညိမ်း စုတ်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ညိုညိုညိမ်းရဲ့ နို့လုံးကြီးတွေကို အားရပါးရဘဲ ဆုပ်နယ်နေတယ် ။
တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ လီးစုတ်သံတွေ ထွက်နေတယ် ။ နို့သီးခေါင်းမာမာလေးတွေကို ချေနယ်နေရာက ညိုညိုညိမ်းရဲ့ ဖင်တုံးတွေကို သူ လှမ်းကိုင်ကြည့်ပြန်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းရဲ့ လျာက သူ့ဒုတ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ထိုးမွှေကစားပေးနေတယ် ။
ထိလွန်းလို့ ပါးစပ်က ညည်းမိရတယ် ။
တော်တော်ကြာကြာ အစုတ်ခံပြီးတော့ ညိုညိုညိမ်းကို အစုတ်ရပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး သူ တက်ခွတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကလည်း တအား လိုချင်နေတယ် ။ သူကလည်း တအားထန် တအားလိုးချင်နေတယ် ။ ဘာပြောကောင်းမလဲ..လိုးလိုက်ကြတာ တဖတ်ဖတ် တဖုန်းဖုန်းဘဲ ။
ပထမဆုံး အချီက တော်တော် မြန်တယ် ။ သူရောကိုယ်ရော ကောင်းလို့ တအား ကျေနပ်ကြရတယ် ။
ဒုတိယအချီ ပြန်အစမှာတော့ သူ ညိုညိုညိမ်း စောက်ဖုတ်ကို ရေလည် မှုတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ပြီးမှ ပုံစံတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ လိုးတယ် ။
ခဏနား..အစားစားပြီး တတိယနဲ့ စတုတ္ထအချီတွေ ဆက်ဆွဲဖြစ်ကြတယ် ။ တချိန်လုံး အဝတ်တောင် ပြန်မဝတ်ကြတော့ဘဲ ကမ္ဘာဦးအစက အာဒံနဲ့ ဧဝ စတိုင်နဲ့ ဆွဲလိုက်ကြတာ ။ ညဖက်ကျမှ အပြင်ထွက်ပြီး အစားစားကြတယ် ။ ပွင့်သစ်ဆန်း ဆိုတဲ့ ဆိုင်မှာ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အားအင်တွေ ကို ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းတဲ့အနေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်စားရင်း အလုပ်ကိစ္စ တိုင်ပင်ကြတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒုစရိုက်လောကရဲ့ ထိပ်သီးတယောက် ဖြစ်တဲ့ နယားပျံဦးလူကြီးတို့ အဖွဲ့ ထဲကို ဟန်ဝင်းအောင် ရောက်ခဲ့ရသည် ။
စော်မရှိဘဲ ကြေးစားတွေ နဲ့ဘဲ စခန်းသွားနေခဲ့ရတဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ကောင်းကောင်းဗြုံးရလို့ အရမ်းဟန်ကျနေပြီ ။
နယားပျံဦးလူကြီးက လူကြီးလူကောင်း အရေခြုံ ဒုစရိုက်ထိပ်သီးကောင်ကြီးတကောင်ပါ ။
မကောင်းတာဆို အကုန်လုပ်တဲ့ တကယ့်လူယုတ်မာကြီးလို့ ဟန်ဝင်းအောင် ကြားဖူးထားခဲ့တယ် ။
ထောင်ထဲမှာတုံးက လူခုနစ်ယောက်ကို သွေးအေးအေးနဲ့ သတ်ပစ်လို့ တသက်တကျွန်းကျနေတဲ့ ထောင်ထဲမှာ နေရာရနေတဲ့ဓါးဆန်းတင့်ဆိုတဲ့ လူမိုက်က ဦးလူကြီးအတွက် သူ ထောင်ကျခံတာလို့ပြောပြဘူးတယ် ။ ဦးလူကြီးရဲ့ တပည့်ရင်း…တဲ့ ။ ဓါးဆန်းတင့်လို လူမိုက်တွေ အများကြီးကို ဦးလူကြီး
က လက်သပ်မွေးထားတယ် ။ ဦးလူကြီး အတွက်ဆိုရင် ဘာလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရ ဆိုတဲ့ ကျေးဇူးခံကျေးဇူး
စား လူမိုက်တွေပေါ့ ။ သူတို့ မိသားစုတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး အဝဝကို ဦးလူကြီးက တာဝန်ယူပေးထားတယ် တဲ့ ။
ညိုညိုညိမ်းက ဟန်ဝင်းအောင်ကို စစချင်း ဇော်ကြီးဆီကို ခေါ်သွားတာ ။
ဇော်ကြီးက ဦးလူကြီးရဲ့ အဖျားနား အောက်ဆုံးပိုင်းက တပည့် ဖြစ်တာတောင် တော်တော့်ကို သွေးနားထင်ရောက်နေတဲ့ သူဌေးပေါက်စလေးတကောင် ..။
ဇော်ကြီးရဲ့ ဟန်ပြ လဖက်ခြောက်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်က အနော်ရထာလမ်းပေါ်မှာ ရှိတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းနဲ့
သူ ဝင်သွားတော့ ဇော်ကြီးက သူ့ရုံးခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတယ် ။
“ ဟား..ညသုံးလုံး လာပြီဟေ့…အတော်ဘဲ တွေ့ချင်နေတာ..” လို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ဇော်
ကြီးသည် မြန်မာရုပ်ရှင်တွေထဲက လူကြမ်းအဖွဲ့ထဲက တယောက်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်လို့ ဟန်ဝင်းအောင် ထင်မိလိုက်တယ် ။
“ သူက …”
“ သူက ကိုဇော်ကြီးကို ညိုညိမ်း ပြောထားတဲ့ လူလေ …အဖွဲ့ထဲမှာ လုပ်ဖို့ ခေါ်လာတာ..”
“ ဟန်ဝင်းအောင်ပါ …”
“ အိုခေ..အိုခေ …ညိုညိမ်း ခေါ်လာတော့ စိတ်ချတယ်..အိုကေတယ် …အလုပ်တွေကတော့ အများကြီး
ဘဲဗျာ….ခင်ဗျား…ပျော်မှာပါ…ကျနော်တို့က မိသားစုတွေလိုဘဲ…၀ိုင်းလုပ် ၀ိုင်းစား..ပေါ့….”
ဇော်ကြီးက မကြာခင် အလုပ်ကြီးတခု လုပ်ရမယ် ..လတ်တလောတော့ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ဘဲ လုပ်စရာလေး
တွေ လုပ်နေလိုက် ..လိုအပ်တာကို ပြော …လို့ သူ့ကို ပြောတယ် ။ အဲဒီအလုပ်ကြီး အောင်မြင်ရင်တော့
တော်တော့်ကို ကြီးကြီးမားမား စားကြရမှာ….တဲ့ ။
သူ ညိုညိုညိမ်းနေတဲ့ အိမ်ခန်းမှာ လိုက်နေလိုက်တယ် ။
ညိုညိုညိမ်းက အလုပ်ကြီး မလုပ်ရခင် လတ်တလော ကိုဇော်ကြီး ခိုင်းထားတာလေးတွေ လုပ်ကြမယ်လို့
သူ့ကို ပြောတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်ကလည်း လိမ်ရညာရ ခိုးရဝှက်ရမယ် ဆိုရင် အချိန်မရွေးဘဲလေ ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ( ဒုစရိုက်နှိမ်နင်းရေး )
ဒုရဲအုပ်လေးမောင်မောင်သည် ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးနဲ့အတူ ရဲမှူးဦးကိုကိုလင်းရဲ့ ရုံခန်းထဲကို လိုက်ပါသွားရ
သည် ။ ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးက ရဲမှူးဦးကိုကိုလင်းက အထူးတာဝန်တရပ် ပေးစရာရှိနေတယ် ..ခင်ဗျားကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် ဆိုလို့ သူလိုက်ခဲ့ရတာ ..။
ဒုရဲအုပ်လေးမောင်မောင်သည် သင်တန်းဆင်းခါစ အသစ်ချပ်ချွတ် ရဲအရာရှိ တယောက်မို့ ဒုစရိုက်လောကသားတွေ မသိသေးတဲ့ မျက်နှာစိမ်းတယောက် ဖြစ်နေတာကြောင့် ရဲမှူးကိုကိုလင်းက ရွေးချယ်လိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုး သဘောပေါက်တယ် ။
ရဲမှူးကိုကိုလင်းရဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ အရပ်ဝတ်နဲ့ လူတယောက် ထိုင်နေတယ် ။
လူပုံပန်းကို ကြည့်ရတာတော့ သာမန်ထဲက မဟုတ်နိုင်ဘူး ။ ရာထူးကြီးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘဲ ဖြစ်မယ်လို့ ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးရော ဒုရဲအုပ်လေးမောင်မောင်ရော ထင်မိကြတယ် ။
ရဲမှူးဦးကိုကိုလင်းက “ ခင်ဗျားကို အထူးတာဝန်တရပ် ပေးစရာ ရှိတယ် …အထူးလှို့ဝှက်ဖို့ လိုတယ် ..
ခါတိုင်း လုပ်နေကျ ရဲဝတ္တရား တာဝန်လို မဟုတ်ဘူး ..စုံထောက်အလုပ်ကို လုပ်ရမှာ..သတင်းပေါက်ကြားလို့ မဖြစ်ဖူး..သတင်း လုံခြုံမှု ရှိပါစေ …” လို့ သူ့ကို စပြောတယ် ။
ပြီးတော့ ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုး ဖက်ကို လှည့်ပြီး…“ ဦးဇော်တိုး….ကိုလေးမောင်မောင်ကို အိပ်ဖေါ်တီး( 840 )ကို
စောင့်ကြည့်ဖို့ ကျနော် တာဝန်ပေးချင်တယ် …သူတို့ သွားတာလာတာ လုပ်ကိုင်တာတွေကို သူတို့မသိ
အောင် စောင့်ကြည့်ဖို့ဘဲ …” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
ဒုရဲအုပ်လေးမောင်မောင်သည် ရဲမှူး ပြောတာကို နားမလည်ပါ ။ အိပ်ဖေါ်တီး ဆိုတာ ဘာလဲ..ဘယ်သူလဲ
သူမသိဘူး ။ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ဖြစ်နေတယ် ။
အိပ်ဖေါ်တီး ဆိုတာ ဘာလဲ ..ဆရာ….လို့ သူ မေးတယ် ။
ရဲမှူးဦးကိုကိုလင်းက ရယ်တယ် ။ ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးက “ ကိုလေးမောင်မောင်..ခင်ဗျားက မသိသေးဘူးကိုး
အိပ်ဖေါ်တီး ဆိုတာ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်း ဆိုတဲ့ စုံတွဲကို ခေါ်တာ ..သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးက
ဖိုးတွမ်တီးတွေ …သူတို့နှစ်ယောက် ပေါင်းလိုက်တော့ အိပ်ဖေါ်တီး ဖြစ်သွားတာပေါ့….သူတို့အတွဲကို ကျနော်တို့က စကားဝှက်အဖြစ် 840 လို့ နံမည်ပေးထားကြတယ် …. ” လို့ ရှင်းပြလိုက်တယ် ။
ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးက အမှုဖိုင်တွဲထဲက 420 နှစ်ယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ထုတ်ပြတယ် ။
ဒီတော့မှ လေးမောင်မောင် သဘောပေါက်သွားတယ် ။
“ သူတို့ကို အရပ်ဝတ်အရပ်စား နဲ့ စောင့်ကြည့်ပါ..ထူးခြားရင် ရဲမှူးကို သတင်းပို့ …. ကိုလေးမောင်မောင် ..” လို့ ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးက သူ့ကို ပြောလိုက်တယ် ။
“ ဟုတ် …”
“ ဒီကိစ္စက ခင်ဗျား တယောက်ထဲကို တာဝန်ပေးတာ….သတင်းလုံခြုံမှု ဂရုစိုက်ပါ ..”
ညိုညိုညိမ်း ရေချိုးနေတယ် ။
ကိုယ်တုံးလုံး ချိုးနေတာ ။
ရေပန်းက တရှဲရှဲကျနေတဲ့ ရေပူပူတွေအောက်မှာ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ရပ်နေရတာ အရသာ ရှိနေတယ် ။
ဆူဖြိုးကော့ထောင်နေတဲ့ ညိုညိုညိမ်းရဲ့နို့ကြီးနှစ်လုံးထိပ်က နို့သီးလေးတွေအပေါ်ကို ရေတွေ ထိတွေ့နေတာက စိတ်တွေကို လှုပ်ရှားထကြွလာစေတယ် ။
တကိုယ်လုံးအနှံ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ပွတ်သပ် ချေးချွတ်နေတယ် ။ ဂျိုင်းကြား..ပေါင်ကြား ဖင်ကြား..။
ဆပ်ပြာမွှေးရည်ဘူးလေးထဲက အစိမ်းရောင် ဆပ်ပြာရည်နဲနဲကို လက်ခုပ်ထဲ ညှစ်ထည့်လိုက်တယ် ။ ခါးသိမ်လေး အောက်က စွင့်ထွက်နေတဲ့ ဖင်တုံးတွေကြားနဲ့ ပေါင်တန်တွေ ခလယ်က အကွဲကြောင်း အမြောင်းကို သေသေချာချာ ပွတ်တိုက် ဆေးကြောလိုက်တယ် ။ ဒီနေရာတွေ မနံစော်စေဖို့ ဂရုစိုက်ရတယ် ။
ကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာရည်နဲ့ ပွတ်နေတဲ့ အချိန် စွင့်ကားတဲ့ ဖင်တုံးတွေက တုန်ခါနေကြတယ် ။
နို့ထွားထွား နှစ်လုံးကလည်း တုန်ခါနေကြတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်ကို ဇော်ကြီးက မန္တလေးကို လွှတ်လိုက်တယ် ။ အဲဒီမှာ အလုပ်တခု လုပ်ရမယ် ဆိုပြီး ။ ညိုညိုညိမ်း သိတယ် ။ ဇော်ကြီး ဟန်ဝင်းအောင်ကို ပထုတ်လိုက်တာ ။ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ သူ တွေ့ချင်လို့ ။
ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ မဆုံခင်က ဇော်ကြီးက ညိုညိုညိမ်းကို ခေါ်ခေါ်လိုးနေတာ ။ ဟန်ဝင်းအောင် ရောက်
လာပြီး ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ညိနေတော့ ဇော်ကြီး စားပေါက်ပိတ်နေခဲ့တယ် လေ ။
တိုက်ခန်းထဲကို တံခါးသော့ဖွင့်ပြီး ဝင်လာတဲ့အသံ ကြားလိုက်ရတယ် ။
လာပြီ ။ ဇော်ကြီးလာပြီ ။ ဇော်ကြီး လိုးဖို့ရောက်လာပြီ ..။
ညိုညိုညိမ်းလည်း ဆပ်ပြာစင်အောင် ရေပန်းအောက်မှာ သေသေချာချာ ပွတ်သပ်ချိုးလိုက်ပြီး ရေပန်းကို
လှည့်ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန် ဇော်ကြီး ရေချိုးခန်း အပေါက်ဝကို ရောက်လာတယ် ။
“ ဝှူး……ညိုညိမ်းကတော့ တကယ့်ကို တောင့်တာဘဲကွာ..ဒါကြောင့် ကိုယ်လည်း ညိုညိမ်းကို အရမ်းကို
မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကိုယ်မှာပတ်ရစ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို ဇော်ကြီးက ခါးလေး ကနေ ဖက်လိုက်ပြီး ပြောလိုက်တယ် ။
“ ဟွန်း..ပိုပြီ…သူကတော့…စော်လေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့လူကများ…..ခိခိခိ….”
“ ဟင်းဟင်း…..ကိုယ်က ညိုညိမ်းကိုဘဲ တွေ့ချင်နေတာ..ညိုညိမ်းလည်း သိသားနဲ့….”
ဇော်ကြီးက မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကို ဆွဲဖြုတ်ကာ ဖယ်လိုက်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းရဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး အလှအပတွေကို ဇော်ကြီး မြင်ရတော့ ဘယ်လက်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို ဆွဲဖက် ညာလက်နဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေကို ဆုပ်ညှစ် ..နို့တလုံးကို သူ့နှာခေါင်းနဲ့ ပွတ်ခါ နမ်းတော့တာဘဲ ။
တောင့်တင်းအချိုးကျတဲ့ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ တွေ့တိုင်း ဇော်ကြီး အခုလိုဘဲ တအား ထန်တယ် ။ ပယ်ပယ်
နယ်နယ် ကိုင်တွယ်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဗျင်းတော့တာဘဲ ။ ညိုညိုညိမ်းကလည်း ခံနိုင်တယ် ။ ကြမ်းတာကို ကြိုက်တယ် ။
ညိုညိုညိမ်း က ဟန်ဝင်းအောင်ကို သဘောကျပေမယ့် ဇော်ကြီးကိုလည်း ပေါင်းထားရတယ် ။ ဇော်ကြီးကိုပေးလိုးရတယ် ။ ဇော်ကြီးက သူမ ဘဝကို ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ လူတယောက် မဟုတ်လား ။
ဇော်ကြီးက မိန်းမရှိတယ် ။ ကလေးနှစ်ယောက် ရှိတယ် ။ ဦးလူကြီးရဲ့ လူရင်းတပည့်တယောက်မို့ဇော်
ကြီးက ရေလျံတယ် ။ လက်ဖွာတယ် ။ ပေးစရာရှိရင် ပက်ကနဲ ပေးတတ်တယ် ။ အပေါင်းအသင်းလည်း ဆန့်တယ် ။ အစိုးရ ဝန်ထမ်းပိုင်းကိုလည်း သြဇာရှိတယ် ။ ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကို သူပေးကမ်းစွန့်ကြဲနေလို့ အခုလို တိုက်ခန်းနဲ့ ဘာနဲ့ နေနိုင်တာ ။
ဇော်ကြီး သူဝတ်လာတဲ့ မိုက်ကယ်လ်ကိုး ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်တာနဲ့ ဖြောင်းကနဲ ကန်ထွက်ပြီး
မတ်မတ်ထောင်သွားတဲ့ လိင်ချောင်းကြီးကို ညိုညိုညိမ်းက သူမလက်ကလေးနဲ့ ဖမ်းဆုပ်ပြီး ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးလိုက်ရင်း ဇော်ကြီး ရပ်နေတဲ့ အရှေ့မှာ ဒူးလေးထောက်ချလိုက်ပြီး လိင်ချောင်းကြီးကို ငုံခဲ စုတ်ပေးလိုက်တယ် ။
ညိုညိုညိမ်းရဲ့ လျာလေးက လိင်ချောင်းကြီးရဲ့ ဒစ်ဖူးကြီးကို ပတ်ချာလည် ရစ်ပတ်လိုက်တာကြောင့် ဇော်ကြီး အတွေ့ထူးသွားရတယ် ။ ပြတ်ပြတ်…ပြွတ်ပြွတ်…..ပြတ်ပြတ်ပြွတ်ပြွတ် နဲ့ ငုံငုံ စုတ်ပေးနေတာကိုမျက်စိစုံမှိတ်ပြီး အရသာတွေ့နေတဲ့ ဇော်ကြီးဟာ ညိုညိုညိမ်း ပါးစပ်ထဲကို ကော့ကော့ထိုး နေရင်းတချက်တချက် အင်းအင်း..အင်းအင်းနဲ့ အသံထွက် ညည်းနေတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ဟန်ဝင်းအောင်တို့ နေနေတဲ့ တိုက်ရဲ့ အောက်ဖက်မှာ လေးမောင်မောင် ရောက်နေတယ် ။ လေးမောင်မောင် လည်း ရဲမှူး တာဝန်ပေးကထဲက ရဲဝတ်စုံကို မဝတ်တော့ဘူး ။
ဆံပင်ကိုလည်း မညှပ်တော့ဘူး ။
ပိန်ရှည်ရှည် လေးမောင်မောင် က လူငယ်လေးတွေ ဝတ်သလို ဂျင်းဘောင်းဘီ စုတ်စုတ် တီရှပ်ပွပွ
ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ် ပြောင်းပြန်ဆောင်းလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုမှ ရဲအရာရှိလို့ ထင်ကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ။
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ 840 ကို စောင့်ကြည့်နေတယ် ။ နောက်ယောင်ခံလိုက်တယ် ။ လေးမောင်မောင် တဖြေး
ဖြေးနဲ့ ရုပ်လုံးပေါ်လာတယ် ။ ဘယ်သူဘာလဲ ဘယ်လိုတွေလဲ သိလာတယ် ။ အခုဘဲကြည့် ။ ဟန်ဝင်းအောင် မရှိတော့တဲ့အချိန် ဇော်ကြီး ရောက်လာတယ် ။ သုံးနာရီလောက် ညိုညိုညိမ်း ရဲ့ တိုက်
ခန်းထဲမှာ ဇော်ကြီး ရှိနေတယ် ။ ပြီးတော့ ဖော်ကြီးနဲ့ ညိုညိုညိမ်း တိုက်ခန်းပေါ်က ဆင်းလာတယ် ။
စားသောက်ဆိုင်မှာ ထိုင်စားကြတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းရဲ့ စွဲမက် စရာ ကိုယ်လုံးလှလှကို လေးမောင်မောင် အဝေးက လှမ်းကြည့်ပြီး သဘောကျနေတယ် ။ လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ အချိန် ညိုညိုညိမ်းရဲ့ အိစက်တဲ့ ဖင်ကြီးတွေက လှုပ်ခါနေ
ဇော်ကြီးဆိုတဲ့ကောင် ရေရေလည်လည် ဖြုတ်မှာဘဲ..လို့ တွေးရင်း ဘယ်လိုများဖြုတ်ကြမလဲ..စိတ်ကူးယဉ် မြင်ယောင် တွေးဆနေတယ် ။
အင်း..ဇော်ကြီးလည်း ဟန်ဝင်းအောင် မရှိတဲ့ အချိန် လာဖိတာ ဖြစ်မယ် …။
လေးမောင်မောင် လည်း ဇော်ကြီး အကြောင်းကို စုံစမ်းတယ် ။ ဇော်ကြီးဟာ မကောင်းမှု ဒုစရိုက် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုတာကို သိလာတယ် ။ ဥပဒေနဲ့ မကင်းတဲ့ အလုပ် တော်တော် များများကို
ဇော်ကြီးက တပည့်လက်သားတွေ မွေးထားပြီး လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ရဲမှူးကို သတင်းပို့တော့ ရဲမှူးက “ ဒီကောင်က အကိုင်းဖျား လောက်ဘဲ..ဒို့က ပင်စည်ကြီးနဲ့ အမြစ်တွေကိုပါ တူးလှန်ပစ်ရမှာ…ငြိမ်ဝပ်ပြီး စောင့်သာကြည့်ကွာ….ထူးခြားတာတွေ သတင်းပို့…” လို့ ပြောတယ် ။
သူစောင့်ကြည့်တဲ့ အချိန် နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဇော်ကြီး အပေးအယူ နားလည်မှုလေးတွေ ရှိနေတယ်
ဆိုတာကိုပါ သိလာတယ် ။ ဇော်ကြီးရဲ့ အဖွဲ့က တော်တော်ကြီးတာ သူ သိလာတယ် ။ တွေ့လာတယ် ။
ပင့်ကူအိမ်လို ဆက်စပ်ပြန့်ကျယ်တဲ့ ဇော်ကြီးတို့ ကွန်ယက်က အဆက်အသွယ်တွေလည်းကောင်းလွန်းတော့ တခုခုဆို သူတို့က သတင်း ကြိုရပြီး သွားဖမ်းဆီးတဲ့အခါ ရှောင်တိမ်းသွားကြလို့ ဘယ်တော့မှလက်ပူးလက်ကြပ် မမိဘူး ဆိုတာလည်း တွေ့လာတယ် ။
840 စုံတွဲ ဂွင်တခုကို လှုပ်ရှားနေတယ် ဆိုတာလည်း သူသိနေပြီ ။
အသက်ရဝကျော်အရွယ် လူကြီးတယောက်ကို ညိုညိုညိမ်းရဲ့ အလှအပ နဲ့ ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းပြီး သူ့
ရှိသမျှတွေကို အပြတ်သိမ်းတဲ့ အကြံအစည် ကို 840 တို့ လုပ်နေတာ လေးမောင်မောင် တွေ့နေတယ်။
ရဲမှူးကို သတင်းပို့ထားတယ် ။ ရဲမှူးက ရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သဘောကျ ကျေနပ်တယ်။
ဆက်ပြီး မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ခိုင်းလို့ လေးမောင်မောင်လည်း အပင်ပန်းခံပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ချောင်းနေတယ် ။
မမျှော်လင့်တာ တခု ဖြစ်သွားတယ် ။ အဖိုးကြီး နယ်ကို ခရီးထွက်နေတုံး အဖိုးကြီးရဲ့ အိမ်ကို ဖေါက်ထွင်း ဝင်ရောက်ကြတယ် ရွှေစိန်လက်ဝတ်လက်စားတွေ ငွေထုပ်တွေကို ဖွင့်ဖျက် ယူကြတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်း အိမ်ထဲကအထွက်မှာ သူတို့ကို တချိန်လုံး စောင့်ကြည့်နေတဲ့ လေးမောင်မောင်က မြင်လိုက်တယ် ။840 စုံတွဲကို အမိအရ ဖမ်းဆွဲထားနိုင်လိုက်တယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းတို့ ကံဆိုးလွန်းတာက ဒုရဲအုပ်တယောက်က အိမ်ဖေါက်ထွင်းတာကို မျက်မြင်သက်သေ ဖြစ်နေရတာဘဲ ။
အဖိုးကြီးရဲ့ တိုက်ထဲမှာ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်း ကြမ်းပြင်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရတယ် ။နဘေးမှာ ဒုရဲအုပ်လေးမောင်မောင် ရပ်နေတယ် ။ သူ့ညာဖက်လက်ထဲမှာ သေနတ်တလက်ကို ကိုင်ထားတယ် ။ ဘယ်ဖက်လက်နဲ့ ဖုန်းပြောနေတယ် ။
ဧည့်ခန်းဆိုဖါကြီးတွေပေါ်မှာ ဖေါက်ထွင်းယူထားတဲ့ စိန်ရွှေပစ္စည်းတွေ..ငွေထုပ်တွေ .ရှိနေတယ် ။
ဖုန်းပြောပြီးတဲ့ အချိန် ညိုညိုညိမ်းက “ အကို…ညိုညိမ်းတို့ကို အကို ပြေလည်အောင် လုပ်ပေးပါလား”
လို့ စကားစလိုက်တယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်ကလည်း အရင်လို ဖိုးတွမ်တီးကေ့စ် မဟုတ်တော့ဘဲ ဖေါက်ထွင်းမှု ကျူးလွန် မိထားလို့ သူ့အခြေအနေ မကောင်းကြောင်း သိနေတာနဲ့ “ ဟုတ်ပါတယ် အကို..ကယ်ပါဗျာ..ကျနော်တို့မှားပါတယ်…ကျနော်တို့ကို ကယ်ပေးပါဗျာ….” လို့ ငိုပြနေတယ် ။
လေးမောင်မောင်က “ ပါးစပ်တွေ ပိတ်ထား…စောက်စကား မရှည်နဲ့…” လို့ ပိတ်ဟောက်လိုက်တယ် ။
မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက် ကြာတော့ အရပ်ဝတ်နဲ့ လူနှစ်ယောက် ရောက်လာတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်တို့ မျက်စိမျက်နှာပျက်နေကြတယ် ။ လေးမောင်မောင်က မညှိပေးတဲ့အပြင် ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်လို့ ရာထူးကြီးတဲ့ပုံစံရှိတဲ့ လူကြီးနှစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ဖွင့်ဖျက်ထားတဲ့ မီးခံသေတ္တာ..ဘီဒိုတံခါး..အံဆွဲတွေ…ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ယူတယ် ။ လက်ဗွေတွေ ယူတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ကိုရော ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်တယ် ။
“ ကဲ 840 ..မင်းတို့ အမှုပေါ့ချင်ရင် ဒို့မှာ နည်းလမ်း ရှိတယ်..ဘယ်လိုလဲ..လုပ်မလား…”
ညိုညိုညိမ်းက “ ဟုတ် …ဟုတ်ကဲ့ ဆရာကြီးတို့..လုပ်ပါမယ်..ဘာဘဲ လုပ်ရ လုပ်ရပါ…အထဲ မသွားရရင် ပြီးရော….ကျမမှာ တိုက်ခန်းတခန်းနဲ့ ကားလေးတစီး ရှိပါတယ်..ငွေလည်း နဲနဲ ရှိပါတယ်…အားလုံးဆရာကြီးတို့ကို ကန်တော့ပါမယ်….မဖမ်းပါနဲ့ရှင်….ကျမတို့ လွတ်ရာကျွတ်ရာကို သွားပါမယ် ..” လို့
တတွတ်တွတ်နဲ့ ပြောပါတယ် ။
အရပ်ဝတ်နဲ့ လူကြီးတွေက ခေါင်းယမ်းတယ် ။
“ ဒို့ အဲဒါတွေ မလိုဘူး..မတောင်းဘူး….ဒို့ မင်းတို့ နှစ်ယောက်ဆီက လိုချင်တာ ရှိတယ်..မင်းတို့ ဒို့ကို တခု လုပ်ပေးရမယ်..အဲဒါ လုပ်ပေးရင် မင်းတို့ကို အမှုမဖွင့်ဘူး …..မလုပ်ပေးဖူး ဆိုရင်တော့ ဝှူးဟူး…..ဖေါက်ထွင်းမှုနဲ့ ထောင်ထဲမှာ နှစ်ရှည် နေပေတော့ဘဲကွာ…..ကဲ ဘယ်လိုလဲ…” လို့ လူ
ကြီးတယောက်က ပြောလိုက်တော့ ညိုညိုညိမ်းတို့ ချက်ချင်းဘဲ..“ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဆရာကြီး…” လို့ မေးကြတယ် ။
“ တိုတိုနဲ့ လိုရင်းကို ပြောမယ်ကွာ..ငါတို့ ဦးလူကြီးကို လိုချင်တယ် ..ဆွဲစိချင်တယ်…ငါတို့ကို မင်းတို့
နှစ်ယောက်က ကူညီ …ဒါဘဲ..ဒါဆို..မင်းတို့ ဒီ ဦးသက်ထွေး အိမ်ကို ဖေါက်ထွင်း ခိုးယူတာကို အမှုမလုပ်ဘူး …ဘယ်လိုလဲ…”
“ ဘယ်လို ကူညီရမလဲ ဆရာကြီး….ဦးလူကြီး ဆိုတာ ကြားဘဲ ကြားဖူးတာ..တွေ့တောင် မတွေ့ဖူးဘူး..သူ့
လက်ထောက် ဇော်ကြီးတို့လောက်နဲ့ဘဲ ကျနော်တို့က ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်နေရတာ …ကျနော်တို့ ကူညီနိုင်တာ ဆိုရင် ကူညီမယ် …”
“ အိုကေ..မင်းတို့ သဘောပေါက်ရင် ပြီးရော…ငါတို့ ပြောချင်တာက သင်ကောင်းလျှင် ကျွနုပ် မဆိုးပါ ဆို
တဲ့စကားလိုဘဲ မင်းတို့ ငါတို့ကို ကူညီရင် ငါတို့ကလည်း မင်းတို့ကို ကူညီမယ် ..အပြန်အလှန်ပေါ့
“ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး….”
သည်အဖိုးကြီးရဲ့ အိမ်ကို ဖေါက်ခိုးတာ ညိုညို ညိမ်းနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကြားပေါက် ဂွင်
တခုပါ ။ ဇော်ကြီးတို့ မသိကြဘူး ။ လက်ပူးလက်ကြပ်မိသွားတာကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက် သည် မထင်မမှတ်ဘဲ ရဲတွေရဲ့ သူလျှို ဒလန် ဖြစ်သွားရတယ် ။
ဇော်ကြီး သူ့ရုံးခန်းထဲမှာ ဖုန်းပြောနေတယ် ။
ဇော်ကြီးသည် ဦးလူကြီးအတွက်တော့ အငယ်စား အသေးစား တပည့်လေး ဖြစ်ပေမယ့် ဇော်ကြီးသည်
အလုပ်တော်တော်များများ ကို ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သူဌေးလေး တယောက် အဖြစ်စီးပွားရေးလောကမှာ လူသိများကြတယ် ။
သူ့ကို အမြဲလို တွေ့နိုင်တဲ့ နေရာက အနော်ရထာလမ်းမကြီးပေါ်က သူ့ရဲ့ လဖက်ခြောက်ဆိုင်က ရုံးခန်းလေးမှာ ပါ ။ လေအေးစက် တပ်ထားတဲ့ ရုံးခန်းလေးထဲမှာ ဇော်ကြီး ဖုန်းတလုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ် ။ သူဖိထားတဲ့ စော်လေးတွေက သူ့ကို ဟိုဟာဝယ်ပေး ဒီဟာ ဝယ်ပေး နဲ့ တောင်းဆိုနေတာ
တွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နားထောင်ပေးနေတဲ့အချိန် စားပွဲပေါ်က လိုင်းဖုန်း မြည်လာလို့ ( မိန်းမတော့
ချက်ကင်လုပ်ပြီလား မသိဘူး ) ဆိုပြီး နံပါတ်လေးပေါ်လာတဲ့ ကော်လာအိုင်ဒီကို ဖျတ်ကနဲ ကြည့်လိုက်တော့ ဇော်ကြီး ဆတ်ကနဲ တုန်သွားတယ် ။ အီစီကလီလေးရဲ့ ဖုန်းကို တစ်ကနဲ ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီး လိုင်းဖုန်းကို ကောက်ကိုင်ထူးလိုက်တယ် ။
“ ဇော်ကြီးပါ…အကို …”
ခေါ်တဲ့လူက ဦးလူကြီး အိမ်မှာ နေ့ရောညပါ နေပြီး အိမ်ကိစ္စ..အလုပ်ကိစ္စတွေကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဇော်
ကြီးတို့ရဲ့ ခေါင်ချုပ် ခေါင်းဆောင် တင်မောင်လတ် ။
“ ဟေ့ကောင်…ဇော်ကြီး . . .မင်းဆီမှာ အခု စိတ်ချရတဲ့ လူတယောက်ယောက် ရှိလား …”
“ ကားမောင်းဖို့ကွ..ငါ့ဒရိုင်ဘာတွေ ခွင့်သွားနေကြတာ အိမ်ကား မောင်းဖို့ လူလိုနေတယ်…”
“ ဟုတ်..အကို…ကျနော် လူတယောက် လွှတ်ပေးပါမယ်..အကို..”
“ အိုကေ..ခုချက်ချင်း လွှတ်ကွာ…ကြာမနေနဲ့..”
တင်မောင်လတ်ရဲ့ လေသံက မာကျောတယ် ။ ဇော်ကြီးကို သူ့အိမ်က မွေးထားတဲ့ ခွေးလောက်တောင်
တန်ဖိုး မထားဘူး ။
“ ဟုတ်ကဲ့..အကို…ခုဘဲ လွှတ်လိုက်ပါမယ် …”
“ မင်း ဘယ်ကောင်ကို လွှတ်မှာလဲ…”
ဇော်ကြီး ပြာနေပြီ ။ သူ့မှာ လွှတ်ရမယ့် တကယ့်လူရင်း တပည့် မရှိဘူး ။ မရှိဘူး ပြောရင်လဲ တင်မောင်လတ်က စိတ်ဆိုးမည် ။ အခန့်မသင့်ရင် ပါးတောင် ရိုက်ချင်ရိုက်မည် ။
“ သူ့နံမည်က ဟန်ဝင်းအောင်..အကို..ကျနော့်လူရင်းတယောက်ပါ …”
အနားမှာ ရှိနေတဲ့ကောင်ကို ပြောလိုက်ရတယ် ။ ဒီကောင်က ညိုညိုညိမ်းရဲ့ ဘဲ ဆိုတော့ ညိုညိုညိမ်းကို
သေသေချာချာ ကျပ်ပေးလိုက်ရင် အိုကေမှာပါဘဲလို့ သူတွက်ဆပြီး ဟန်ဝင်းအောင် နံမည်ကို ပြောလိုက်တာ…။
“ အေးအေး…အလိုက်သိဖို့ ကျိုးနွံဖို့ မင်း သေသေချာချာ မှာလိုက် ..အဖိုးကြီးနဲ့ မိသားစု စိတ်ကျေနပ်
ဖို့ လိုတယ် …”
“ စိတ်ချပါ အကို..ကျနော် သေသေချာချာ မှာလိုက်ပါ့မယ်…”
ဇော်ကြီး ဖုန်းချအပြီး ဆိုင်ခန်းရဲ့ အပြင်မှာ စောစောထဲက ရောက်နေတဲ့ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် ။
ဒုရဲအုပ် လေးမောင်မောင်သည် ရန်ကုန်မြစ်ကမ်း တနေရာမှာ ရပ်ထားတဲ့ ကားလေးတစီးဆီကို လျှောက်
သွားလိုက်တဲ့အချိန် ကား နောက်ခန်းတံခါး ပွင့်လာတယ် ။ လေးမောင်မောင် ကားထဲကို ဝင်ထိုင်လိုက်တယ် ။
ကားနောက်ခန်းမှာ ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုး ရှိနေတယ် ။ ကားမောင်းသူနေရမှာက ရဲမှူးဦးကိုကိုလင်း ထိုင်နေတယ် ။ “ ဘာထူးလဲ လေးမောင်မောင်….”လို့ ဦးဇော်တိုးက မေးလိုက်တယ် ။
“ ထူးတယ် ဆရာ…ဟန်ဝင်းအောင် တယောက် ဦးလူကြီးရဲ့ အိမ်ကို ယာဉ်မောင်းအဖြစ်နဲ့ ရောက်သွား
“ ဟေ….ဟားဟားဟား….တယ်ဟုတ်ပါလား……သတင်းကောင်းဘဲကွ…..မင်းနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင် ကွန်တက်
ရှိလား …. ”
“ ရှိပါတယ်..ဆရာ…ညိုညိုညိမ်းနဲ့လည်း အမြဲလိုအဆက်အသွယ် ရှိပါတယ် …”
“ ကောင်းတယ်ကွာ….ဆက်လုပ်ပါ ..”
“ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ….ဒါဆို ကျနော် သွားမယ်…ထူးခြားရင် သတင်းပို့ပါမယ် ဆရာ….”
လေးမောင်မောင် ကားထဲက ပြန်ထွက်လိုက်တယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး ။ လေးမောင်
မောင် လည်း ရှင်းလင်း တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ နက်မှောင်မှောင် ကတ္တရာလမ်းမကြီးအတိုင်း တလှမ်းချင်း လျှောက်သွားလိုက်တယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင် ဦးလူကြီးနေတဲ့ ရဲတိုက်ကြီးတခုလို ကြီးမား ထယ်ဝါတဲ့ တိုက်အိမ်ကြီး ကို စစချင်း ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီလို ခန်ကငြားထယ်ဝါတဲ့ တိုက်အိမ်ကြိးမျိုး ရှိနေတာကို မယုံနိုင်အောင်ဘဲ ဖြစ်မိရတယ် ။
ရောက်နေတာ တပတ် ရှိနေပြီ ။ ဦးလူကြီးရဲ့ အိမ်မှာ ကားမောင်းဖို့ ရောက်သွားရပေမယ့် ဦးလူကြီးကို တခါမှ မဆုံဖြစ်သေးဘူး ။ဦးလူကြီးရဲ့ တကယ့်ညာလက်ရုံး ဦးတင်မောင်လတ်နဲ့ဘဲ သူ တွေ့ရတယ် ။
ဆက်ဆံရတယ် ။ ဦးတင်မောင်လတ်ကဘဲ ဘာလုပ်ဘာလုပ်နဲ့ ခိုင်းတယ် ။ သူမောင်းပို့ရတာက ဦးလူကြီးရဲ့ သမီးနှစ်ယောက် ..။ သမီးတွေက အဖေ အရှိန်အဝါနဲ့ အရမ်းကို မောက်မာတယ် ။ မာနထောင်လွှားတယ် ။ သူတို့အတွက် ကားဒရိုင်ဘာ တယောက်က ရှိပြီးသား…။ ဦးအောင်စိန် …တဲ့ ။
ဦးအောင်စိန် တယောက်ထဲနဲ့ မလုံလောက်လို့ နောက်တယောက် အမြန်လိုလို့ သူ့ကို ဇော်ကြီးက လွှတ်လိုက်တာ ။ အကြီးမ အိန္ဒြာလူကြီး အပြင်သွားနေလို့ ဦးအောင်စိန် မအားရင် အငယ်မ ဂန္ဓမာလူကြီး သွားစရာ ပေါ်လာတတ်တဲ့အခါ ဒရိုင်ဘာ မပေးနိုင်ရင် တာဝန်ခံ ဦးတင်မောင်လတ်ကို ကြိမ်းမောင်းဆူပူတတ်တာမို့ ဦးတင်မောင်လတ်က ဇော်ကြီးဆီက လူတယောက် အမြန်တောင်းတာ ။
ဦးလူကြီးအတွက် ကားမောင်းပေးတာက သူ့တူအရင်း ..။ နံမည်က ထွဋ်ထွဋ် ..။ ဦးလူကြီးက ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံဘူး ။ သူ့တူကိုဘဲ ယုံတယ် ။ စိတ်ချတယ် ။ ထွဋ်ထွဋ်ကလည်း သူ့ဦးလေး နဲ့ အမြဲ ရှိတယ်။
လူက ဂင်တိုတို ကတုံးဆံတောက် မျက်နှာက မပြုံးမရယ်တတ် အမြဲတမ်းလို တင်းတင်းမာမာနဲ့ ။
ထွဋ်ထွဋ်သည် လေးကန်တယ် ထင်ရသလောက် တခုခု ဖြစ်လာရင် လက်မြန်ပြီး လုပ်ရဲကိုင်ရဲ လူတယောက် လို့ နံမည်ကြီးတယ် ။ သေနတ်ဆောင်တယ်လို့လည်း နီးစပ်တဲ့လူတွေ ပြောဆိုကြတာကြားဖူးကြတယ် ။
ကားမောင်းသူတွေ အပြင် ဦးလူကြီးရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ကင်းအဖွဲ့လို့ နံမည်ပေးထားတဲ့ လူ၁၅ယောက်လောက် ရှိတယ် ။ သူတို့က တိုက်အိမ်ကြီးရဲ့ အနောက်ဖက်က တန်းလျားကြီးတခုမှာ နေတယ် ။ ခြံအဝမှာ အမြဲလို သုံးယောက်လောက် ရှိနေတတ်တယ် ။ ဦးလူကြီး ကားနဲ့ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ
ဒီကင်းသမားတွေက ကားတစီးနဲ့ အနောက်က ထပ်ချပ်မကွာ ပါတတ်တယ် ။ အဲဒီကားမှာ လူ အနည်းဆုံး လေးယောက် လောက် အမြဲ ပါတယ် ။
ဦးတင်မောင်လတ်သည် လူကောင်သေးသေး ပိန်ပိန်ပါးပါး ဖြစ်ပေမယ့် လျစ်နေအောင် ပါးတဲ့ လူကဲခတ်
လည်း အင်မတန်ကောင်းတဲ့လူ ..။ ဦးလူကြီးက အစစ စိတ်ချယုံကြည်ထားပြီး သူ့လုပ်ငန်းတွေ လူတွေ
အားလုံးကို အုပ်ချုပ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုကထဲက လူတော်တယောက်မို့ပေါ့ ..။ ဟန်ဝင်းအောင်ကို ဇော်ကြီး
လွှတ်လိုက်တဲ့လူ ဖြစ်တာတောင် ဦးတင်မောင်လတ်က မယုံကြည်သေးဘူး ။
ဦးလူကြီးရဲ့ သမီးနှစ်ယောက်ကို ကားမောင်းလိုက်ပို့ဖို့ဘဲ ခိုင်းတယ် ။ အိမ်ထဲကိုလည်း ဝင်ခွင့် မရှိဘူး ။
“ နယားပျံ” အိမ်ကြီးကို ဟန်ဝင်းအောင် ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက် ဘာတွေ မြင်ရတယ်..ကြားရတယ်…သိ
ရတယ် ဆိုတာတွေကို အသေးစိတ် လေးမောင်မောင်ကို ပြောပြရတယ် ။ လေးမောင်မောင်နဲ့ ကိုယ်တိုင်
တွေ့စရာ မလိုဘဲ ညိုညိုညိမ်းကနေတဆင့် သတင်းပို့ဖို့ သူ့ကို လေးမောင်မောင်က ပြောထားတယ်။
ညိုညိုညိမ်းနဲ့လည်း အမြဲ မတွေ့နိုင်တော့ဘူး ။ ဦးတင်မောင်လတ်က သူ့ကို ဦးလူကြီးရဲ့ ခြံထဲမှာဘဲ
နေခိုင်းတယ် ။ တပတ်ကို တရက်ဘဲ အိမ်ပြန်ခွင့်ပေးတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ညိုညိုညိမ်းကို ညတိုင်းလို ဖြုတ်နေကျဆိုတော့ ဦးလူကြီးအိမ်ကနေ မပြန်ရတော့ ညညဆို လီးက တောင်ပြီး မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖြစ်ရတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့အခြေအနေကို ပြောပြတယ် ။ လီးမတ်မတ်
တောင်ပြီး လိုးချင်စိတ်တွေ တအား များနေတဲ့အကြောင်း ..။ ညိုညိုညိမ်းက သူ့ကို ပြန်တွေ့တဲ့နေ့ကျ
ရင် အပြတ်လိုးပေါ့…သူ့လီးကို ညိုညိမ်း ကောင်းကောင်း စုတ်ပေးမယ် …ဘာညာနဲ့ ကျေနပ်အောင် နှာစကားလေးတွေ ပြောပေးတယ် ။ ညိုညိုညိမ်း ပြောတာတွေကို နားထောင်ရင်း သူ ကွင်းထုတယ် ။
ဒီနေ့ည ဦးလူကြီး မရှိဘူး ။ အိမ်မှာ မရှိဘူး ။ ဦးလူကြီး တနေရာကို ခရီးသွားနေတယ် ။ ဘယ်ကို သွားမှန်း သမီးတွေတောင် မသိဘူး ။
ဦးလူကြီး က လက်ရှိ ဒီးနာ ဆိုတဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် ဇနီးငယ်ငယ်လေးနဲ့။
အိန္ဒြာလူကြီးနဲ့ ဂန္ဓမာလူကြီးတို့ရဲ့ အမေက ဆုံးတာ ကြာပြီ ။
အိန္ဒြာနဲ့ ဂန္ဓမာတို့က ဒီးနာကို အနိုင်ကျင့်ကြတယ် ။ ဒီးနာကို မြင်တာနဲ့ ရန်စကြတယ် ။ တိုက်ကြီးက
ကြီးမာလွန်းလို့သာ တော်သေးတယ် ။ ဒီးနာလည်း သူတို့နဲ့ ဝေးတဲ့ တိုက်ကြီးရဲ့ အစွန်မှာ နေတယ် ။
တခါတလေ မတော်တဆ သူတို့နဲ့ ဆုံရင် ဒီညီအမက ရေရေလည်လည် မိုက်ရိုင်းတယ် ။ စောင်းမြောင်း
ပြောတာကတော့ အမြဲဘဲ ..။ တခါတလေ လက်ပါ ပါတတ်တယ် ။ ဒီးနာကို လက်ပါလို့ ဦးလူကြီး အရမ်း စိတ်ဆိုးတယ် ။ သမီးနှစ်ယောက်ကို အော်ဟစ်တယ် ။ သမီးတွေက မယားဖက်ပါတယ် ဆိုပြီး
ကက်ကက်လန် ပြန်ဆဲကြတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင် ရောက်ပြီးလို့ တပတ်အကြာမှာ ဒီကိစ္စ ဖြစ်တာ …။
ဟန်ဝင်းအောင်လည်း သူတို့ညီအမ ကို ကားလိုက်မောင်းပို့ပေးရတာ ခပ်လန့်လန့်ဘဲ ။ ဘယ်တော့
ဆဲမလဲ ပါးရိုက်မလဲ လန့်နေရတယ် ။
ဒီနေ့ နေ့လည် အငယ်မ ဂန္ဓမာလူကြီး အပြင်ထွက်တယ် ။ ဒေးကလပ်ကို သွားတာ ။ ဘော်ဒါတွေနဲ့ ချိန်းတာ ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း သူတို့ကို လိုက်ပို့ရင် သူတို့ စီးချင်တဲ့ ကားနဲ့ လိုက်ပို့ရတယ် ။
ကားဂိုဒေါင်က ကား ရှစ်စီး ဆန့်တယ် ။ သူတို့ကားတွေကို အမြဲ ဆီဖြည့် လေဖြည့် စစ်နေရတဲ့ လူတယောက် ရှိတယ် ။ သူတို့စိတ်က ထစ်ကနဲ ပြောင်းသွားတတ်တာ ..။ အခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး ။
လစာ ကောင်းကောင်းပေးထားတော့လည်း လူတွေက ပြာပြာသလဲနဲ့ သူတို့ လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြရတယ် ။
အငယ်မ ဂန္ဓမာက ဘော်ဒါတွေလည်း စီးမှာမို့ မားစီးဒီး ဂျစ်နဲ့ သွားမယ် လို့ အိမ်ဖေါ်မလေးနဲ့ စောစောထဲက ပြောခိုင်းလိုက်လို့ မာစီးဒီးကြီး ထုတ်ပြီး အသင့်ထိုင်စောင့်နေလိုက်တဲ့အချိန် အကြီးမ အိန္ဒြာ အပေါ်ထက်က ဆင်းလာတယ် ။ သူ့အမြဲတမ်း ယဉ်မောင်း ဦးအောင်စိန်က လိုက်ဇပ်စ်ကားအဖြူကြီးနဲ့စောင့်နေတာ မြင်တော့..” ဦးအောင်စိန်….” လို့ ကြုံးအော်လိုက်တယ် ။
ဦးအောင်စိန်လည်း ပြာပြာသလဲ လိုက်ဇပ်စ်ပေါ်က ပြေးဆင်းပြီး အကြီးမ ရှေ့မှာ “ ဟုတ်…အိန္ဒြာ…ဘာ
လုပ်ပေးရမလဲ…” လို့ မေးတယ် ။
“ လိုက်ဇပ်စ် မစီးချင်ဘူး …မားစီးဒီး နဲ့ သွားမယ် …”
“ ဟို..ဟို….အဲ့ကားက ဂန္ဓမာ သွားမလို့ ဆိုလို့….”
“ တောက်..စောက်ကောင်မ ကလည်း ငါစီးမယ့်ကားမှ လာယူတယ်….”
အိန္ဒြာက မကျေမနပ် ဆဲရေးတိုင်းထွာပြီး လိုက်ဇပ်စ်ပေါ်ကို တက်တယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်တို့လည်း ဖိုက်ပွဲများ တွေ့ရအုံးမလား ဆိုပြီး လန့်နေကြရတယ် ။ ဂန္ဓမာ တိုက်ပေါ်က ဆင်းလာတော့ အကြီးမ အိန္ဒြာ မရှိတော့ဘူး ။ ဂန္ဓမာက ဝတ်ထားတာ အရမ်းဟော့တ်တယ် ။ အင်္ကျီပျော့ပျော့အသားက အထဲမှာ ဘရာစီယာ ခံမဝတ်ထားလို့ နို့ကြီးတွေဆီက နို့သီးလေးတွေကို ထင်းထင်းကြီး မြင်နေရတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း သူတို့ကို လန့်နေရတဲ့ ကြားထဲက ခိုးကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်သေးတယ် ။
ဂန္ဓမာလူကြီးက သူ့အမအိန္ဒြာလူကြီးထက် ပို ဟော့( တ် ) တယ် ။
ဝတ်စားတာ နေတာထိုင်တာ အရမ်းလန်တယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင် အလုပ်စ ဝင်တဲ့နေ့က ဆိုရင် ဟန်ဝင်းအောင်ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ပြီး ..“ လူပုံ
က မဆိုးပါဘူး …ဟွန်း ..ဒရိုင်ဘာ မလုပ်ဘဲ ဗီဒီယို မင်းသား လုပ်လို့ရတယ် …” လို့ နှုတ်ခမ်းလေး မဲ့ ပြပြီး ပြောခဲ့တာ…။
ဂန္ဓမာ ကလပ်ထဲကို ဝင်သွားတော့ ဟန်ဝင်းအောင် ဦးတင်မောင်လတ်ဆီကို ဟန်းဖုန်းနဲ့ လှမ်း သတင်းပို့ရတယ် ။ ဂန္ဓမာလူကြီး ကလပ်သွားတဲ့အကြောင်း ..သူ ကလပ်အပြင်မှာ စောင့်နေတဲ့အကြောင်း ..။ ဦးတင်မောင်လတ်က ဒီလိုနေရာတွေကို ဦးလူကြီးသမီးတွေ သွားရင် ဖုန်း
ဆက် သတင်းပို့ဖို့ မှာထားလို့ သူ ဆက်လိုက်တာ ။
ဦးတင်မောင်လတ်က သူ တယောက်ယောက် လွှတ်လိုက်မယ်.မျက်စိရှင်ရှင်ထား…တခုခုဆိုရင် ဘောစိရဲ့ သမီးကို မှဲ့တပေါက် မစွန်းစေနဲ့..အသေခံ ကာကွယ်ရမယ် လို့ ပြောတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်းစိတ်ချပါ ဆရာ..လို့ ပြန်ပြောရင်း ကားပေါ်မှာ မထိုင်ဘဲ ကလပ်အပေါက်နားမှာ ရပ်နေလိုက်တယ် ။
နာရီဝက်လောက် ကြာတော့ တက်စီကားတစီးနဲ့ ညိုညိုညိမ်း ရောက်လာတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းက ဦးတင်မောင်လတ် လွှတ်လိုက်လို့ လိုက်လာတာလို့ ပြောတယ် ။ ကလပ်ထဲကို ညိုညိုညိမ်းက လိုက်ဝင်သွားလို့ ရတာမို့ ညိုညိုညိမ်းကို လွှတ်လိုက်တာ…တဲ့ ။
ညိုညိုညိမ်း ကလပ်ထဲကို ဝင်သွားတယ် ။ ဂန္ဓမာလူကြီး ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ဦးတင်မောင်လတ်က စိတ်
ပူတယ် ။ ဦးလူကြီးရဲ့ သမီးတွေ တခုခု ဖြစ်လို့ မဖြစ်ဘူး ။
ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ကလပ်အပြင်မှာ အကြာကြီး ရပ်စောင့်နေရတယ် ။ သုံးနာရီလောက် ကြာတော့
ညိုညိုညိမ်း သုတ်သီးသုတ်ပြာနဲ့ ထွက်လာတယ် ။
“ ကိုအောင်ရေ….ဂန္ဓမာတော့ တအားမူးနေပြီ….လူမှန်း မသိတော့ဘူး….ဆေးလား အရက်လားတော့ မ
သေချာဘူး….အိမ်ပြန်ခေါ်ကြရအောင် …” လို့ လာပြောတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်က ဂန္ဓမာကို တွဲထုတ်လာပြီး ကားတစီး
ပေါ်ကို တင်ဖို့ လုပ်နေတာကို ဟန်ဝင်းအောင် တွေ့လိုက်တယ် ။
“ ညိုညိမ်းရေ..သူတို့နဲ့ ပါသွားလို့ မဖြစ်ဘူး …ဒို့ အချိန်မှီ တားမှ ဖြစ်မယ် …”
ဟန်ဝင်းအောင် အမြန်ပြေးပြီး ကားမောင်းမယ့် ချာတိတ်ကို တားလိုက်တယ် ။
“ ဟေ့..ဟေ့….သူ့ကို မင်းတို့နဲ့ မထည့်နိုင်ဘူး….ငါတို့က သူ့အိမ်က ဝန်ထမ်းတွေ..ဒို့ ပြန်ခေါ်သွားမယ် ..
ချာတိတ်က မာရေကျောရေနဲ့ ..“ နောက်ဆုတ်စမ်း …မင်းက ဘာမို့လဲ..ဂန္ဓမာက ဒို့နဲ့ လိုက်မယ်လို့ပြောထာပြီးသား….ဝင်မပါနဲ့…”လို့ သူ့ကို ဟောက်တယ် ။
“ လိုက်မယ် ဆိုတာက မမူးခင်က ဖြစ်လိမ့်မယ်..အခုအတိုင်း မင်းတို့ ခေါ်သွားလို့ မရဘူးကွာ..ဆောရီးဘဲ…”
“ ဟေ့ကောင်..မင်းက ဒရိုင်ဘာလား…မင်း ဒိုးတော့ကွာ….ငါ စိတ်ထွက်လာပြီ….မင်း နာချင်လား…”
ဟန်ဝင်းအောင်က ဦးတင်မောင်လတ်က စကားကုန် အမိန့်ပေးပြီးသား ဆိုတော့ ချာတိတ်ကို တွန်းထုတ်လိုက်ပြီး ဂန္ဓမာ့ကို ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ဝင်တွဲခေါ်ဖို့ လုပ်တယ် ။ ချာတိတ်က သူ့ကို ဖိုက်ပြီ ။
“ ဟေ့ကောင်..မင်း ငယ်ပါသေးတယ်ကွာ..”
ဟန်ဝင်းအောင်က စောစောထဲက ခါးနောက်မှာ ထိုးထားတဲ့ ဒုတ်နဲ့ ချာတိတ်ကို ရိုက်တယ် ။
ချာတိတ် နောက်ပြန်လန် လဲကျတဲ့အချိန် ညိုညိုညိမ်းနဲ့သူ ဂန္ဓမာ့ကို တွဲပြီး သူ့ကားဆီကို ခေါ်သွားကြတယ် ။ ချာတိတ်လဲ ခေါင်းထိသွားလို့ ပြန်ထနိုင်ပေမယ့် သူတို့ဆီကို လိုက်မလာတော့ဘူး ။ ဂန္ဓမာကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာတယ် ။ အိမ်ဖေါ်တွေနဲ့ ညိုညိုညိမ်း အိမ်ပေါ်ထပ်ကို တွဲချီ ခေါ်သွားကြတယ် ။
ဦးတင်မောင်လတ် သူနဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို အရမ်း ကျေနပ် သဘောကျသွားတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကို ဦးလူ
ကြီးရဲ့ သမီးတွေ သွားလေရာ အနောက်က လိုက်ဖို့ တာဝန်ပေးလိုက်တယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ကိုလည်း
လစာတိုးပေးပြီး ကားမောင်းရုံမကဘဲ လုံခြုံရေး တာဝန်ကိုပါ ယူခိုင်းတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ဂန္ဓမာ တအား မူးနေတုံးက ထမိန်ပြေကျွတ်ပြီး ပင်တီ သေးမျှင်မျှင်လေး နဲ့ ပေါင်
တန်ဖွေးဖွေးဖြူ ဖြူတွေကို တဝကြီး တွေ့လိုက်ရတာကို မျက်စိထဲက မထွက်ဘူး ။ ပင်တီလေးရဲ့ အရှေ့ဂွဆုံနေရာက ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ..။
ဟန်ဝင်းအောင် စိတ်ကူးထဲမှာ ဂန္ဓမာလူကြီးကို ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ကြည့်နေတယ် ။ မြင်လိုက်ရတဲ့ ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို အဝတ်မပါဘဲ စဉ်းစားပုံဖေါ်ကြည့်နေတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကို ဦးလူကြီးရဲ့ အိမ်မှာ လာနေခိုင်းပေမယ့် သမီးတော်နှစ်ယောက် အပြင်ထွက်ရင် တပါတည်း လိုက်နိုင်အောင် အိမ်မကြီးမှာ အခန်းတခန်းပေးပြီး နေခိုင်းတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း တအိမ်ထဲ နေပြီး ညိုညိုညိမ်းနဲ့ မလိုးရဘဲ ငတ်နေတဲ့ သူ့ဘဝကို ရင်နာနေတယ် ။
တောင်လာတဲ့ သူ့လီးကို တိုက်ထုတ်ပြီး ဖြေဖျောက်လိုက်တော့မည်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး စစချင်း ပုဆိုး
ပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်နေရာက ပုဆိုးကို လှန်ပြီး လက်တဖက်နဲ့ အဖျားပိုင်းကို ချေနယ်နေမိတယ် ။
ခြေသံလိုလို ချွတ်ကနဲ ကြားလိုက်မိလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ဖေါ်မလေး သိသိ သူကွင်းတိုက်
နေတာကို သေသေချာချာကြီးကို စိုက်ကြည့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
အသံမပေးဘာမပေး…တံခါးမခေါက်ဘဲ ..ဘယ်အချိန်က ရောက်နေတာပါလိမ့် ..။
ပုဆိုးကို ပြန်မဖုံးသေးဘဲ သိသိကို မေးလိုက်တယ် ။ သိသိက “ မမလေး ဂန္ဓမာက မနက်ဖန်မနက် ၆နာရီ လေဆိပ်သွားမှာကို လိုက်ပို့ပါ…တဲ့..အဲဒါ လာပြောတာ….” လို့ ပြောတယ် ။
“ ဒါဘဲလား …”
“ ဟုတ် ….”
သိသိရဲ့ မျက်လုံးတွေက တောင်နေတဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးကနေ မခွာဘူး ။ သူ့လီးကို သိသိ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ပုံဘဲ ..။
သိသိပြန်ထွက်သွားတော့ သူလည်း ကွင်းဆက်မတိုက်ချင်တော့တာနဲ့ ခွေလှဲပြီး အိပ်လိုက်တယ် ။ မနက် စောစော ထရအုံးမယ်။
ဒုရဲအုပ် လေးမောင်မောင် လဖက်ရည်ဆိုင်ထဲကနေ ညိုညိုညိမ်းတို့ တိုက်ခန်းကို အကဲခတ်နေတယ် ။
အိပ်ဖေါ်တိ နှစ်ယောက်လုံး ဦးလူကြီးအိမ်မှာ နေနေရပြီ ။ ကြည့်ရတာ ဒီနှစ်ယောက်ကို ဦးလူကြီးတို့မိ
သားစုက ကျေနပ်သဘောကျသွားကြတယ် ထင်တယ် ။
ခုတလော သူတို့နှစ်ယောက်ဆီက ဘာသတင်းမှ တက်မလာဘူး ။ သူတို့နဲ့ မတွေ့တာ ကြာပြီ ။
ညိုညိုညိမ်းကို ဖုန်းခေါ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား …စဉ်းစားနေတုံး တက်စီကား တစီး ထိုးဆိုက်လာတာ
“ ဟင်..ညိုညိုညိမ်း ပါလား …”
တိုက်ထဲကို ဝင်သွားတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ လဖက်ရည်ဖိုး ရှင်းပေးလိုက်ပြီး ဆိုင်ထဲက ထွက်…သူတို့
နေတဲ့ ကွန်ဒို အဆောက်အဦးကြီးဖက်ကို လမ်းဖြတ်ကူးပြီး သွားလိုက်တယ် ။
ညိုညိုညိမ်း တိုက်ခန်းထဲကို ရောက်တာနဲ့ အဲကွန်းကို ဖွင့်တယ် ။ ပူအိုက်လိုက်တာ အရမ်းဘဲ .။ အိပ်ခန်းထဲမှာ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကို အကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ . ဒီနေ့ အိမ်ပြန်ခွင့်ရလို့ လုပ်စရာလေးတွေ လုပ်ရမယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်တော့ ကျန်နေခဲ့တယ် ။
ဦးတင်မောင်လတ်က သူတို့နှစ်ယောက်ကို ငွေလုံလုံလောက်လောက် ထုတ်ပေးတယ် ။
လတ်တလော ဦးလူကြီးရဲ့ သမီးတော်နှစ်ယောက်ကို လိုက် စောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့ ဘော်ဒီဂတ်အလုပ်
ဘဲ လုပ်နေရတယ် ။ မကြာခင်တော့ အချီကြီး အလုပ်တခု လုပ်ရမယ် လို့ ဇော်ကြီးက ပြောတာဘဲ ။
ဦးလူကြီးအိမ်မှာ နေနေရတဲ့အချိန် အစားကောင်းတွေ စွတ်စားပြီး ဝလာသလားမသိဘူး ။
ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးထဲ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် ကြည့်လိုက်တယ် ။ ဝတော့ မလာပါဘူး ။ မှန်ထဲမှာ အဝတ်မဲ့နေတဲ့ ညိုညိုညိမ်းက နို့ထွားထွားကြီးတွေ ကော့လို့ ..။ ခါးသေးသေးလေးအောက်က ဖင်တုံးကြီးတွေက ထယ်နေတယ် ။ ဟွန်း…တြိဂံပုံ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အမွှေးတွေ မဲဖုံးနေပြန်ပြီ ။ ညှပ်ရအုံးမယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ မလိုးရတာလည်း တော်တော်ကြာနေပြီ ။ တခါတခါ တော်တော် လိုချင်တယ် ။
စောက်ဖုတ်ကို လက်ဝါးနဲ့ စမ်းမိနေတဲ့အချိန် တင်းတောင်..တင်းတောင်နဲ့ အခန်းတံခါးက လူခေါ်ခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာတယ် ။
ဘယ်သူလာတာလဲ…။ ဟွန်း….ရေချိုးမလို့ လုပ်နေတာကို ..။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင် ကောင်းမလား …။
အို …ခက်တော့တာဘဲ ..။
ခေါက်တင်ထားတဲ့ ထမိန်အနွမ်းလေးကို ကောက်ယူ ရင်လျားလိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့တံခါးဆီကို လျှောက်သွားလိုက်တယ် ။ ချောင်းကြည့်တဲ့
အပေါက်လေးကနေ အပြင်ကို ကြည့်လိုက်တယ် ။
ဟင်…လေးမောင်မောင် ..။ ဒုရဲအုပ်လေးမောင်မောင် ပါလား …။
ထမိန်ရင်လျားကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတယ် ။ အိပ်ခန်းထဲ ပြန်သွားပြီး တဘက် ဖြစ်ဖြစ် လွှမ်းခြုံ အုပ်ကာလိုက်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်တုံး အပြင်က ဆက်တိုက် တင်တောင် တင်တောင်နဲ့ ဆက်နှိပ်နေတာနဲ့ တံခါးကို
“ ညိုညိမ်း …”
“ ကိုလေးမောင်မောင် …အဲ…အကို……*-”
“ မတွေ့တာ ကြာပြီ …ဘာလို့ ဖုန်းမခေါ်သလဲ……”
“ အဲ့အိမ်မှာ သိတဲ့အတိုင်းဘဲ …ညိုညိမ်းက အစစအရာရာ…”
“ တော်ပြီ..ညိုညိမ်း..ဆင်ခြေတွေ ပေးမနေနဲ့တော့ ..ကဲ..ဘာထူးလဲ..ဦးလူကြီးရဲ့ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ ခတ်နေတဲ့ အတောင်ပံကြီးတွေကို ကျိကနဲ ကျိကနဲ ညှပ်ပစ်လိုက်နိုင်တဲ့ ထိထိမိမိ ဟာလေးတွေ
“ ရရင် အကို့ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီးပြီပေါ့ အကိုရယ်…”
လေးမောင်မောင်ရဲ့ မျက်လုံးတွေက ညိုညိုညိမ်းရဲ့ လုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားတွေ အပေါ်မှာ တချိန်လုံး စူးစိုက်နေတယ် ။ ညိုညိုညိမ်း ထမိန်ရင်လျားနဲ့ဘဲ သူ့ကို စကားပြောနေရတာ အနေရ ခက်လာတယ် ။
“ ခဏနော် …”
“ နေအုံး..မသွားနဲ့အုံး…ပြစရာ ရှိလို့..”
လေးမောင်မောင်က ညိုညိုညိမ်းရဲ့ လက်ကို ဖျတ်ကနဲ ဆွဲထားလိုက်ရင်း သူ့ဖုန်းက ပုံတပုံကို ညိုညိုညိမ်းကို ပြလိုက်တယ် ။
“ သူ့ကို သိလား ….”
ညိုညိုညိမ်း မျက်နှာ အကြီးအကျယ် ပျက်သွားတယ် ။
“ ဦးရောဘတ်သိန်းထွန်း ….လေ…ညိုညိမ်း အကြီးအကျယ် ဘတ်ခဲ့တာ့ လူကြီး….သူက ညိုညိမ်းကို အသဲအသန် လိုက်ရှာနေတယ် …..ညိုညိမ်း ဘယ်မှာ ရှိတယ် ဆိုတာကို သတင်းပေးတဲ့လူကို သိန်းတရာ ဆုငွေပေးမယ် တဲ့…..ညိုညိမ်း..”
ညိုညိမ်း တုန်ုတုန်ရင်ရင် ဖြစ်သွားတယ် ။
ဦးရောဘတ်သိန်းထွန်းကို သူဘတ်ခဲ့တာလည်း ရက်စက်လွန်းတယ်လေ ။ စိန်တွေ အများကြီး ပါတယ် ။ လေးမောင်မောင်က “ ညိုညိမ်း…မင်းလေး ဆီက ငါ နှစ်ခု လိုချင်တယ်….တခုက မင်း..နောက်တခုက ဦးလူကြီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း….ရရင်ရ မရရင်..ဦးရောဘတ်သိန်းထွန်း လက်ကို မင်းကို အပ်လိုက်ရုံဘဲ…..ဘယ်လိုဘဲ..မင်း ဒုံးမဝေးပါဘူးကွာ…..” လို့ ပြောရင်း ညိုညိုညိမ်း
ရဲ့ ဖင်အိအိကြီးကို လှမ်း ညှစ်လိုက်တယ် ။
“ အကို..ညိုညိမ်းကို မရက်စက်ပါနဲ့…”
“ ကိုယ်လိုချင်တာတွေ ပေးမယ်ပေါ့..ဟုတ်လား..”
“ အင်း….အကုန်ပေးမယ်….အဲ့လူကြီးရဲ့ လက်ထဲကိုတော့ ညိုညိမ်းကို မအပ်ပါနဲ့….လာ…လိုက်ခဲ့….”
ညိုညိုညိမ်းက လေးမောင်မောင်ရဲ့ လက်ကို ဆွဲပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းက ရင်လျားထားတဲ့ ထမိန်ကို ဖြေချွတ်ချလိုက်သည် ။
တင်းမာလုံးထွားတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံး…နီညိုညို နို့သီးတွေ ခါးသေးသေး ဗိုက်သားရှပ်ရှပ် အောက်က အမွှေးပါးပါး ဖုံးနေတဲ့ ကြိဂံပုံနေရာတွေကို ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရတော့ လေးမောင်မောင် မတ်တပ်ရပ်လျက်ကနေ ဒူးထောက်ရက် ကျသွားတယ် ။ သူ တောင့်တလိုချင်နေတာ ကို ဗြုံးကနဲ ရလိုက်လို့ ။
ညိုညိုညိမ်းက သူ့ဆီကို တလှမ်းချင်းလျှောက်ပြီး ရောက်လာတယ် ။ မို့ဖေါင်းတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးက သူ့မျက်နှာနဲ့ တထွာတောင် မဝေး ။ လေးမောင်မောင် ဖင်တုံးကြီးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲကိုင်ပြီး
အင်္ဂါစပ်ကြီးကို နမ်းရှုံ့လိုက်တယ် ။
“ အကိုရယ်..ရေချိုးမလို့ လုပ်နေတာ..မချိုးရသေးဘူး…..”
လေးမောင်မောင်က ညိုညိုညိမ်း ဘာပြောနေသလဲ မသိ ။ မကြား ။ အကွဲကြောင်းကြီးကို အားရပါးရ နမ်းရှုံ့နေတယ် ။ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ဖင်တုံးအိအိကြီးတွေကို ဆုပ်လိုက် နယ်လိုက် ..။
ညိုညိုညိမ်း သူ့အနမ်းအရှုံ့တွေကြောင့် ဖီလင်တွေ တက်လာတယ် ။
“ အကို..ကုတင်ပေါ် သွားရအောင်ကွယ်…”
လေးမောင်မောင်သည် ပိန်ကိုင်းကိုင်းနဲ့ ဖြစ်ပေမယ့် လူနံပိန် ကျွဲဂျိုလိန် ဆိုသလိုဘဲ ငယ်ပါက တုတ်ပြီး ရှည်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းက လေးမောင်မောင်ရဲ့ မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ လိင်ချောင်းကို ကျကျနန
စုတ်ပေးတယ် ။ ကြုံဖူးသမျှ မိန်းမတွေထဲမှာ ညိုညိုညိမ်းဟာ လီးစုတ်အကောင်းဆုံးဘဲ လို့ လေးမောင်မောင် သိလိုတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းက အကြာကြီး စုတ်ပေးတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းရဲ့ လျာလေးရဲ့ ထိုးကစား ကလိတာတွေက ကောင်းလွန်းလို့ လေးမောင်မောင် ပြီးလုလု အချိန်မှာ ညိုညိုညိမ်းက သူ့လိင်တန်ကို ပါးစပ်က ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။
လေးမောင်မောင် မိန်းမောနေရာက လန့်ဖျန့်ပြီး နိုးထလာတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းက ပက်လက်လှန် ပေါင်ကားပေးလိုက်တယ် ။ လေးမောင်မောင် ချက်ချင်းဘဲ ညိုညိုညိမ်း ပေါင်ကြားမှာ နေရာယူလိုက်ပြီး သူ့လိင်တန်ကို ဖေါင်းကြွနေတဲ့ အမွှေးရေးရေးနဲ့ အဖုတ်ကြီးရဲ့
နုထွတ်ထွတ် နှုတ်ခမ်းသားတွန့်တွန့်တွေကြားထဲကို ဖိသွင်းလိုက်တယ် ။
ညိုညိုညိမ်း လေးမောင်မောင်ကို လှမ်းဖက်လိုက်တယ် ။ လီးကြီးတာက သိသာလှတယ် ။ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ တင်းကြပ်နေတယ် ။ အတွင်းသားတွေကို လီးတန်က ပွတ်တိုက်လိုက်မှုက ညိုညိုညိမ်းကို
လေသံလေးနဲ့ ညိုညိုညိမ်း ပြောလိုက်တာက လေးမောင်မောင်ရဲ့ စိတ်တွေကို ပိုကြွစေတယ် ။ သူ့လီးကြီး တင်းကနဲ ပိုကြီးလာသလိုဘဲ ။
ဖြေးဖြေးလို့ ပြောကာမှ ဖိသွင်းချင်သွားတယ် ။ လေးမောင်မောင်ကလည်း ညိုညိုညိမ်းကို မျက်စိကျနေတာ ကြာပြီ ။ နို့ကြီးတလုံးကို ကိုင်ညှစ်ပြီး ဖိဖိ ဆောင့်ထည့်တယ် ။
ညိုညိုညိမ်း သူ့ဆောင့်ချက်တိုင်း အီဆိမ့်နေအောင် ကောင်းနေတယ် ။
ဖင်ကြီးတွေကို မွှေ့ရမ်းကော့ပေးမိတယ် ။
“ အင်း….အင်း…ကောင်းတယ်…ကောင်းတယ် …….”
တဖတ်ဖတ်နဲ့ ရေရေလည်လည် ဆောင့်ပေးတယ် ။ အား..ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ်……ဆောင့်ဆောင့်….ဆောင့်….အား………။
အထွဋ်အထိပ်ကို နှစ်ယောက်သား ပြိင်တူလို တက်လှမ်းသွားကြတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းလည်း ဟန်ဝင်းအောင်ထက်တောင် အလိုးကောင်းတဲ့ သူ့ကို သဘောကျသွားတယ် ။
ဂန္ဓမာလူကြီး ဆံပင်ဖီးနေတဲ့အချိန် သူမ အနောက်က အိမ်ဖေါ်သိသိ ဖြတ်သွားတာကို မှန်ထဲကနေ တွေ့လိုက်တယ် ။
သိသိက ခေါင်းငြှိမ့်ပြပေမယ့် တခိခိနဲ့ ရယ်နေတယ် ။
“ သိသိ..ဘာဖြစ်နေတာလဲ..ဘာတွေ သဘောကျနေတာလဲ….”
သိသိက ရယ်ဘဲ ရယ်နေလို့ ဂန္ဓမာ သိသိကို သူ့အနားခေါ်ပြီး သေသေချာချာ မေးတယ် ။
“ ပြောစမ်း..ပြောစမ်း……သိသိ…ပြောစမ်း….ဘာဖြစ်လာလဲ……..နင် ဘာတွေ့ခဲ့လို့လဲ.”
သိသိက “ အဲ့လူကြီး ကျမသွားတဲ့အချိန် သူ့ပုဆိုးကို လှန်ပြီး……ခိခိခိ…….” လို့ ပြောရင်း ရယ်ပြန်တယ် ။
“ ဟယ်…..သူ..သူ…သူ..ဘာတွေ လုပ်နေလဲ…..”
“ သူ့ဟာကြီးကို ဆောင့်နေတာ..လက်နဲ့ ဆုပ်ပြီး ဆောင့်နေတာ…”
“ဟင်…ဟုတ်လား…..သိသိ သေသေချာချာ ပြော့ပစမ်း…ဘာဆောင့်တာလဲ..ကွင်းထုတာလား …. ”
“ အင်း….အဲဒါမျိုးပေါ့ …. သူ့အတန်ကြီးကို လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆောင့်နေတာ…အတန်ကြီးကလည်း တော်တော် တုတ်တယ်..ရှည်လည်း ရှည်တယ် …. ဟီး….ထိပ်ဖက်မှာလည်း မှဲ့ကြီးတလုံးနဲ့…”
ဂန္ဓမာ အရမ်း စိတ်ဝင်စားသွားတယ် ။ နဂိုထဲကမှ ဒီ ဒရိုင်ဘာက ဇာတ်လိုက် ပုံ ဖမ်းနေလို့ သတိထား
ကြည့်ကြည့်နေမိတာ…။ ဂန္ဓမာ့ကိုလည်း သူ ခိုးခိုး ကြည့်တတ်တယ် ။ သူ့အကြည့်က တဏှာကြည့် ဆိုတာ ဂန္ဓမာ သိတယ် ။ သတ္တိ တော့ တော်တော် ကောင်းတဲ့ လူဘဲ..။ ဂန္ဓမာတို့ ဆီမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေ ဦးတင်မောင်လတ်ကို ကြောက်ကြလို့ မျက်လုံးအောက်စိုက်ပြီး စကားပြောကြတာ ..။ ဂန္ဓမာတို့ကို မရိုးမသား လုပ်ရင် ကောင်းကောင်း အဆုံးအမ ခံရမယ် ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြတယ် ။ သူကတော့ ကြည့်တာကိုက ပြီတီတီနဲ့ ..။ သိသိ ပြောနေတာက..သူ့အတန်ကြီးက အကြီးစားကြီး ဆိုပါလား …။ ဂန္ဓမာ အရမ်း စိတ်တွေ ထကြွနေတယ် ။ သူ့အတန်ကြီးကို တွေ့ဖူးမြင်ဖူးချင်သွားတယ် ။
မနက် ခြောက်နာရီ မထိုးခင် ဟန်ဝင်းအောင် တိုက်ကြီးရဲ့ အရှေ့ တံခါးပေါက်မှာ ကားနဲ့ အဆင်သင့်
ရောက်နေပြီ ။ မကြာခင် ဂန္ဓမာ ဒေါက်ဖိနပ်သံ တခွပ်ခွပ်နဲ့ အပေါ်ထပ်က ဆင်းလာတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်က ကားနောက်ခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်တယ် ။ ဂန္ဓမာက ဟန်ဝင်းအောင်ကို တချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ကားထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ကားပေါ်ရောက်တော့..“ ဘယ်ကိုသွားပါမလဲ..မမ..” လို့ မေးလိုက်တယ် ။
ဂန္ဓမာက “ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကို သွားမယ် ..” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ ဂန္ဓမာ့မျက်နှာက ခပ်တင်းတင်း ။
ဂန္ဓမာ့စိတ်ထဲမှာ ဒီကောင့်ကို စိတ်ဝင်စားနေပေမယ့် သူက ဒရိုင်ဘာ..ကိုယ်က သူဌေးသမီး…အဆင့်အတန်း ချင်းက ကွာခြားလှလို့ သူ့ကို စိတ်ဝင်စားတာကို မပြသလိုဘူး ။ သိသိ ပြောတာကတော့ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ဒီကောင်က ရည်းစားတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ ။
မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် ရောက်တော့ ဂန္ဓမာက “ သူငယ်ချင်း..နိုင်ငံခြားထွက်တာ လိုက်ပို့မလို့..သိပ် မကြာဘူး….ခဏဘဲ….” လို့ ဟန်ဝင်းအောင်ကို ပြောပြီး ကားပေါ်က ဆင်းသွားတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်လည်း..“ ဟုတ်ကဲ့မမ..” လို့ ပြန်ပြောရင်း လေဆိပ်ထဲ ဝင်သွားတဲ့ ဂန္ဓမာလူကြီးရဲ့ လှပ
အချိုးကျတဲ့ ကိုယ်လုံး အနောက်ဖက်မြင်ကွင်းကို တဝကြီး ငေးကြည့်ရင်း ကျန်ခဲ့တယ် ။
ညိုညိုညိမ်းကို လေးမောင်မောင်က ညိုညိုညိမ်းတို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ထိုင်း စားသောက်ဆိုင်ကို ခေါ်သွားတယ် ။ နှစ်ချီကောင်း လိုးလိုက်ကြတာ တော်တော်လေး ကျေနပ်မိကြတယ် ။ ရေမိုးချိုးပြီး
ဘိုက်ဆာတာနဲ့ ထမင်းသွားစားကြတယ် ။ လေးမောင်မောင်က ဂဏန်းပျော့ကြော် …ခေါက်ဆွဲပြားကြော် ဝက်သားးကုန်းဘောင် မှာတယ် ။ ပင်လယ်စာတွေ နဲ့ ယိုးဒယား ဟင်းချို စပ်စပ်နဲ့ ..။
လေးမောင်မောင် က ဘီယာသောက်တယ် ။ လေးမောင်မောင် ကို ညိုညိမ်း ကြည့်မိတယ် ။ သူ့ပုံက ဆံပင် ရှည်ရှည် ညှင်းသိုးသိုးနဲ့..။ ရဲပုံ မပေါက်ဘူး ။ ဂျင်းဘောင်းဘီ အနွမ်းနဲ့ လက်မှာလည်း
ဟန်းချိန်းတွေနဲ့ သဘောင်္သားတယောက် လိုလို ပုံ ..။ လူပိန်သလို လီးကလဲ ရှည်တဲ့လူ ..။ ဟွန်း….လိုးလိုက်တာ အသားကုန် ..။
“ ဘာမှ ဟုတ်ဖူး…”
“ အိုး..ဒီမှာ ပြောလို့ မဖြစ်ဘူး ….”
ဆိုင်လေးက အရှေ့ဖက် ဆိုင်ပြင်မှာလည်း ခုံတွေ စားပွဲတွေ ခင်းထားပေးတယ် ။ အစားအသောက်တွေ ရောက်လာတယ် ။ နှစ်ယောက်သား ဆာဆာ နဲ့ စားလိုက်ကြတာ စကားတောင် မပြောဖြစ်ဘူး ။
ဆိုင်က အရက်လဲ ရောင်းတော့ စားပွဲတွေမှာ အရက်ပုလင်းတွေ ထောင်ပြီး သောက်နေကြတာ တွေ့ရတယ် ။ ခဏကြာတော့ ရန်ဖြစ်ကြပါရော …။
တုတ်တပျက် ဓါးတပျက် ဆိုတာမျိုး ။ အရက်မူးမူးနဲ့ ဓါးဆွဲထုတ်ပြီး ရမ်းကားတာကို တွေ့ပေမယ့် လေးမောင်မောင်က သူနဲ့ မဆိုင်သလို နေနေတာ တွေ့ရတယ် ။ အသွင်ယူထားတဲ့ ရဲ တယောက် ဆို
တော့ သူ့ရှေ့မှာ ဓါးနဲ့ ထိုးတောင် သူက မသိချင်ယောင် ဆောင်နေမယ့် သဘော ရှိတယ် ။
တဝတွယ်ပစ်တာ တော်တော်လေး ဘိုက်လေးသွားတယ် ။
“ အခု ဘယ်သွားမလဲ ညိုညိမ်း ….”
“ ဟိုအိမ်ကို ပြန်ရမှာပေါ့…..”
“ ဘယ်တော့ ထပ်တွေ့ကြအုံးမလဲ……”
“ သိသေးဘူးလေ …ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် ……”
“ ဘာနဲ့ သွားမလဲ လိုက်ပို့ရမလား……”
“ ရတယ်…နေပစေ..တက်စီ နဲ့ သွားမယ် ….”
“ ထူးခြားရင်လဲ ပြောအုံး…လူကြီးတွေက သိချင်နေတယ် ….တခုခုပေါ့…..”
တက်စီတစီး လာလို့ တားလိုက်တယ် ….။
“ ဟုတ်ပြီ..ညိုညိမ်း …..”
ညိုညိမ်း တက်စီသမားကို ဦးလူကြီးအိမ် လိပ်စာ ပြောပြပြီး မောင်းခိုင်းလိုက်တယ် ။
ဖုန်း တတစ်တစ် မြည်လာတယ် ။ အင်း..ဦးတင်မောင်လတ် ခေါ်တာ …။ ဦးလူကြီးအိမ်ကို ရောက်ရင် သူ့အခန်းကို လာဖို့ ပြောတယ် ။ မေးစရာ ရှိလို့တဲ့ ..။ လာခဲ့မယ် လို့ ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်တဲ့
အချိန် ဖုန်းနောက်တခါ မြည်လာပြန်တယ် ။
ဘယ်သူခေါ်သလဲ ကြည့်လိုက်တော့ ဇော်ကြီး ခေါ်တာ …။
“ ညိုညိမ်း..အခု ဘယ်မှာလဲ….”
“ တက်စီပေါ်မှာ..ဟိုအိမ်ကို ပြန်မလို့…”
“ အေး…ညိုညိမ်း..အလုပ်ပေါ်ပြီဟ..နင်တို့နဲ့ ကိုက်တဲ့အလုပ်..နင်တို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်မျိုး…..အချီကြီး….ဂွင်ကောင်းတယ်….ရိုက်တာ မိလိုက်လို့ကတော့ လျံ ပြီ..ဟန်ဝင်းအောင်ကို တိုးတိုး ပြောထား
နင်တို့ လှုပ်ရှားရမယ့် အချိန်ကျရင် ဦးလူကြီးအိမ်က ဂျူတီအတွက် ဦးတင်မောင်လတ်ကို ငါ ပြောထားလိုက်မယ် ….လူစားလဲပေးလိုက်မယ်….”
“ အိုကေ ကိုဇော်ကြီး….လှုပ်ရှားဖို့ ရယ်ဒီဘဲ……”
ဦးလူကြီး ရဲ့ ခြံဝင်းကြီး ရှေ့ကို ရောက်တော့ ညိုညိုညိမ်း တက်စီခပေးပြီး တက်စီပေါ်က ဆင်းလိုက်တယ် ။
အုတ်တံတိုင်း အမြင့်ကြီး ကာထားတဲ့ ခြံကျယ်ကြီးထဲကို အပြင်က ကောင်းကောင်း မမြင်နိုင်ဘူး ။ ကြီးမားတဲ့ ရွှေရောင်နဲ့ အနက်ဆေးတွေ သုတ်ထားတဲ့ သံတံခါးကြီး အထဲက လူတစုက ညိုညိုညိမ်း
တက်စီပေါ်က ဆင်းလာတာ မြင်တာနဲ့ တံခါးကြီးဘေးက တံခါးပေါက် သေးသေးလေးကို ဖွင့်ပေးထားတယ် ။ ခြံစောင့်တွေက ညိုညိုညိမ်းကို ဒီအိမ်ကမှန်း သိကြလို့ ဖွင့်ပေးတာ ..။
လုံခြုံရေးကင်းတဲကို ဖြတ်ခဲ့တော့ ကာကီဝတ် လုံခြုံရေးတွေက ညိုညိမ်းကို ပြုံးပြနုတ်ဆက်ကြတယ် ။ ဦးလူကြီးရဲ့ သမီးတွေနဲ့ အတူတူ လိုက်ရတဲ့ သူမို့ သူတို့ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံကြတယ် ။
တိုက်အိမ်ကြီးက မီးတွေ ထိန်ထိန်လင်းပြီး ကြီးမားလွန်းနေတယ် ။ အရှေ့တံခါးမကြီး ကနေ အထဲ မဝင်ဘဲ အိမ်ကြီးကို ပတ်ဖေါက်ထားတဲ့ လမ်းကလေးအတိုင်း
အိမ်နောက်ဖေးကို လျှောက်သွားလိုက်တယ် ။ လမ်းမှာ အယ်လ်ဇေးရှင်း ခွေးကြီးတကောင်ကို ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ ဆွဲကိုင်ထားတဲ့ ကင်းသမားတယောက်ကို တွေ့ရတယ် ။ ကင်းသမား လက်ထဲမှာ ဂျပန်
ကင်ဒိုဓါးတချောင်း ကိုင်ထားတယ် ။ ခွေးကြီးက လျာတန်းလန်းနဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ မောနေပုံဘဲ ..။
အိမ်အနောက်ဖက်ကို ရောက်လာတော့ မီးဖိုကြီးကို ဝင်တဲ့ အပေါက်ကနေ ညိုညိုညိမ်း အထဲကို ဝင်ဖို့ လုပ်တယ် ။ တံခါးက အထဲက ပိတ်ထားတယ် ။ တံခါးခေါက်လိုက်တော့ အိမ်ဖေါ် သိသိ လာဖွင့်
ပေးတယ် ။ စားဖိုမှူး ( ချက်ကြီး ) မူတူးက တရှဲရှဲနဲ့ ကြော်လှော် ချက်နေတယ် ။
“ သိသိ..မအိန္ဒြာ ရှိလား….”
“ ရှိတယ်….မဂန္ဒမာ တော့ မရှိဘူး..မနက်အစောကြီးထဲက ထွက်သွားတာ ခုထိ ပြန်မရောက်သေးဘူး….”
“ ကိုဟန်ဝင်းအောင် မောင်းတာလား….”
သိသိက စားဖိုမှူး မူတူး က ဒယ်ပြားကြီးထဲကနေ ပုဂံတွေထဲ လောင်းထည့်ပေးတဲ့ တငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ ဟင်းတွေကို လင်ပန်းတချပ်ထဲ ထည့်ပြီး သယ်ဆောင်သွားတယ် ။ မူတူးက မေးငေါ့ပြပြီး
“ အကြီးမအတွက်…” လို့ ပြောတယ် ။ ညိုညိမ်းက မီးဖိုချောင်ထဲကနေ ထွက်ဖို့ ပြင်တော့..“ ညီမလေး..တခုခု စားမလား..အိကု ချက်ပေးမယ်..” လို့ သွားကြီး ဖြဲပြီး ပြောလိုက်တယ် ။
ညိုညိမ်းလည်း ကုလားတော့ ဘူးနေပြီ လို့ စိတ်ထဲမှာ ပြောဆိုလိုက်ရင်း..ပါးစပ်ကတော့..“ မစားတော့ဘူး..ကိုမူတူး..အလုပ် ရှိသေးလို့…” လို့ ပြောရင်း ထွက်လာခဲ့တယ် ။
ညိုညိမ်း ဦးတည်နေတာက ဦးတင်မောင်လတ်ရဲ့ အခန်း …။ ရုံးခန်း …။
အင်း…ယောက်ျားတွေများ မိန်းမမြင်ရင် ငမ်းငမ်းတက် ဘူးထနေကြတာဘဲ…ထမင်းချက် ကုလားရော ခြံစောင့်ရော ငါ့ဖင်တွေကို
ကြည့်လိုက်ကြတာ အာသာ တငမ်းငမ်းနဲ့…။
ဦးတင်မောင်လတ်ရဲ့ အခန်းတံခါး ပိတ်မထား ။
ကွန်ပြူတာနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ဦးတင်မောင်လတ်ကို ညိုညိုညိမ်း တွေ့နေရတယ် ။
ညိုညိညိမ်း သူ့အခန်းဝကို ရောက်လာတာကိုလည်း ဦးတင်မောင်လတ်က တွေ့တယ် ။
“ လာ..ဝင်ခဲ့ ညိုညိုညိမ်း …. ”
ရွှေရောင်ကိုင်းမျက်မှန်အပေါ်က ကျော်ကြည့်ပြီး ဦးတင်မောင်လတ်က ခေါ်တယ် ။
သူ့အခန်းက မွှေးနေတယ် ။ လေအေးစက်က စိမ့်နေအောင် အေးနေတယ် ။
“ တံခါး ပိတ်ခဲ့လိုက် ညိုညိမ်း…”
ညိုညိုညိမ်း သူ့အမိန့်ကို နာခံရတယ် ။ အခန်းဝင်ပေါက် တံခါးကို ပိတ်လိုက်တယ် ။
“ လာ..ဒီကို..ညည်းကို မေးစရာတွေကော ပြောစရာတွေကော ရှိတယ် …”
ညိုညိုညိမ်း စိတ်ထဲမှာ ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် ။ သူ ဘာတွေများ သိသွားပြီလဲ….။
“ ဦးတင်မောင်လတ် ထိုင်နေတဲ့ အလုပ်စားပွဲနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ခုံပုလေးမှာ ညိုညိုညိမ်း ထိုင်လိုက်တဲ့
အချိန် ဦးတင်မောင်လတ် မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကြောင့် ညိုညိုညိမ်း တုန်သွားတယ် ။
“ ညည်းနဲ့ စောစောက ထိုင်းစာ ထိုင်စားတဲ့လူက ဘယ်သူလဲ…..”တဲ့ ။
ဒါပေမယ့် ညိုညိုညိမ်းဘဲလေ ..။ လုပ်စားလာတာ ကြာပြီ….ဖိုးတွမ်တီးမ ဘဲ…။
“ ညိုညိမ်းရဲ့ အကိုဝမ်းကွဲပါ..ဆရာ..ဘာဖြစ်လို့လဲဟင် …” လို့ ရုပ်ရှင်ထဲက အိန္ဒြ‘ာကျော်ဇင် ရဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တာကို ပြသတဲ့ အမူအရာလေးမျိုးနဲ့ ပြန်မေးလိုက်ပါတယ် ။
“ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး..ညည်း ဘဲများ ရနေသလားလို့ …”
တနည်းအားဖြင့် ဦးတင်မောင်လတ်က သူတို့ရဲ့ နား မျက်စိတွေ လျင်တယ် ဆိုတာ ပြသလိုက်တာဘဲ
လို့ ညိုညိုညိမ်း ယူဆလိုက်တယ် ။
“ နောက်တခု မေးချင်တာက ညည်း သိပြီးပြီလား..ဇော်ကြီးမှာ ညည်းနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်အတွက် အလုပ်လုပ်စရာ ရှိနေပြီ….”
“ ဟုတ်ကဲ့..ကိုဇော်ကြီး စောစောကဘဲ ဖုန်းဆက်ပြီး ညိုညိမ်းကို ပြောပြပါတယ် ..”
“ အေး….ညည်းတို့ ပိပိရိရိ သေသေချာချာ လုပ်ကြ..အဲဒီအလုပ်က မြက်မြက်လေး စားကြရမဲ အလုပ် …
တခုရှိတာက ညည်းတို့ ဘတ်ရမယ့်လူက နယ်နယ်ရရတော့ မဟုတ်ဘူး …ကျောက်နဲ့ ပတ်သက်ရင် သူ
က ဘုရင်အဆင့်ထက်တောင် မြင့်လို့ ကျောက်ဖုရား…လို့ နံမည်တွင်သွားတဲ့ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်..
သူ့မှာ အဆက်ကောင်းတွေ ရှိတယ်..ပိုင်တယ်..တပည့်တပန်းပေါတယ် ..ချမ်းသာတာက ကျိကျိတက်..
ဒီတော့ ကိစ္စပြီးရင် ဒီမှာ မနေနဲ့..ညည်းတို့ နယ်စပ်ဖြစ်ဖြစ် ခဏ ရှောင်နေရင် ကောင်းတယ် …”
“နောက်တခုက ညည်းကို ပြောချင်တာကတော့ အလုပ်နဲ့ မပတ်သက်ဘူး …မဆိုင်ဘူး….ကိုယ်ရေးကိုယ်
တာပေါ့ဟာ…ညည်းကို…ငါ စတွေ့တွေ့ချင်းထဲက စိတ်ဝင်စားတယ်…..ညည်းမှာ စွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ညှို့နိုင်
တဲ့ အင်အား….တခု …. ရှိနေတယ် ..ညည်းကို မြင်တိုင်း..ညည်း ကြည့်လိုက်တဲ့ အကြည့်က ငါ့ကို တုန်ခါ သွားစေတယ် …ငါ့စိတ်တွေကို ထကြွစေတယ်..”
ညိုညိုညိမ်း လည်း ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဘူး ။ ဦးတင်မောင်လတ် ကိုဘဲ ကြည့်ပြီး နားထောင်နေတယ် ။ ဦးတင်မောင်လတ်က သူ့ရှေ့စားပွဲပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ရေဖန်ခွက်ကို ကောက်ယူပြီး သောက်လိုက်ပြီးမှ
စကား ဆက်တယ် ။
“ ဒီတော့ ညည်း..နဲ့ ငါ တွေ့ချင်တယ် …အဲဒါ ညည်း ဘယ်လိုသဘောရလဲ…”
ညိုညိုညိမ်းက တိုးတိုးလေး ရယ်လိုက်တယ် ။
“ ဒါများ ဆရာရယ်…ညိုညိမ်းကို အချိန်မရွေး တွေ့နိုင်တာဘဲ ဥစ္စာကို…အခုလည်း ညိုညိမ်းက ဆရာ့အခန်းထဲမှာလေ …ဒါလဲ တွေ့နေတာဘဲ မဟုတ်လား…..”
“ အာ..နင် ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ..အခုလို တွေ့တာမျိုး မဟုတ်ဘူး …လွတ်လွတ်လပ်လပ် တနေရာ
မှာ တွေ့ကြဖို့ ပြောတာ….”
“ ရပါတယ်..ဆရာ..ဆရာ့အတွက်ဆို ညိုညိမ်းကို သန်းကောင်ကျော်အချိန် ခေါ်လည်း လိုက်လာမှာ…အခု
ရော ဆရာ့ကို ညိုညိမ်း တခုခု ပြုစုပေးမယ် ဆိုရင်ကော…”
ဦးတင်မောင်လတ်ရဲ့ မျက်နှာ ပြုံးပြုံးကြီး ဖြစ်သွားတယ် ။
“ ဘာ…ဘာ…..ဘာ….ပြုစုမှာလဲဟင်…ညိုညိုညိမ်း . . .”
“ ဆရာ့ကို ညိုညိမ်း မှုတ်ပေးချင်တယ်…”
ဟော….ညိုညိုညိမ်း သူ့ကို ညှို့မျက်လုံးရွဲကြီးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်ပြီး ပြောနေတယ် ။ နှုတ်ခမ်းကွေးကွေး
ကော့ကော့လေးတွေ တွန့်ပြီး ပြုံးရင်း ..။
အမြဲလို ခပ်တည်တည် ခပ်တင်းတင်း နေတတ်တဲ့ ဦးတင်မောင်လတ် မျက်နှာကြီး ဝင်းပ ကြည်လင်သွား
ညိုညိုညိမ်း မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တယ် ။ သူမနဲ့ ဦးတင်မောင်လတ် က ခြေလှမ်း သုံးလှမ်း ပင် မကွာတဲ့
အကွာအဝေးမှာ ။ ညိုညိုညိမ်းက ဦးတင်မောင်လတ်ကို စိုက်ကြည့်ရင်း တလှမ်းချင်း တိုးကပ်သွားပြီး လက်ကမ်းပေးလိုက်တယ် ။
“ လာ..ဆရာ..ကုတင်ကြီးပေါ်ကို သွးကြရအောင် …” လို့လည်း ခေါ်လိုက်တယ် ။ ဦးတင်မောင်လတ် ဆေးမိနေတဲ့ လူတယောက်လို ညိုညိုညိမ်း ကမ်းပေးနေတဲ့ လက်ကလေးကို ဆွဲကိုင်လိုက်မိပြီး သူမခေါ်ဆောင်ရာ ကုတင်ကြီးပေါ်ကို လိုက်ပါသွားရတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းတို့ကိုဘဲ ခင်တင်းတင်း စေခိုင်းခဲ့တဲ့ ဦးတင်မောင်လတ် ဟာ အခုတော့ ညိုညိုညိမ်း လုပ်
ခိုင်းနေတာတွေကို လိုက်လုပ်နေပါတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းက ဦးတင်မောင်လတ် ဝတ်ထားတဲ့ ပုဆိုးကို ဖြေချွတ်လိုက်တယ် ။
“ ဆရာ့ကိုလေ..ညိုညိမ်းက ဟောလီးဝပ်မင်းသားကြီး နစ်ကေ့ခ်ျနဲ့ တူတယ်ဆိုပြီး အမြဲ သဘောကျနေတာ..သိလား…ဆရာကတော့ သိမှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ….”
ပုဆိုး ညိုညိုညိမ်း လက်ထဲကို ရောက်သွားတယ် ။ ဟိန်း အမျိုးအစား အတွင်းခံဘောင်းဘီအဖြူရောင်
အောက်က ဦးတင်မောင်လတ်ရဲ့ ဒုတ်ကြီးက ငေါငေါကြီး ထောင်ထနေတယ် ။
အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပါ ညိုညိုညိမ်းက ချွတ်ပြန်ပြီ ။ ညိုညိုညိမ်းရဲ့ လက်နှစ်ဖက်က ဘေးတဖက်တချက်ကနေ စုံကိုင်ပြီး ဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့အခါ ဦးတင်မောင်လတ်ရဲ့ မာကျောထောင်ထနေတဲ့
ဒုတ်ကြီးက ဗြောင်းကနဲ ပေါ်ထွက်လာပါတယ် ။
ယောက်ျားတွေရဲ့ ဒုတ်အမျိုးမျိုး ဒုတ်ပေါင်းများစွာကို မြင်တွေ့ဘူးခဲ့တဲ့ ညိုညိုညိမ်းအတွက်က ဦးတင်မောင်လတ်ရဲ့ ဒုတ်က သိပ် အဆန်းကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ သို့ပေမယ့် ဦးတင်မောင်လတ် ကျေနပ်သဘောကျစေဖို့ ညိုညိုညိမ်း တအံ့တသြ ပုံစံနဲ့ “ အိုး…အကြီးကြီးပါလား….” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
ပြီးတော့ ထောင်နေတဲ့ ဒုတ်ကြီးကို လက်နဲ့ အသာလေး သပ်လိုက်တယ် ။ ဦးတင်မောင်လတ်အဖို့ ဒီ
လို ညိုညိုညိမ်း ဖွဖွလေး ထိတယ် ဆိုရုံလေး သပ်လိုက်တာက ကြက်သီး ဖျန်းကနဲ ထသွားရတယ် ။
ဒုတ်ကြီးထိပ်ပေါက်က အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေတယ် ။ ဒီအရည်ကြည်လေးတွေကို ညိုညိုညိမ်းက လက်ညှိုးထိပ်လေးနဲ့ အသာ တို့ကြည့်နေတယ် ။
“ ဆရာ့ပစ္စည်းကြီးကိုလေ..ညိုညိမ်း မြင်တာနဲ့ ညိုညိမ်း အူတွေ အသဲတွေ ကလီစာတွေ ဗြောင်းဆန်ကုန်ရတာဘဲ..တုန်ခါကုန်ရတာဘဲ…ဟင့်
ဟင့်..တကယ့်ကို အားကောင်းမယ့်ကောင်ကြီး….” လို့ ညုတုတု တီတီတာတာလေး ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ။ ဒုတ်ကြီးကို ချက်ချင်း မကိုင်သေးဘဲ ထိကပါး ရိကပါး လုပ်နေတယ် ။
ဦးတင်မောင်လတ်ကတော့ လိုချင်လှပြီ ။ သူ့ဒုတ်ကြီးကို စုတ်စေချင်လှပြီ ။
ညိုညိုညိမ်းက ဒုတ်တန်ကြီးကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေပြန်တယ် ။
ဦးတင်မောင်လတ် ရဲ့ ညည်းငြူလိုက်သံကြောင့် ညိုညိုညိမ်း ကျေနပ်သွားတယ် ။ သူမ ပွတ်သပ်ပေးနေ
တာက သူ့ကို ထိရောက်စေလို့ ..။
အချိန်တန်ပြီ ။ ပုလွေ ဘယ်လောက်ကျွမ်းသလဲ ..ပြလိုက်တော့မယ် …။ လက်တဖက်က ဒုတ်ကြီးရဲ့ အရင်းပိုင်းကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ပြဲလန်နေတဲ့ ဒစ်လုံးကားကားကြီးကို ငုံခဲလိုက်ပါတယ်
ဂန္ဒမာ က ဟန်းဖုန်းကို ခေါ်ပြီး သူ လေဆိပ်ထဲက ထွက်လာတော့မယ်လို့ ပြောလို့ ဟန်ဝင်းအောင် ကားရပ်ထားတဲ့နေရာကနေ လေဆိပ် အပေါက်ရှေ့ကို ကားကို မောင်းလာခဲ့လိုက်တယ် ။ သူ့ကားလည်း တံခါးပေါက်ကြီး ရှေ့ကို ရောက်ရော ဂန္ဒမာလည်း ကားဆီကို လျောက်လာနေတယ် ။ ချိန်သားအကိုက်ဘဲ ။
ဂန္ဒမာ ကားပေါ်တက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ဟန်ဝင်းအောင်ကို တောင်ဒဂုံကို မောင်းဖို့ ပြောလိုက်တယ် ။
“ တောင်ဒဂုံ ဘယ်နားလဲ …မမ”
“ ရှိပ်( က် ) ဆိုတဲ့ ကလပ်……သိလား..အရင်..ဂန္ဒမာ့ကို မင်း လိုက်ပို့ဖူးတယ်လေ ….”
“ အော်..ဟုတ်ကဲ့..ဟို လူရုပ်ကြီးတွေနဲ့နေရာလား ..”
“ ဟုတ်တယ် ….”
အစောကြီး ရှိသေးတယ် ..။ ဂန္ဒမာ ကလပ်ကို ဘာသွား လုပ်မလို့လဲ မသိဘူး ..။
ဦးတင်မောင်လတ်ဆီကို ဖုန်းဆက် သတင်းပို့ရမယ် ။ တော်ကြာ တခုခု ဖြစ်ရင် ငါ မသက်သာဘူး ..။
“ ဟန်ဝင်းအောင် …”
ဂန္ဒမာ သူ့ကို ရုတ်တရက် ခေါ်လိုက်လို့ ဟန်ဝင်းအောင် လန့်သွားတယ် ။
“ ဟုတ်ကဲ့ ..မမ ”
“ မင်းနဲ့ ညိုညိုညိမ်းက ချစ်သူတွေလား …”
“ ဟင်းဟင်း..ညာမနေပါနဲ့ကွာ….ဟုတ်ရင် ဟုတ်တယ်ပေါ့ …”
“ တကယ်ပါ….ညိုညိမ်းက ကျနော့် ချစ်သူ မဟုတ်ပါဘူး…..”
“ အင်း….သူ့ကို ယုံမနေနဲ့..သူက ကိုဇော်ကြီးနဲ့လည်း ဖြစ်နေတာ..သိလား….”
“ ဟုတ်လား..မမ..ကျနော် အဲဒါ မသိဘူး …”
“ ရှိပ်က် ကလပ် ” ခြံဝင်းထဲကို ကား ကွေ့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန် ကလပ် အပေါက်ဝမှာ ဂန္ဒမာရဲ့ တွဲနေကျ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ရောက်နေတာကို ဟန်ဝင်းအောင် တွေ့လိုက်ရတယ် ။
“ ဖူးစုံရွှေ ” နဲ့ “ နီရဲတောက်ပ ” ….။
ကားလဲ ထိုးဆိုက်လိုက်ရော ဂန္ဒမာက ကာထဲက ဆင်းလိုက်ပြီး ဖုန်းကို ထုတ်ပြီး ဦးတင်မောင်လတ်ကို သတင်းပို့ဖို့ ပြင်နေတဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ကို “ ဖုန်း ဆက်မနေနဲ့တော့..မင်း မမနဲ့ အထဲ လိုက်ခဲ့
လေ….လာ…လာ….လိုက်ခဲ့…” လို့ ခေါ်တယ် ။ ဂန္ဒမာ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကလည်း သူ့ကို “ လာ..လာ…လာ….လိုက်ခဲ့..” ဆိုပြီး ဆွဲခေါ်ကြတယ် ။
ကလပ် ပေါက်ဝမှာ ဆံပင်ကောက်ကောက် ပိန်ရှည်ရှည် ကုလား တယောက် မျက်နှာတင်းတင်းနဲ့ ရပ်နေတယ် ။ တံခါးပေါက်စောင့်က မျက်နှာထား တင်းလှချည်လား လို့ ဟန်ဝင်းအောင် ထင်လိုက်
မိပေမယ့် ဂန္ဒမာတို့ အုပ်စုကိုလည်း တွေ့ရော ဒီကုလားပိန်ရဲ့ မျက်နှာက ပြုံးပြုံးကြီး ဖြစ်သွားတယ် ..။
“ ဟာ..ညီမလေးတို့ ကြွပါကြွပါ ….ဝင်ပါ…”
ကလပ်ထဲမှာက အမှောင်ချထားတယ် ..။ အရင်ဆုံး ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ စင်္ကြ န်လေးထဲကနေ လျှောက်သွားရတယ် ။ ကျယ်လောင်တဲ့ အနောက်တိုင်း ဂီတသံက နားကွဲမတတ် ဆူညံနေတယ် ။ တဝုန်း
ဝုန်း တဒုံးဒုံး ဆူညံတဲ့ တီးလုံးဆန်းတွေကြောင့် ဂန္ဒမာတို့ သုံးယောက်လည်း ထိုးထိုး ထွန့်ထွန့်တွေ ဖြစ်လာတယ် ။ တင်ပါးတွေ တဆတ်ဆတ်ခါလှုပ်ပြီး လမ်းလျှောက်နေကြတယ် ။
ရုတ်တရက် ခန်းမအကျယ်ကြီး တခုထဲကို ရောက်သွားကြတယ် ။ လူတရပ်ကျော် မြင့်တဲ့ ဆောင်းဘောက်စ်ကြီးတွေနဲ့ ကပွဲခန်းမကြီး …။ ဟန်ဝင်းအောင် တခါမှ ဒီလို ခန်းနား ကြီးကျယ်တဲ့ ကလပ်
ကြီး တခုကို မရောက်ဖူးဘူး ..။ အရက်ပုလင်းတွေ အများကြီး ပြသထားတဲ့ ဘားကောင်တာ တခုကိုလည်း တွေ့နေရတယ် ။ ကပွဲခန်းမကြီး အလည်မှာ စင်မြင့် ခပ် နိမ့်နိမ့်တခု ရှိနေတယ် ။
ဒီ စင်မြင့်ပေါ်မှာ ကိုယ် အောက်ပိုင်းမှာ အနက်ရောင် ကိုယ်ကျပ်ဘောင်းဘီ ..ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာ ဘရာစီယာအနက်လေးတခုဘဲ ဝတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်က စတီးတိုင်ချောင်းကို ကိုင်ပြီး
တင်ပါးကြီးတွေကို တရမ်းရမ်းနဲ့ ကနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
စင်မြင့်အောက်မှာတော့ လူငယ်တွေ တပု့ကြီးဘဲ လက်တွေကို အပေါ် မြှောက်ရမ်းပြီး ခုံပေါက် ကနေကြတယ် ။ ခန်းမကြီး ဘေးတောက်လျှောက်မှာ စားပွဲခုံလေးတွေနဲ့ ကုလားထိုင်လေးတွေ
ရှိနေတယ် ။ စားပွဲလေးတွေ အပေါ်မှာ ဖန်ခွက်ဝိုင်းဝိုင်းကြီးထဲ ဖယောင်းတိုင်တတိုင်ကို ထွန်းထားတာကိုလည်း တွေ့ရတယ် ။ ကောင်လေး ကောင်မလေးစုံတွဲတချို့ ဒီ စားပွဲတွေမှာ ထိုင်နေကြတယ် ။
တချို့ စုံတွဲလေးတွေကပြောင်ဘဲ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့ကပ် စုတ်နမ်းနေကြတာကိုလည်း တွေ့ရတယ် ..။
သူတို့ကို ခန်းမထဲက ပြောင်လက်နေတဲ့ အနက်ရောင် ဝတ်စုံနဲ့ မိန်းမတယောက် က ပြေးလာ ကြိုဆိုတယ် ။ ဒီမိန်းမက ဦးဆောင်ပြီး သူတို့ လေးယောက်ကို အခန်းတခန်းထဲကို ခေါ်သွားတယ် ။
စပါယ်ရှယ် သီးသန့်ခန်း တခုပေါ့ ..။ ဒီအခန်းထဲမှာလည်း ဖယောင်းတိုင်လေး တတိုင်ကိုဘဲ ဖန်ခွက်ကြီး တခွက်ထဲ ထွန်းထားတယ် ။ စားပွဲအဝိုင်းတလုံး ရှိနေတယ် ။ ပြီးတော့ သားရေအညိုရောင်
ဆိုဖါကြီးတွေက ပတ်ပတ်လည်မှာ ရှိနေတယ် ။ တော်တော့်ကို သားနား သန့်ရှင်းတဲ့ အခန်းဘဲ ..။
ဂန္ဒမာက သူ့ကို ထိုင်ခိုင်းတယ် ။ သူတို့လည်း ၀ိုင်း ထိုင်လိုက်ကြတယ် ။ ဦးဆောင် ခေါ်သွားတဲ့ မိန်းမက အနီးကပ် တွေ့လိုက်တဲ့ အချိန် အသက် သိပ် မငယ်တော့တဲ့ မိန်းမကြီးတယောက် ဆိုတာ
သိလိုက်ရတယ် ။ ဒီမိန်းမကြီးက သူ့လက်ထဲက အိုင်ပက်အပြားလေးထဲ ကို လက်ညှိုးနဲ့ ဖိနှိပ်နေတယ် ။ ချက်ချင်းဆိုသလိုဘဲ စားပွဲထိုး မိန်းကလေးတွေက သူတို့အတွက် သောက်စရာ
အဖျော်ယမကာတွေ ယူချလာကြတယ် ..။
ဂန္ဒမာရဲ့ သူငယ်ချင်း “ ဖူးစုံရွှေ ” က သူ့စလင်းဘက် အိတ်ထဲက ကပ်ထူဘူးလေး တဘူးကို ထုတ်ယူလိုက်ပြီး ဂန္ဒမာ့လက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်တယ် ။ ဂန္ဒမာက ဘူးလေးကို ဖွင့်လိုက်ပြီး
ဘူးထဲက ဆေးပြားလေးတွေကို တပြားချင်း ထုတ်ယူပြီး လူတိုင်းကို ခွံ့တယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ကိုလည်း တပြား ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပေးပြီး စားပွဲပေါ်က ၀ိုင်ခွက်လေးကို လည်း ကမ်းပေးပြီး…“ မြိုလိုက်..
သောက်လိုက်..” လို့ ပြောလို့ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း မလွန်းဆန်ရဲဘဲ ဂန္ဒမာ့အမိန့်အတိုင်း ဆေးပြားလေးကို ၀ိုင်နဲ့ မျှောချပြီး မြိုလိုက်တယ် ။
“ ကဲ စားပွဲပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အရည်တွေက အလှကြည့်ဖို့ မဟုတ်ဖူးနော်..အကုန်သောက်ကြ..ပျော်ကြ..ကချင် ကကြ…” လို့ ဂန္ဒမာက အားလုံးကို ပြောလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်လဲ ဆေးပြားကို မြို
ဖန်ခွက်ထဲက ၀ိုင်တွေကို မော့သောက်ပစ်လိုက်တယ် ။
“ ဖူးစုံရွှေ ”က သောက်လဲသောက် ထလည်း ကတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း အမျိုးမျိုး ဆိုးခဲ့ပေမယ့် ဒီလို အတွေ့အကြုံမျိုး မရှိခဲ့ဖူးဘူး..။ မိန်းမချောလေး ရင်တွေ တင်တွေ လှုပ်ခါရမ်းပြီး အနီးကပ်
ကနေတာလည်း မတွေ့ဖူးဘူး ဆိုတော့ အရမ်းကို ထူးဆန်းနေတာပေါ့ ။
ငါးမိနစ်လောက် အတွင်း ဆေးပြား တန်ခိုးက ပြလာတယ် ။ အရက်မူးသလို မဟုတ်ဘဲ တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ သူတကိုယ်လုံး လေထဲ လွင့်မျောကလို ဖြစ်လာတယ် ။ ကခုန်ချင်တဲ့
စိတ်တွေလည်း ပေါက်လာတယ် ။ သူ့ဘေးကို မိန်းကလေး တယောက် လာထိုင်လိုက်လို့ ဘယ်သူလဲလို့ ကြည့်လိုက်တယ် ။ ဂန္ဒာနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း မဟုတ်ဘူး ..။ ကလပ်က စားပွဲထိုး
ကောင်မလေးတွေထဲက တယောက် ဖြစ်လိမ့်မယ် ။
“ အကို သောက်လေ…ညီမ ထပ်ယူလာသေးတယ် ….”
အရက်တွေ ထပ်ယူလာပါလား …။
“ မင်းက ဘယ်သူလဲ..နံမည်…နံမည်…..”
“ ညီမနံမည်က “ စူးရှထက်မြက် ” ပါ …အကို့နံမည်ကကော ….”
သူ့စိတ်တွေ တအား ကြွနေတယ် ။ ဆေးပြားက စိတ်ကြွဆေး ဆိုတာ ဖြစ်မယ် ။ “ အကို့နံမည်က ဘာဂျာဘခက်….” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ စူးရှထက်မြက်က တခိခိနဲ့ ရယ်တယ် ..။
“ အို..နံမည်ကလည်း ဘာဂျာထက်မြက်တဲ့ ခိခိ….ဘာဂျာ ကျွမ်းလို့ ပေးထားတဲ့ နံမည်လားဟင်…ခိခိခိ……”
“ ဒါပေါ့..အကိုက ဘာဂျာ ရေလည် မှုတ်တာ…..ဒါကြောင့်…..”
“ အယ်…လန့်စရာကြီး…တော်ကြာ..စူးရှကို မှုတ်သွားအုံးမယ် ….”
“ ဟားဟားဟား….မှုတ်မှာ….မှုတ်မှာ..အကိုက စူးရှကို မှုတ်..စူးရှကလည်း အကို့ကို ပြန်မှုတ်ပေးပေါ့….”
“ အံမာ…ဘာလို့ မှုတ်ရမှာလဲ….ခိခိခိ……မုန့်ဖိုး အရင်ပေး….ကျန်တာ နောက်မှ ပြော…..”
ဟန်ဝင်းအောင် ပေါင်ပေါ်ကို ကောင်မလေးက တက်ထိုင်လိုက်တယ် ။ ကောင်မလေးရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေက တလှုပ်လှုပ်နဲ့ အပေါ်ကနေ ဖိပွတ်နေတယ် ။ ခက်တော့တာဘဲ ..။ ပုဆိုးထဲက ဒုတ်
က ထကြွလာတယ် ။ မြူးလာတယ် ။ ကောင်မလေးနဲ့ သူနဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ဂန္ဒမာတို့ သုံးယောက်က သတိမထားမိဘူးလား မသိဘူး ။ ဖယောင်းတိုင်လေးကလည်း တဖြေးဖြေးနဲ့
တိုတိုလာနေတယ် ။ မှောင်နေတဲ့ အခန်းထဲ သိပ် မသဲကွဲလှဘူး ..။
ကောင်လေး တင်ပါးတွေ ကြားထဲ သူ့ဒုတ်က တည့်တည့်မတ်မတ်ကြီး ထိုးထောက်မိထားတယ် ။
ကောင်လေး လက်တဖက်က ဒုတ်ကို လာစမ်းတယ် ။ သူ တအား မူးနေပြီ …။ စူးရှထက်မြက်ရဲ့ တင်ပါးအိအ်ိကြီးတွေကို လက်နဲ့ ဆုပ်ညှစ်လိုက်မိတယ် ။
ကောင်မလေးက သူ့ဒုတ်ကို ပွတ်ကိုင်နေတယ် ။ ပုဆိုး အပေါ်ကဘဲ ..။ သူလည်း စိတ်တွေ ရဲတင်းလာပြီး ကောင်မလေးရဲ့ ချို ချိုကြီး နှစ်လုံးကို လက်သရမ်းလိုက်တယ် ။ အိ..နဲတာကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး
။ တဖြေးဖြေးနဲ့ သူနဲ့ စူးရှထက်မြက်တို့ ကြမ်းလာကြတယ် ။ စူးရှထက်မြက်ရဲ့ ချိုချိုကြီးတွေကို သူ ကောင်းကောင်း ဆော့ကစား ကိုင်တွယ်နေသလို သူ့ဒုတ်ကိုလည်း စူးရှထက်မြက်က ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ညှစ်ပွတ်သပ်နေပြီ …။
စူးရှထက်မြက်က ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ ပုဆိုးစကို ဆွဲဖြုတ်ဖြေလိုက်ပြီး သူမလက်ကလေးကို ပုဆိုးထဲကို သွင်းလိုက်တယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်လည်း စူးရှထက်မြက်ရဲ့ တီရှပ်အနက်ကို ဆွဲလှန်တင်လိုက်တယ် ။ ဖယောင်းတိုင်မီးရောင်လဲ့လဲ့လေးအောက်မှာ
ဘရာစီယာအနက်ရောင်ထဲက အတင်းကြီးကို ရုန်းကန်ထွက်နေတဲ့ စူးရှထက်မြက်ရဲ့ နို့ကြီးတွေကို မြင်လိုက်ရတယ် ။ ဘရာစီယာကို
တွန်းလှန်တင်ပြီး နို့ကြီးတွေကို အငမ်းမရ ကိုင်တွယ်တယ် ။
“ မြွေက အကြီးကြီးဘဲ….ပါးပြင်းကြီး ထောင်ပြီး……မြွေဆိပ် ထုတ်ပေးရမလား ….ခိခိခိ…..”
စူးရှထက်မြက်က ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ မာကျော ထောင်မတ်နေတဲ့ လိင်တန်ကြီးကို လက်နဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးနေတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်က
စူးရှရဲ့ နို့ကြီးတွေကို ငုံ့စို့နေလို့ သူ့လိင်တန်ကြီးကို စူးရှကိုင်ဆုပ်ကစားနေတာကို ဂန္ဒမာတို့ သုံးယောက်က ဘေးကနေ ၀ိုင်းကြည့်နေကြတာကို
ဂန္ဒမာလူကြီးလည်း အိမ်ဖေါ်မလေး သိသိ ပြောတာ မှန်တယ် ဆိုတာကို လက်တွေ့ကျကျ သိလိုက်ရတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင် ရဲ့
တန်ဆာချောင်းက တော်တော့်ကို ကြီးတာဘဲ ။ ဂန္ဒမာနဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်လည်း ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လိင်တန်ဆာကို တွေ့ဖူးချင်လို့
ကလပ်က စားပွဲထိုးမလေး စူးရှထက်မြက် ကို ငွေပေးပြီး ခုလို လုပ်ခိုင်းလိုက်တာပါ ။
ဖယောင်းတိုင်လေးက တိုသထက် တိုပြီး မီးငြိမ်းသွားတယ် ။ အရမ်း မှောင်သွားတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်ကတော့ စူးရှရဲ့ နို့သီးခေါင်း မာမာလေးတွေကို စို့လို့ကောင်းနေတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ ဟန်ဝင်းအောင်ဘေးမှာ ကပ်ထိုင်နေတဲ့
ဂန္ဒမာက စူးရှထက်မြက် ရဲ့ လက်ကို တို့ဆိတ်လိုက်တဲ့အခါ စူးရှထက်မြက်က လိင်တန်ချောင်းပေါ်က သူမလက်ကို ရုတ်လိုက်တယ် ။ ဂန္ဒမာက
ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့လိင်တန်ကို စူးရှ ဆုပ်နယ်နေသလိုမျိုး ဆုပ်နယ် ဖျစ်ညှစ်လိုက်တယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ကတော့ အမှောင်ထဲမှာ
စူးရှထက်မြက်ကဘဲ သူ့လိင်ချောင်းကိုကိုင်ညှစ်နေတယ် လို့ ထင်နေတယ် ။
စိတ်ကြွဆေး တန်ခိုးက တဖြေးဖြေးနဲ့ သိသိသာသာ ပြသလာနေတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင် တအား မူးလာတယ် ။ အရက်ကလည်း စူးရှထက်မြက် လာလာတိုက်လို့ တခွက်ပြီးတခွက် သောက်မိလို့
အရက်နဲ့ ဆေး ပေါင်းသွားပြီး လူမှန်းမသိ ဖြစ်လာတယ် ။ သူ့လိင်တန်ကြီးကတော့ တောင်မာဆဲဘဲ ။
စူးရှထက်မြက်ရဲ့ စကပ်အောက်ကနေ သူ့လက်ထိုးသွင်းပြီး စူးရှထက်မြက်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို သူ ကိုင်နှိုက်
ကစားနေတုံး မူးမိုက်ပြီး ပက်လက် အိပ်ပျော်သလို ဖြစ်သွားရတယ် ။ စူးရှထက်မြက်က “ ကဲ..အမတို့
ရေ…ကျမ တာဝန်ကျေပါတယ်နော်…အမတို့ဘဲ ဆက် တာဝန်ယူလိုက်ကြပါ….” လို့ ပြောပြီး အဝတ်အစားတွေ သေသေသပ်သပ် ပြန်ဝတ်ပြီး
အထူးသီးသန့်ခန်းထဲက ပြန်ထွက်သွားလိုက်ပါတယ် ။
ဂန္ဒမာလူကြီးက အခန်း မျက်နှာကျက်က မီးကို ခလုပ်နှိပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်တယ် ။
လိင်တန်ကြီး တောင်မတ်ပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ကို သုံးယောက်သား ကြည့်ပြီး ရယ်မော
လိုက်ကြတာကတော့ ဂန္ဒမာရယ်..ဖူးစုံရွှေရယ် ..နီရဲတောက်ပရယ် ဖြစ်ပါတယ် ။
နီရဲတောက်ပက စပြီး ဟန်ဝင်းအောင် လိင်တန်ကြီးကို အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆိုဖါပေါ် ဖင်ကြီးကုန်း
ပြီး လိင်တန်ချောင်းကို ပါးစပ်ထဲ ငုံပြီး စစုတ်လိုက်တယ် ။ လိင်တန်လုံးပတ်က ကြီးတုတ်လွန်းတာကြောင့်
နီရဲတောက်ပရဲ့ ပါးစပ်ထဲ လိင်တန်ကြီးက မဆန့်မပြဲကြီး အပြည့်ကြီး ဖြစ်နေရတယ် ။
နီရဲတောက်ပ စုတ်နေတဲ့အချိန် ဖူးစုံရွှေကလည်း ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ လဥကြီးနှစ်လုံးကို လျာနဲ့ ယက်တယ် ။ ဂန္ဒမာကတော့
သူတို့ လုပ်တာတွေကို အနီးကပ်ကြည့်နေတယ် ။ လိင်တန်ချောင်းကြီးက တကယ့် စူပါကြီးဘဲ ။
နီရဲတောက်ပသည် ယောက်ျားအတွေ့အကြုံများသူ..လိင်ကိစ္စကို ခုံမင်သူ ..ရာထူးကြီးလူကြီးတယောက်ရဲ့ သမီး ဖြစ်တယ် ။
ဂန္ဒမာလူကြီးနဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ သူတို့ မိုးမမြင်လေမမြင် ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ ။ ဒီကလပ်က အထူး ဗီအိုင်ပီအခန်းကို သူတို့ အပြတ်ငှားထား
တယ် ။ သူတို့ လုပ်ချင်တာလုပ် ဘယ်သူမှ အနားကိုတောင် မသီကြဘူး ။ နီရဲတောက်ပရဲ့ အဖေကြီး
ဦးတောက်ပ ကို ကလပ်ပိုင်ရှင်တွေ…စီးပွားရေးသမားတွေက ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်နေကြရတယ်လေ ။ ရဲတွေကလည်း
ဒီကလပ်နားကို ယောင်လို့တောင် မလာဘူး ။
နီရဲတောက်ပက တဝကြီး စုတ်အပြီး ဖူးစုံရွှေကို အလှည့်ပေးလိုက်တယ် ။ ဖူးစုံရွှေက ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လိင်ချောင်းကြီးကို အားရပါးရ စုတ်ပြန်တယ်
။ ဂန္ဒမာကတော့ သှူုသူငယ်ချင်းတွေ လီးစုတ်နေတာကို သေသေချာချာ အနီးကပ် ကြည့်နေတယ် ။ ဂန္ဒမာရဲ့ စိတ်တွေ တလှိုက်လှိုက် ထိုးတက်
ဂန္ဒမာ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးလည်း တအားဖေါင်းကြွ စိုရွှဲလာနေပြီ ။ မှိုပွင့်ကြီးလို ထိပ်ဖူးကားကားနဲ့ လိင်ချောင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး အရမ်းကို
ယားတက်လာတယ် ။ အလိုးခံချင်စိတ်တွေက ထိန်းလို့ မရတော့အောင်ဘဲ ထကြွလာတယ် ။
ဝတ်ထားတဲ့ မီနီစကပ် အတိုကို မတင်လိုက်ပြီး ပင်တီကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ပင်တီ ဂွဆုံနေရာမှာက ကာမရှေ့ပြေး အရည်တွေက စိုစိုရွှဲနေတယ် ။ တအားယားနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို လက်ဖဝါးနဲ့ ကိုင်ပွတ်နေရင်း ဖူးစုံရွှေ စုတ်နေတာကို အနီးကပ် ကြည့်နေတယ်၊ နီရဲတောက်ပကတော့ ဖူးစုံရွှေလက်ထဲက လိင်တန်ချောင်းကြီးကို ဆွဲဆွဲလုပြီး လျာနဲ့ ယက်လိုက် စုတ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတယ် ။
တော်တော်လေး ကြာအောင် သူတို့ စုတ်နေယက်နေတာကို ကြည့်နေပြီး မနေနိုင်တော့ဘဲ..“ ယူတို့ ဒီလောက် ဆိုရင် တော်တော့ကွာ..ဂန္ဒမာ သူ့လီးကြီးကို စမ်းကြည့်ချင်တယ်…” လို့ သဲကြီး
မဲကြီး စုတ်ယက်နေတဲ့ ဖူးစုံရွှေနဲ့ နီရဲတောက်ပတို့ကို ပြောလိုက်တယ် ။
ဖူးစုံရွှေနဲ့ နီရဲတောက်ပတို့လည်း ဂန္ဒမာ့ကို အလှည့်ပေးဖို့အခုမှ သတိရသွားကြပြီး အနောက်ကို ဆုတ်ခါ နေရာ ဖယ်ပေးလိုက်ကြတယ် ။ သူတို့ တအားစုတ်ထားလို့ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လိင်ချောင်း ထိပ်ဖူးကြီးက နီရဲနေသလို သူတို့ရဲ့ သွားရည်များ စိုပေပြောင်လက်နေတယ် ။ ဂန္ဒမာလည်းဝန်ဝင်းအောင် ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက်ထိုင်လိုက်ပြီး လက်တဖက်က လိင်တန်ထိပ်ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး သူမအဖုတ်
ပေါက်ဝမှာ တေ့လိုက်တော့ နီရဲတောက်ပနဲ့ ဖူးစုံရွှေတို့လည်း အနီးကပ် လာကြည့်ရင်း သူတို့ ပေါင်ကြားက အဖုတ်တွေကို သူတို့ ကိုင်ပွတ်နေကြတယ် ။
ဂန္ဒမာလည်းအသာလေး ဖိချကြည့်လိုက်တော့ သူမ အဖုတ်က အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတာရယ်..ဟန်ဝင်းအောင် လိင်တန်ကလည်း အရည်တွေ စိုနေတာရယ်ကြောင့် လိင်တန်ထိပ်ဖုလုံးကြီး ဗျိကနဲ
အဖုတ်ခေါင်းထဲကို မြုပ်ဝင်သွားပါတော့တယ် ။
“ အား…အင်း . . .”
ဂန္ဒမာလည်း မျက်လုံးလေး မှေးစင်းထားပြီး နီရဲတဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်မွှာက မဟတဟ ပွင့်ဟနေတယ် ။ ညည်းသံလေး ထွက်လာပြီး လိင်ချောင်းမာမာကြီးအပေါ် ဆက်ဖိချလိုက်တယ် ။ စီးစီးကျပ်ကျပ်ကြီး
လိင်တန်အရင်းပိုင်းအထိ မြုပ်ဝင်သွားတယ် ။
သူမဖင်တုံးကြီးတွေကို ကြွလိုက် ဖိလိုက်နဲ့ လိင်တန်ကို တက်စီးနေတဲ့ ဂန္ဒမာလည်း သူမနို့ကြီးတွေကို သူက ဖျစ်ညှစ်ကစားနေတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်မှာတော့ မူးလွန်းနေလို့ ဘာတွေ ဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်း မသိဘူး ။ ပါးစပ်ကတော့ ဂန္ဒမာ ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်လိုက်တဲ့အခါတွေမှာ အသံ ထွက်လာတယ် ။ ဂန္ဒမာလည်း ပါးစပ်က “ အားရှီး…အားရှီး..“ နဲ့ အော်ရင်း ခပ်သွက်သွက် ဖိဖိဆောင့်ရင်း မကြာခင်ဘဲ လမ်းဆုံး ပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းသွားရတယ် ။ “ အားအားအီးအီးအားဟား” နဲ့ အော်ရင်း တကိုယ်လုံး တုန်ခါကာ ပြီးသွားပါတော့တယ် ။
ဂန္ဒမာ ပြီးသွားပေမယ့် ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ လိင်တန်ကြီးကတော့ မာကျောဆဲ တောင်မတ်ဆဲဘဲ ..။
ဖူးစုံရွှေနဲ့ နီရဲတောက်ပတို့ တယောက် မျက်နှာကို တယောက် ပြုံးပြီး ကြည့်လိုက်ကြတယ် ။ ဂန္ဒမာ ပြီးသွားပြီမို့ ငါတို့နှစ်ယောက် စိတ်ကြိုက်ဗျင်းကြစို့ လို့ ဆိုလိုတဲ့ သဘောပေါ့ …။
နီရဲတောက်ပ က သူမကိုယ် အောက်ပိုင်းမှာ ကျန်နေတဲ့ နောက်ဆုံး ပင်တီပါးလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက်လိုက်ပါတယ် ။
ဂန္ဒမာကတော့ ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရသွားလို့ သူတို့ဘေးမှာ ဆိုဖာပေါ် ခွေခွေလေး လှဲအိပ်နေတယ် ။
ဒုရဲအုပ်လေးမောင်မောင်သည် အထက်အကြီးအကဲရဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ ရောက်နေတယ် ။ အထက်လူကြီးများက လေးမောင်မောင်ကို အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲရဲ့ အခြေအနေကို မေးတယ် ။ ဦးလူကြီးကို ဆွဲစိဖို့
သက်သေခံ အထောက်အထား တခုခု ရပြီလား လို့ မေးကြတယ် ။ လေးမောင်မောင်လည်း ခုထိ မရသေးတဲ့အကြောင်း ပြောပြတယ် ။ ရဲမှူးတွေက မကျေနပ်ကြဘူး ။
“ အိပ်ဖေါ်တီး မင်းကို ဘတ်နေပြီ ထင်တယ်..လေးမောင်မောင် …”
လေးမောင်မောင် ဘာပြန်ပြောရမလဲ မသိဘူး ။
ဂန္ဒမာ..နီရဲတောက်ပ..ဖူးစုံရွှေတို့ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ ဒုတ်ကို အားရအောင် ကစားကြ အသုံးချကြပြီး ဟန်ဝင်းအောင်ကို ကလပ်က အခန်းထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့ကြပြီး ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ထွက်သွားကြတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင် နိုးလာတော့ သီးသန့်အခန်းလေးထဲမှာ သူတယောက်ထဲ ရှိနေတယ် ။ သူ့ပုဆိုးကလည်း
ပြေကျွတ်နေတယ် ။ လိင်တန်ကလည်း နာကျင်နေတယ် ။ တော်တော့်ကိုဘဲ လိင်ဆက်ဆံထားတဲ့ပုံစံဘဲ ။ စူးရှတောက်ပနဲ့သူ ဖြစ်တာဘဲလို့ ဟန်ဝင်းအောင် မှတ်မိလိုက်တယ် ။ ဂန္ဒမာတို့ မရှိတော့ဘူး ။ ကလပ်ရှေ့မှာ ရပ်ထားခဲ့တဲ့ ကားလည်း မရှိတော့ဘူး ။
အိမ်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ အိမ်ဖေါ်မ သိသိက ဂန္ဒမာနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ကို ပြန်ရောက်နေကြ
ပြီလို့ ပြောပြတယ် ။ဟန်ဝင်းအောင် ဂန္ဒမာအတွက် စိတ်အေးရပေမယ့် သူမူးပြီး အိပ်ပျော်ကျန်ခဲ့တာကို
ဦးတင်မောင်လတ်သာ သိခဲ့ရင် သူ့ကို ဘယ်လောက် စိတ်ဆိုးလိုက်မလဲ ။ သူ ဦးတင်မောင်လတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မယ် ထင်တယ် ..။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တိုက်ကြီးရဲ့ ဘေးဖက်တနေရာမှာ ကားကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ အိမ်ဖေါ်မလေး
သိသိကို တွေ့တယ် ။ “ ဆရာဦးတင်မောင်လတ် ရှိနေလား…” လို့ သူမေးလိုက်တော့ သိသိက “ စောစောကဘဲ သူ့အခန်းကို အစားလာပို့ဖို့ ဖုန်းနဲ့ ပြောလို့ သိသိသွားပို့လိုက်သေးတယ်..သူ ရှိနေတယ်…” လို့ ဖြေတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင် ဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်တော့ ဦးတင်မောင်လတ်က အေးဆေးဘဲ..။ သူ့ကို ဘာမှ မဆူ
ဘူး ။ မကြာခင် အလုပ်ကြီးတခု ပေါ်ပြီမို့ ညိုညိုညိမ်းနဲ့ အတူ ဇော်ကြီးဆီကို သွားဖို့ ပြောတယ် ။
တော်ပါသေးရဲ့..။ ဘာမှ မဆူမဆဲလို့ ..။
အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲ ကို ဇော်ကြီးက လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကို သေသေချာချာ ရှင်းပြတယ် ။ သူတို့စုံတွဲ အထပ်
ထပ် လေ့ကျင့်ရမှာတွေကို ရှင်းပြတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းက သံရုံးတရုံးက ဝန်ထမ်းတွေ အဖြစ် ဟန်ဆောင်ကြရမယ် ။
သံရုံးကားနဲ့ တူအောင် ဗော်လ်ဗိုကားအနက်ကြီးတစီးကို သံတမန်နံပါတ်ပြား ပြောင်းတပ်ပေးမယ် လို့
ဇော်ကြီးက ပြောတယ် ။
နိုင်ငံခြားသံရုံးက နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တူအောင် အဝတ်အစားတွေကိုလည်း ရှာဖွေပေးတယ် ။ သူတို့ လုပ်ရမှာက ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ရဲ့ မိုးကုတ်ကျောက်တွေကို နိုင်ငံခြားကို ခိုးထုတ်ပေးမယ် ဆိုပြီး သံရုံးဝန်ထမ်းတွေ အဖြစ် သံရုံးကားနဲ့ ဟန်ဆောင်ကြရမှာ….။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က နိုင်ငံခြားကို ထုတ်ချင်တဲ့ မိုးကုတ်ကျောက်တွေကို သူ့မိတ်ဆွေ ကျောက်အဖွဲ့တွေဆီက စုပေးပြီး ကြားပွဲစားကနေတဆင့် သံရုံးအမှုထမ်း လက်ထဲကို ထည့်ဖို့ လုပ်နေတာကြောင့် သူတို့အဖွဲ့က သံတမန်တွေနေရာမှာ အစားထိုးဝင်ပြီး ဟန်ဆောင်ပြီး ကျောက်တွေကို ဘတ်ကြဖို့ လုပ်တာ ..။
ကြားပွဲစားက ဘယ်သူဖြစ်နေသလဲ ဆိုတော့ သူနဲ့အတူ ထောင်ကျခဲ့တဲ့ နပိုလီယန် ဖြစ်နေတယ် ။
နပိုလီယန်က ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ကို သံရုံးနဲ့ ဆက်ပေးတဲ့ ပွဲစား ..။
ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ နပိုလီယန် ပြန်ဆုံတွေ့ကြပြီ ။
ဇော်ကြီးက ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ကို ရှိန်တယ် ။ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က တပည့်တပန်းနဲ့ အဆက်
အသွယ် သိပ်ကောင်းတယ် ။ အစိုးရပိုင်းကို ပိုင်တယ် ။ ဘတ်တဲ့ ကိစ္စပြီးရင် ဟန်ဝင်းအောင်..ညိုညိုညိမ်းတို့နဲ့ နပိုလီယန်ပါ နယ်စပ်ကို ရှောင်သင့်တယ်လို့ ပြောတယ် ။ နပိုလီယန်က စိတ်ချပါဗျာ..ကျနော်လည်း ဖိုးတွမ်တီး လုပ်စားလာတာပါ …ရှောင်တတ် တိမ်းတတ်ပါတယ် လို့ ဇော်ကြီးကို ပြောလိုက်တယ် ။
နပိုလီယန်သည် ထောင်က ထွက်လာပြီးနောက် ကျောက်ပွဲစား ကျော်ကျော်ထိုက် ဆိုတဲ့ နံမည်နဲ့ ကျောက်သမားလောကမှာ ဝင်ရောနေပြီး ရွှေဘုံသာလမ်း တနေရာက “ သုခရတနာ ရွှေဆိုင် ” မှာ စတဲချပြီး ကျောက်အရောင်းအဝယ်တွေ လုပ်ကိုင်နေတာပါ ။ ဒီမှာ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်နဲ့ တွေ့တော့နပိုလီယန်က သူ့မှာ နိုင်ငံခြားသံရုံး အဆက်ရှိတယ် လို့ ပြောပြပြီး တကယ်လဲ ဆက်ပေးလိုက်ခဲ့တော့
ပထမ အစမ်းအနေနဲ့ ကျောက်ဖုရားက ကျောက်နဲနဲကို လုပ်ကြည့်လိုက်တယ် ။ အဆင်ပြေပြေနဲ့ အောင်မြင်သွားတာကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် အချီကြီး လုပ်ဖို့ တခြားလူတွေရဲ့ ကျောက်တွေကိုပါ စုပေးပြီး လုပ်မလို့ ။
ဒီတခါမှာတော့ နပိုလီယန်က သံရုံဝန်ထမ်းတွေဆီ မအပ်လိုက်ဘဲ ကြားဖြတ် ရိပ်လိုက်ဖို့ စဉ်းစားတော့
တာဘဲ။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်နေကျ ဇော်ကြီးကို တိုင်ပင်ကြည့်ပြီး အကွက်ချတာ ..။ ဇော်ကြီးက ဦးလူကြီးရဲ့
တပည့်ဖြစ်ပြီး လူအင်အား ငွေအင်အား ဘက်ဂရောင်းကောင်းတာ နပိုလီယန် သိတယ်လေ ..။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က နပိုလီယန်က သံရုံးကလူနဲ့ ကျောက်တွေကို အရင်တခါက သူ့မျက်စိရှေ့တင် ထုတ်ပြလိုက်ပြီး နိုင်ငံခြားက နပိုလီယန်ရဲ့ အဆက်အသွယ်ကာကျောက်တွေကို ဈေးကောင်း
ကောင်းနဲ့ ရောင်းပေးခဲ့လို့ နပိုလီယန်ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်အားထားနေတာ ။
ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နပိုလီယန်က အချီကြီး ဘတ်မှာ ။
ကျောက်ဖုရားက သူ့လူတွေဆီက အဖိုးတန်ကျောက်တွေကို စုထားတယ် ။ အဆက်ကောင်းတယ် ဆိုပြီး စိတ်ချတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းက နိုင်ငံခြားသံရုံးက ဆိုပြီး သံတမန်နံပါတ်ပြား
အတုတပ်ထားတဲ့ ဗော်ဗိုကားအသစ်နဲ့ ရောက်လာပြီး ကျောက်တွေကို လက်ခံတယ် ။ ဒီညနေလေယာဉ်နဲ့ဘဲ ပြည်ပကို ထွက်မှာလို့ ဟန်ဝင်းအောင်က ဘိုလို မှုတ်တယ် ။ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က
ဘာမှ သံသယ မဖြစ်ပါဘူး ။
ညိုညိုညိမ်းကိုတော့ မျက်လုံးကြီး အပြူးသာနဲ့ ငေးကြည့်နေတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင် နဲ့ ညိုညိုညိမ်းက “ မကြာခင် ပြန်ဆုံကြမယ်…စီးပွားတူ လုပ်ကိုင်ရတာ အင်မတန်မှ ဝမ်းသာပါတယ် …” လို့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ပြောကြပြီး ရွှေဆိုင်ထဲကနေ ကျောက်တွေ
ထည့်ထားတဲ့ လက်ဆွဲသေတ္တာနဲ့ ထွက်သွားကြတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းတို့လဲ ကားနဲ့ ထွက်သွားရော ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က နပိုလီယန်ကို “ အဲ့စော်က ဘယ်သူလဲ..ဒီ
မစ္စတာဘီလား ဗျင်းနေတဲ့ စော်လား….” လို့ မေးလိုက်တယ် ။
နပိုလီယန်လည်း သူကောင်းကောင်းမသိသလို ဝေဝေ၀ါးဝါး ဖြေလိုက်တော့ ကျောက်ဖုရားက “ ဒီစော်က နိုင်ငံခြားသား မဟုတ်ဖူးဗျ..သေချာတယ်….မြန်မာမဘဲ….မြန်မာမမှ တကယ့် ဂျလယ်..ဖျံမ..
ကျနော် အထက်မြန်မာပြည်မှာ တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ စော် ဖြစ်ဖို့ ရာနှုံးပြည့် သေချာသလောက်ဘဲ ..နံမည်မေ့နေတယ်..အင်း..မန်းလေးက ကျနော့်လူကို ဖုန်းဆက် လှမ်းမေးရင် သိရမယ် ..ဒီစော် ပါနေတာ
ကျနော်တော့ နဲနဲ စိတ်ထင့်တယ်..ဒီစော်က တခုခု ဖေါက်နိုင်တယ်….” လို့ ပြောလိုက်တော့ နပိုလီယန်လည်း “ ကျနော့်လူ မစ္စတာဘီလားကိုတော့ စိတ်ချပါ ..ကျနော် အာမ ရဲရဲကြီး
ခံတယ်..ဦးဇော်မြင့်..ဒီစော်ကလည်း သူဖိနေတဲ့ စော် ဖြစ်မှာပါ …” လို့ ပြာပြာသလဲ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က ဖုန်းကောက်ဆက်တယ် ။
မန္တလေးက သူ့တပည့်တယောက်ဆီကို ..။
“ ဇေယျာ..ငါပါ..ဇော်မြင့် …မင်းကို မေးစရာ တခု ရှိလို့ကွ..မင်း မှတ်မိလား..ဖါးကန့်က ကောင်တွေကို အချီကြီး ဘတ်သွားတဲ့ စော် ..မင်းသိပါတယ်..ချိုလွင်တို့ ပြတဲ့ စော်ကွာ….ခပ်တောင့်တောင့်
လေ …အေး…အော်……အေး..ဟုတ်ပြီ……အေး..အေး..ဒါဘဲ..ဒါဘဲ သိချင်တာပါ ….”
နပိုလီယန် ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုံမြန်နေသည် ။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က ဖုန်းလဲ ပိတ်ပြီးသွားရော…“ သိပြီဗျ…ဒီစော်နံမည်က ညိုညိုညိမ်း..နံမည်ကြီး ဖိုးတွမ်တီးမ တယောက်ဘဲ..ဘဝင်မကျတာက ဒီစော်က ဘိုလိုတွေ လာမှုတ်နေတယ်..သူက
မစ္စတာဘီလားရဲ့ တကယ့်မယားလိုလို ပုံစံဖမ်းထားတယ်..ဒါကို ကျနော် မကြိုက်ဘူး..တခုခုတော့ တခုခုဘဲ….ခင်ဗျား..ဘီလားကို အခု ဖုန်းဆက်ကြည့်လို့ ရမလား
..ဒီစော်အကြောင်း မေးပေးဗျာ…..” လို့ နပိုလီယန့်ကို ပြောတော့ နပိုလီယန် ပြာနေပြီ ။
“ ဘီလားက သူ့သံအမတ်နဲ့ ခရီးထွက်ရမှာမို့ ဒီအချိန်ကို ခေါ်လို့ မရဘူး..ဦးဇော်မြင့်….နိုင်ငံခြား ရောက်မှဘဲ ဖုန်းခေါ်လို့ ရမယ်….စိတ်ချပါ..ကျနော် ကြားက ရှိပါတယ်…ဘာမှ မဖြစ်စေရပါဘူး…”
လို့ နပိုလီယန်က ပြောလိုက်တယ် ။
သည်အချိန်မှာ ဇော်ကြီးသည် ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်း တို့ ယူလာမယ့် ကျောက်တွေအပြည့်နဲ့ လက်ဆွဲသေတ္တာကို ချိန်းထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်ကနေ စောင့်နေတယ် ။
နာရီဝက်အထိ သူတို့ ပေါ်မလာလို့ စိတ်တွေ ပူလာတယ် ။ တော်ရုံ စိတ်ပူတာမျိုး မဟုတ်ဘူး ။ တခုခု လွဲမှားရင် သူ့ခေါင်းကို ကျတော့မယ် ။
ဇော်ကြီး ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းတို့ရဲ့ ဟန်းဖုန်းတွေကို ခေါ်ကြည့်တယ် ။ ဘယ်သူမှ ဖုန်းမကိုင်ဘူး ။ ဟာ..ဒီနှစ်ကောင် အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲ..ဒို့ကို ဘတ်သွားပြီလား
မသိဘူး…ဘတ်လို့ကတော့ကွ…တောက်….အသေကို လိုက်သတ်မယ် ….ဟင်း…”
နပိုလီယန်လည်း ကျောက်ဖုရား ကို အတန်တန် စိတ်မပူဖို့ ပြောနေတဲ့အချိန် ကံအားလျော်စွာ သူနဲ့ ညိနေတဲ့ ကောင်မလေးက ရွှေဆိုင် အပေါက်ဝကို ရောက်လာပြီး သူ့ကို မေးနေတာ တွေ့လိုက်ရ
လို့ ကောင်မလေးကို သူထွက်တွေ့လိုက်တယ် ။
“ ဟေး..သွယ်သွယ်စံ ….”
“ ဟယ် …အကို…အကို့ကို လိုက်ရှာနေတာ..အရေးတကြီး ကိစ္စပေါ်လာလို့ ….”
“ ဟေ..ဘာဖြစ်သလဲ..အကို ဘာကူညီရမလဲ..”
သာမန်အချိန်ဆိုရင် နပိုလီယန်သည် သွယ်သွယ်စံကို ထွက်တွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး ။ သွယ်သွယ်စံလို ကောင်မလေးတွေက ဖန်ဖို့ ရိပ်ဖို့လောက်ဘဲ စဉ်းစားနေတာလေ ..သူတို့ တဘဝလုံးကို
နပိုလီယန်တို့က ဖြုတ်ချင် ၀ါးချင်တာ တခုဘဲလေ ..။ မေတ္တာ..သစ္စာတွေ မပါဘူး ..။
“ အို..သွယ်သွယ်စံ..မငိုနဲ့ မငိုနဲ့..အကို့ ကို ပြောပြအုံး..ဘာဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာ…”
“ မာမီ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်..အကို…ခွဲရမယ် ပြောတယ်..အဲဒါ အကို လိုက်ခဲ့မှ ဖြစ်မယ်…..အဓိကကတော့ သွယ်စံ ငွေ တအားလိုနေတယ် ..”
ခါတိုင်းဆိုရင် ဒါမျိုးလာရင် နပိုလီယန် သည် အကုသိုလ် အညပာလိုက် ကပ်ပြီ ဆိုပြီ ရေရေလည်လည် အီးမှန်မှာ ..။
အခုတော့ သွယ်သွယ်စံကို နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကများ လွှတ်လိုက်လေရော့သလား ဆိုပြီး တအား ပျော်သွားတယ် ။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က သူတို့ ပြောတာတွေကို အနားလာပြီး နားထောင်နေတယ် ..။
“ အကို….အကို သွယ်စံနဲ့ ဆေးရုံ လိုက်ခဲ့မယ် မဟုတ်လားဟင်…”
“ ဟာ..လိုက်မှာပေါ့ လိုက်ရမှာပေါ့..သွယ်စံ ငွေ ဘယ်လောက် လိုနေလဲ…ရတယ်..ရတယ်..အကို အခုလိုက်ခဲ့မယ်..ဘယ် ဆေးရုံ တင်ထားတာလဲ….”
“ ဗစ်တိုးရီးယားဆေးရုံမှာ အကို..အဲ့ဆေးရုံက ဈေးမြင့်ပေမယ့် သန့်တယ်….မာမီ့ကို ကောင်းကောင်းဘဲ ပြုစုချင်တယ်…”
“ ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ် ….”
နပိုလီယန်လဲ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ဖက်ကို လှည့်ပြီး..“ ဦးဇော်မြင့်..ကျနော် သူနဲ့ ခဏ လိုက်သွားလိုက်အုံးမယ်..ဦးဇော်မြင့် ဟိုကိစ္စ လုံးဝ မပူပါနဲ့ ..ကျနော် အာမခံပါတယ်…အရင်တခါလိုပေါ့ဗျာ..
အကုန် အဆင်ချောစေရမယ် ….” လို့ ပြောရင်း သွယ်သွယ်စံနဲ့ လိုက်သွားလိုက်ပါတယ် ။
အဓိက က ကျောက်ဖုရားရှေ့ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ဘဲလေ ..။
နပိုလီယန်လဲ တက်စီကားပေါ်မှာ သွယ်သွယ်စံကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပထုတ်ရမလဲ..ဒါမှ မဟုတ် သွယ်သွယ်စံ နားကနေ သူ ဘယ်လို လစ်ပြေးရမလဲ..ကြံဆ စဉ်းစားနေတယ် ။
သည်အချိန်မှာ သူ့ဟန်းဖုန်းကို ဇော်ကြီး လှမ်း ခေါ်တယ် ။
“ နပိုလီယန် …အိပ်ဖေါ်တီး ကော…”
“ မသိဘူး..ကိုဇော်ကြီးဆီ မရောက်သေးဘူးလား….”
“ မရောက်လို့ မင်းဆီ ဆက်လိုက်တာပေါ့..သူတို့ ဘယ်ရောက်နေလဲ ….”
“ ကျနော်လဲ မသိဘူး..အခု ကျောက်ဖုရားက ညိုညိုညိမ်းကို မှတ်မိသွားလို့ ရေလည် ကွိုင်တက်နေတယ် ..တိုင်ပတ်နေတယ်..ကျနော်လဲ ဒိုးမှ ဖြစ်တော့မယ်….ကျောက်ဖုရားက သူ့ကို ဘတ်တာ သိလို့ကတော့ ကျနော့်ကို အရေခွံ ဆုပ်မှာ ကိုဇော်ကြီး …..”
“ နပိုလီယန်..မင်း သတ္တိမရှိရင် ကျောက်ဖုရားလို လူကို သွားမဘတ်နဲ့ ဘတ်မိပြီးရင်လဲ ဒီလောက် ဖင်တုန်အောင် ကြောက်ပြမနေနဲ့…..”
ဇော်ကြီးက ဟောက်နေတယ် ..။
“ ကိုဇော်ကြီး..အခု ကိုဇော်ကြီး ဘယ်မှာလဲ ….”
“ ငါ “ ပြည့်ဖြိုးခိုင် စားသောက်ဆိုင်” မှာ ….ဘာလို့လဲ..မင်း လာမလို့လား …”
“ လာလို့ မရသေးဘူး..ကျနော့်မှာလည်း အခု အမှုတွဲ တန်းလန်းကြီးနဲ့ …”
“ ဘာ..ဘာအမှုတွဲလဲ..နပိုလီယန်..မနောက်နဲ့ကွာ..ဒီအချိန်က နောက်ရမယ့် အချိန် မဟုတ်ဘူး …ရေလည် တင်းနေတယ်…..”
သွယ်သွယ်စံကလည်း..“ ဘာအမှုတွဲလဲ..အကို..စကားကို ကြည့်ပြောနော်..သွယ်စံက အမေနေမကောင်းလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ အထဲ…ဟင်း…” လို့ သူ့ကို စိတ်ဆိုးသွားတယ် ။
ဇော်ကြီး ဦးတင်မောင်လတ်ကို ဖုန်းဆက် တင်ပြပြီး သူတို့ လူတွေကို ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို အပူတပြင်း လိုက်ရှာခိုင်းလိုက်တယ် ။
လေးမောင်မောင် သည် အထက်လူကြီးတွေက ကောင်းကောင်း ကြပ်ပေးတာကြောင့် ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ကို အအိပ်ပျက် အစားပျက် ခံပြီး နေ့ရောညပါ စောင့်ကြည့်တော့ ဟန်ဝင်းအောင်ကအနောက်တိုင်းဝတ်စုံတွေနဲ့ ရှိုးအပြည့်ထုတ်ပြီး ညိုညိုညိမ်းကလည်း စကပ်တွေ ဘာတွေနဲ ဆံပင်တွေ ပြင်..ခွာမြင့်ဖိနပ်နဲ့ ဗော်လ်ဗိုကားကြီးနဲ့ တွေ့လိုက်ရတော့ အိပ်ဖေါ်တီး စုံတွဲတော့ အခုခုတော့အချီကြီး ကြံစည်နေပြီ ဆိုတာကို ရိပ်မိလိုက်ပြီး သူမွေးထားတဲ့ သတင်းပေး ချာတိတ်တွေကိုပါ သုံးပြီး ဒီစုံတွဲကို စောင့်ကြည့်တော့ သူတို့ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်နဲ့ အကြံအစည် တခုခု လုပ်နေတာကိုပါ သိလာရတယ် ။
သူ့ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ဘတ်ချင်တဲ့ ဒီနှစ်ကောင်ကို ပညာပေးမှ ဖြစ်မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တယ် ။
အိပ်ဖေါ်တီး လူလိမ်စုံတွဲက မဂိုလမ်း ရွှေဆိုင်ကနေ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်နဲ့အပေါင်းအဖေါ်တွေရဲ့ ကျောက်တွေကို နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲ ဟန်ဆာင်ပြီး ဘတ်ထုတ်လာပြီး ဇော်ကြီးနဲ့ နပိုလီယန်ကိုပါ ဘတ်သွားပြီး ခြေရာဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ သေသေချာချာကို မလွတ်တမ်း စောင့်ကြည့်နေတဲ့ လေးမောင်မောင်နဲ့ အဖွဲ့က သူတို့ သွားလေရာကို တောက်လျှောက် အနောက်ကနေ လိုက်ပါလျက်
ညိုညိုညိမ်းက ဒီဘို ဘတ်ပြေးဖို့ စိတ်မကူးဘူး ။ ဇော်ကြီးတို့နဲ့ဘဲ ခွဲဝေယူဖို့ လုပ်ချင်တာ ။ ဟန်ဝင်းအောင်က တဖွတ်ထိုး..မိုက်မိုက်မဲမဲ လုပ်တတ်သူ ဆိုတော့ ဝေစု နဲနဲလေးနဲ့ မကျေနပ်နိုင်ဘူး..ညိုညိမ်းရာ…..အပြတ်သာ ဖျောင်ပစ်လိုက်မယ်..တန်ဖိုးက နဲတာ မဟုတ်ဘူး…ယိုးဒယားကို အရင်ပြေးပြီး အဲဒီကနေ တခြား တနိုင်ငံငံကို လစ်ကြတာပေါ့..ကျနော် နဲ့ ညိုညိမ်း ရုပ်နဲနဲ
ပြောင်းပစ်လိုက်ရင် သူတို့ ခြေရာခံ မလိုက်နိုင်ပါဘူးဗျာလို့ ပြောပြီး ဇွတ်လုပ်ပစ်လိုက်တာ ..။
လေးမောင်မောင်က သူတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အကူမတောင်း..မခိုင်းစေတာက အကြောင်းရှိတယ် ။ အကယ်လို့ ဒီစုံတွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခုခု အချီကြီး ရလိုက်ရင်လည်း ဝေစုခွဲစရာ မလိုဘူးလေ ။
သူခိုင်းထားတဲ့ ချာတိတ်တွေက သူကျွေးမွေးထားတဲ့ ကောင်လေး ကောင်မလေးတွေ ။ ပျံကျလေးတွေ ..။ နဲနဲပါးပါး ကျွေးလိုက် ပေးလိုက်လည်း ရတယ်လေ ။
ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းက မဲဆောက်ကို လစ်ပြေးမယ်လို့ ဟန်ရေးပြပြီး တကယ်တမ်း မဲဆောက် မြဝတီသွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားနဲ့ မလိုက်သွားဘဲ ပိုမ်ကို ကားနဲ့ လစ်သွားလိုက်တယ် ။ ပုသိမ်ထက်စာရင် သူတို့ ထင်မှာ မဟုတ်တဲ့ မြောင်းမြကို သွားလိုက်ပြီး တည်းခိုခန်း အသေးစား တခုမှာ မှတ်ပုံတင် နောက်တမျိုး နဲ့ ဝင်တည်းနေလိုက်တယ် ။
“ ညိုညိမ်းရေ…ကျနော်တို့တော့ ချမ်းသာပြီဗျ..ဟားဟားဟား……ကဲ ဒီမှာ တပတ်လောက် အသာ အောင်းနေပြီးမှ ယိုးဒယားကို လမ်းကြောင်းတမျိုးကနေ လစ်ကြဒိုးကြတာပေါ့……”
ညိုညိုညိမ်းကတော့ မပျော်နိုင်ဘူး..။ ဇော်ကြီးတို့ ခြေလှမ်းကြဲတာကို ကောင်းကောင်းသိတယ် ။ ဇော်ကြီးတို့ လက်က ပြေးလို့ လွတ်ပါ့မလား လို့ စိတ်ပူနေတယ် ။ နောက်တခါ နပိုလီယန်ကိုပါ ဘတ်ခဲ့တာ..။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ကြီးကို ဘတ်ခဲ့တာဘဲ ။ ကျောက်ဖုရားက မြန်မာပြည်မှာသာ မကဘူး ။ နိုင်ငံခြားမှာပါ တပည့်တပန်းတွေ အဆက်တွေ ရှိနေတယ် လို့ သိ
တယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ပေါင်းတာ မှားပြီလား လို့ တွေးတောကာ စိတ်ညစ်နေတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ သူတို့ ဟိုတယ်ခန်းလေးရဲ့တံခါးကို ခပ်ဆဆလေး ခေါက်လိုက်သံ ကို ကြားလိုက်ကြရတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်က “ ဘယ်သူလဲ…” လို့ လှမ်းမေးလိုက်ရင်း ချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေးကနေ အပြင်ကို ချောင်းလိုက်တယ် ။
“ ကျနော် ဟိုတယ်ကပါ..တဘက်တို့ ဆပ်ပြာတို့ လာပို့တာပါ..ဆရာ….”
ဟန်ဝင်းအောင် တံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ဟိုတယ်က ဝန်ထမ်းလေး ဝင်လာတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ့အနောက်က ကပ်လိုက်လာတဲ့ လေးမောင်မောင်ကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းလည်း လေးမောင်မောင်ကို တွေ့လိုက်ရလို့ တအား လန့်သွားတယ် ။
ခက်ပြီ ..။ ဒုက္ခဘဲ …။
လေးမောင်မောင်က လက်ထဲမှာ ခြောက်လုံးပြူးတလက်ကို အသင့် ထုတ်ကိုင်ထားတယ် ..။ မျက်နှာထားက တင်းမာလွန်းနေတယ် ။
“ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ် မလုပ်ကြနဲ့နော် …ငါ ဒီတခါ မင်းတို့ကို ခွင့်မလွှတ်ဘူး ….ယုံလည်း မယုံတော့ဘူး …..”
“ ဆရာလေးမောင်မောင်…တော်တယ်ဗျာ..မြောင်းမြအထိ လိုက်လာနိုင်တယ် ဆိုတာ တော်တော် တော်တာဘဲ..ဟင်းဟင်း…ဆရာရယ်…ကျနော်တို့ကို ရက်တော့ မရက်စက်ပါနဲ့ဗျာ…..”
လေးမောင်မောင်က ရုတ်တရက်ကြီး နားရင်းရိုက်ထည့်လိုက်လို့ ဟန်ဝင်းအောင် ကြမ်းပေါ်ကို ပက်လက် လဲကျသွားရတယ် ။
“ ဟာ…ဘာ…ဘာလို့ ရိုက်တာလဲ ဆရာရယ် ….”
ကြမ်းပြင်မှာ ပက်လက်လဲသွားတဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်က လူးလဲထရင်း မေးလိုက်တယ် ။
“ မင်းက ငါ့ကို ဘတ်လို့ပေါ့…..မင်းတို့ ဘတ်တိုင်း ခံမယ် ထင်သလား..”
ဝှစ်ကနဲ ဟန်ဝင်းအောင် ဘိုက်ကို ရှူးစီးထားတဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ကန်ထည့်လိုက်ပါတယ် ။
“ တော်..တော်ပါတော့ အကို….”
ညိုညိုညိမ်းက ဝင်တားတယ် ။
“ ဖျန်း …”
ညိုညိုညိမ်း ပါးကိုလည်း လက်ပြန် ရိုက်ထည့်လိုက်တယ် ။
လေးမောင်မောင် ကြမ်းပြီ ။
“ မလုပ်ပါနဲ့ အကိုရယ်…..နာတယ်……”
ဟန်ဝင်းအောင် နဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို လက်ထိပ်များ ခတ်လိုက်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်း ငိုနေပြီ ။
“ ကျောက်ဖုရားဆီက ဘတ်ခဲ့တဲ့ ကျောက်တွေကော..ဘယ်မှာလဲ…ထုတ်ပေးစမ်း……..”
ဟန်ဝင်းအောင်က အကြောင်ရိုက်ဖို့ ကြိုးစားသေးတယ် ။ လေးမောင်မောင်ရဲ့ လက်သီး..လက်ဝါးစောင်းတွေ တဖြောင်းဖြောင်း တခွပ်ခွပ် သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ကျရောက်လာတော့ ဟန်ဝင်းအောင် လည်း
အသားနာလာလို့ ဖွင့်ပြောရတော့တယ် ။
အတက်ချီကော့စ် လက်ဆွဲသေတ္တာလေး နဲ့ အပြည့် ထည့်ထားတဲ့ ကျောက်တွေကို လေးမောင်မောင် တွေ့ရတော့ လောဘဇော တက်ပြီ …။ ဒါတွေကိုသာ ရလိုက်ရင် တသက်လုံး
ချမ်းသာပြီ..နိုင်ငံခြားမှာ နေရုံဘဲ ….လို့ တွေးနေတယ် ။
( ဒီနှစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ……) သူစဉ်းစားနေပြီ ..။
သတ်ပစ်လိုက်မလား…အို..ငါ ဘာတွေ တွေးမိပါလိမ့် ..လောဘတက်ပြီး လူသတ်ဖို့တောင် စဉ်းစားမိသွားတယ်….အင်း..မလွယ်ဘူး…..ဘာလုပ်ရမလဲ…ဘာလုပ်ရမလဲ…….။
သူ့ခါးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဖုန်း မြည်လာတယ် …။ ဘယ်သူပါလိမ့်….”
ဦးတင်မောင်လတ် တော်တော် စိတ်ညစ်နေတယ် ။
ကျောက်တွေ ဘတ်တဲ့ ကိစ္စကို ဇော်ကြီးနဲ့ဘဲ လွှဲထားခဲ့တာ အခုတော့ သူ့အပြစ်လို ဖြစ်နေတယ် ။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က သူ့ကို နပိုလီယန်နဲ့ အိပ်ဖေါ်တီး စုံတွဲတို့ ဘတ်မှန်း သိသွားပြီ ။ သူတို့တတွေ ထင်ထားတာထက် ကျောက်ဖုရာက ပိုလျင်နေတဲ့အပြင် အဆက်အသွယ်ကလည်း ကောင်း
တယ် ။ ပိုင်တယ် ..။ ခက်တာက ကျောက်ဖုရားရဲ့ အဆက်အသွယ်တွေကနေတဆင့် ဒီကျောက်ဘတ်တဲ့ ကိစ္စကို ဦးလူကြီးရဲ့ နားကို ပေါက်သွားတာဘဲ ။
ဦးလူကြီးက ဦးတင်မောင်လတ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးပြီ ။
ဇော်ကြီးနဲ့ဘဲ လွှဲထားတာကြောင့် အခုလို ဘာမဟုတ်တဲ့ မလောက်လေး မလောက်စား စုံတွဲက ဒို့လိုကောင်တွေကို ဘတ်သွားတာ လို့ ဦးလူကြီးက ဖုန်းနဲ့ ဆက် အပြစ်တင်တယ် ။
“ ဇော်ကြီးကို မင်း ဆုံးမ မလား..ငါကိုယ်တိုင် အပြစ်ပေးရမလား…”
“ ကျနော် ဆုံးမနိုင်ပါတယ်..ဆရာ ဘာဖြစ်စေချင်သလဲသာ ပြောပါ ….”
“ အရင်ဆုံး ဟို စုံတွဲနောက်ကို လိုက်ခိုင်း..မရရတဲ့နည်းနဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေကို ပြန်ယူခဲ့ခိုင်း…ရလာရင် တမျိုး စဉ်းစားမယ်…မရလာရင်တော့ တမျိုးပေါ့…..”
ဦးတင်မောင်လတ်က ဇော်ကြီးကို ရေရေလည်လည် ကြပ်ပြီ ။
ဇော်ကြီး နေစရာကို မရှိတော့ ။
မဲဆောက်ကို သူ ချက်ချင်း ကားနဲ့ လိုက်သွားတယ် ။ တပည့်တွေ အများကြီးနဲ့ ။ ဦးတင်မောင်လတ်က အိပ်ဖေါ်တီးကို တွေ့ရင် အသေသတ်ပစ်ပြီး အလောင်းကိုဘဲ
ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့ဖို့ ပြောလိုက်သည် ။
ကျောက်ဖုရား ဇော်မြင့် ဆရာဝန်ခေါ်ရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားတယ် ။
ဘတ်ခံရတဲ့ တန်ဖိုးက အရမ်းများတယ် ။ မရရအောင် ပြန်လိုက်ဖို့ တပည့်တွေကို တာဝန်ပေးလိုက်သလို နပိုလီယန်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ..အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူ အားပေး
ကူညီနေသလဲ ဆိုတာကိုပါ သူ စုံစမ်းခိုင်းတယ် ။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် နေတဲ့ သူဌေးရပ်ကွက်က တိုက်ကြီးဆီကို ရဲကားနှစ်စီး ထိုးဆိုက်လာတယ် ။
အရပ်ဝတ်အရပ်စားနဲ့ ရဲအရာရှိကြီးတွေ တိုက်ကြီးထဲကို ပြာပြာသလဲ ဝင်သွားကြတယ် ။
“ ကိုဇော်မြင့် ရှိလားဟေ့…”
တိုက်အပေါက်ဝမှာ တွေ့ရတဲ့ ကျောက်ဖုရားရဲ့ တပည့်တွေကို သူတို့ အလျင်စလို မေးကြရင်း တိုက်ကြီးထဲကို ဝင်ကြတယ် ။
ဦးဇော်မြင့်က ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက် ဖြစ်နေတာ သူတို့ တွေ့လိုက်ကြတယ် ။
“ ကိုဇော်မြင့်..ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေဗျာ…..အခု ဘယ်လိုနေသေးလဲ..သတင်း ကြားကြားချင်း လိုက်လာကြတာ ….”
“ အေးဗျာ…..တော်တော်ဘဲ စိတ်ထိခိုက်သွားတာနဲ့ လူပါ ထိတာ….”
“ ခင်ဗျား လိုအပ်တဲ့ အကူအညီ ရှိရင် ပြောဗျာ..အချင်းချင်းတွေ ဘဲ ..ဒီလူနဲ့ ဒီလူ ဘာမှ အားမနာနဲ့..ကိုဇော်မြင့်ကို ထိခိုက်ရင် ကျုပ်တို့ကို ထိခိုက်သလိုပါဘဲ …ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကူညီဖို့
“ ကျေးဇူးပါဘဲဗျာ ….”
နပိုလီယန် သွယ်သွယ်စံကို ငွေနဲနဲ ထုတ်ပေးပြီး ကျန်တဲ့ငွေက သူ့လူတယောက်ဆီမှာ သွားယူပေးမယ်..ဆေးရုံကနေ စောင့်ဆိုပြီး ဆေးရုံရှေ့ကို တက်စီနဲ့ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပြီး တကျိုးထဲ လစ်တော့
တာဘဲ ။ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို သူ ဖုန်းတွေခေါ်ကြည့်သလို သူတို့ တိုက်ခန်းကို သွားကြည့်လိုက်သည် ။ သူတို့ ရှိမနေဘူး ။ သူတို့ ဒိုးသွားပြီ ဘတ်သွားပြီ ။ တကယ် လုပ်ရဲတဲ့ကောင်တွေ။
ရန်က မသေးဘူး ။ ဇော်ကြီးရယ်..နောက်ကွယ်က ဦးတင်မောင်လတ်..ဦးလူကြီး ..တဖက်မှာလည်း ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် ..တကယ့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေကိုမှ တက်ဘတ်တယ် ။ ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်
လုပ်တယ် ။ နပိုလီယန် လတ်တလော အဝေးကို ပြေးမှ ဖြစ်မယ် ။ နယ်ခြားကို ပြေးရင် ဒင်းတို့ လိုက်ဖြုတ်မှာ သေချာတယ် ။ ဘယ်ကို ပြေးရမလဲ ။ စဉ်းစား…စဉ်းစား……။ အချိန်က မရှိဘူး ။
ဘယ်ကို ပြေးမလဲ …။
ထိုင်း နယ်စပ်ကို ပြေးရင် သူတို့နဲ့ တိုးမိမှာ သေချာတယ် ။ သူတို့ မလိုက်မယ့် သူတို့ မထင်မယ့် တနေရာရာကို ပြေးမှ …။
နပိုလီယန် မုံရွာ တဖက်ကမ်းက ညောင်ပင်ကြီးဆိပ်က သူ့သူငယ်ချင်း ဇင်ကြီးဆီကို သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ ညောင်ပင်ကြီးက ဆားလင်းကြီး မြို့နယ်ထဲမှာ ရှိသည် ။ မြစ်ဆိပ် ဖြစ်သည် ။
ရန်ကုန် မုံရွာ အဝေးပြေးကားပေါ်မှာ နပိုလီယန် ပါသွားသည် ။
လေးမောင်မောင် သူ့အထက်လူကြီး ရဲမှူးကို ညာလိုက်သည် ။
ဟန်ဝင်းအောင် နဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို သူ ရှာမတွေ့သေးဘူးလို့ ညာလိုက်သည် ။ သူ လောဘတက်နေသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်တို့ ဘတ်လာတဲ့ ကျောက်တွေကို သူ လိုချင်နေသည် ။
“ မင်းတို့ ၂ယောက် ထိုင်းကို ဒီအချိန် ပြေးလို့ မဖြစ်ဘူး…ဇော်ကြီးတို့က မဲဆောက်မှာ ရောက်နေလောက်ပြီ..ဒီတော့ ကွေ့ပတ်ပြီး သွားရမယ်..တနေရာကို ခဏ ရှောင်နေရမယ် …..”
ဟန်ဝင်းအောင်က “ ကျနော်တို့ ဒီ မြောင်းမြမှာဘဲ ခဏအောင်းနေလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား …” လို့ မေးသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ကို သူ ကုလားထိုင် လက်ရမ်းနဲ့ တွဲပြီး လက်ထိပ်ခတ်ထားသည် ။
ညိုညိုညိမ်းကိုတော့ သူ လက်ထိပ် ခတ်မထားဘူး ..။
ညိုညိုညိမ်းကလည်း..“ ဟုတ်တယ်အကို….မြောင်းမြ ကို သူတို့ ထင်မှာ မဟုတ်ဖူး ….သူတို့က နယ်စပ်ကို သွားမယ့် ကားလမ်း တွေ လေယာဉ်ကွင်းတွေကို စောင့်ကြည့်နေကြမှာဘဲ …ဒီမှာ
ခဏ ငြိမ်ပြီး နေလိုက်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ် …” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
လေးမောင်မောင်လည်း သူတို့ ပြောတာ မှန်ပေမယ့် သူက သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ပါ တနည်းနည်းနဲ့ ရှင်းပစ်ချင်တာ…တတ်နိုင်ရင် သူတယောက်ထဲ အားလုံးကို ယူချင်တာ…သူတို့ နှစ်ယောက်ကို
မသတ်တောင် ထောင်ထဲကို ပို့လိုက်ချင်တယ် ….။ ဒါကြောင့် နယ်စပ်တနေရာရာကို သူ သွားချင်နေတယ် ။
“ ဟုတ်ကဲ့ အကို…..”
“ ငါ့ကို နဲနဲ နှိပ်ပေးစမ်း …..”
“ ဟုတ်ကဲ့ အကို…”
ညိုညိုညိမ်း သူ့ဆီကို လျှောက်လာသည် ။ သူထိုင်နေတဲ့ ကုလားထိုင် အနောက်မှာ ရပ်ပြီး သူ့ပုခုံးကို နှိပ်ပေးသည် ။
“ ခေါင်းကို နှိပ် …”
ညိုညိုညိမ်းက သူ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း ခေါင်းကို နှိပ်သည် ။ သူ စဉ်းစားနေတာ ဟန်ဝင်းအောင်ကို ရှင်း ပစ်လိုက်ပြီး ညိုညိုညိမ်းကို ခေါ်ပြီး ရှောင်တိမ်းသွားဖို့ ..။ ညိုညိုညိမ်း သူနဲ့ ပါရင်
သူ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ညိုညိုညိမ်းက ဖြည့်ဆည်းပေးမှာမို့ …။ ညိုညိုညိမ်းရဲ့ အပြုအစုတွေကို ပြန် မြင်ယောင် စဉ်းစားမိတော့ သူ့ပေါင်ကြားက ဒုတ်က မာလာသည် ။ ထောင်လာသည် ။
“ ညိုညိမ်း …မနှိပ်နဲ့တော့ …”
“ ရှင် ….”
သူပြောလိုက်တဲ့ အသံကြောင့် ဟန်ဝင်းအောင်က ခေါင်းမော့ကြည့်သည် ။
“ လာ..ငါ့ကို ပုလွေကိုင်ပေးစမ်း …..”
ညိုညိုညိမ်းက ဟန်ဝင်းအောင် ဖက်ကို တချက် လှမ်း ကြည့်လိုက်ပြီး လေးမောင်မောင်ရဲ့ အရှေ့မှာ ဒူးလေး ထောက်လိုက်သည် ။ လေးမောင်မောင်က သူ့ပုဆိုးကို ဖြေလိုက်သည် ။ တုတ်ခိုင်
ပြီး တောင်မာနေတဲ့ လိင်ချောင်းကြီး ပေါ်လာသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်က စက်ဆုတ်တဲ့ အမူအရာနဲ့ ကြည့်နေသည် ။
“ ညိုညိမ်း….မလုပ်နဲ့….မင်း..မင်း …ကြေးစားမ လား …..”
ဟန်ဝင်းအောင်က လှမ်းအော်လိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် ညိုညိုညိမ်းက လေးမောင်မောင်ရဲ့ လိင်တန်ကို လက်တဖက်နဲ့ လှမ်းကိုင်ဆုပ်လိုက်သည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ တောက်ခေါက်သံ
ထွက်လာသည် ။ လေးမောင်မောင်က ဟန်ဝင်းအောင် ဖက်ကို လှမ်း ကြည့်လိုက်ပြီး….“ ဟေ့ကောင်..မင်း ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားစမ်းကွာ…..ပုလွေကောင်းကောင်း အမှုတ်ခံပြီးမှ မင်းလျာကို ငါ
လာဖြတ်ပစ်မယ်..ခွေးမသား….” လို့ လှမ်းဟောက်လိုက်သည် ။ ညိုညိုညိမ်းက လိင်တန်ထိပ်ဖျားကို ပါးစပ်လေးနဲ့ ငုံလိုက်ပြီး စုတ်ပါတော့သည် ။
ဟန်ဝင်းအောင်က မျက်နှာကို တဖက်ကို လှည့်ထားသည် ။
တပြွတ်ပြွတ်အသံတွေ နဲ့ လေးမောင်မောင်ရဲ့ ညည်းသံတွေ ထွက်ပေါ်နေသည် ။
ညိုညိုညိမ်းက လေးမောင်မောင်ကို ကျကျနန ပုလွေမှုတ်ပေးနေတာကို ဟန်ဝင်းအောင် မျက်နှာလွှဲနေ
လို့ မမြင်ရပေမယ့် အသံတွေ ကြားနေရတယ် ။ တပြွတ်ပြွတ်တပြတ်ပြတ် အသံဗလံတွေနဲ့ လေးမောင်
မောင်ရဲ့ ညည်းတွားသံတွေ ကြားနေရတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင် ရင်ထဲမှာ ခံပြင်း နာကျည်းနေတယ် ။ သူ
တယောက်လုံး ဘေးမှာ ရှိနေတာကို သူ့စော်ကို ပုလွေမှုတ် ခိုင်းနေတယ် ။ ဟိုကောင်မကလည်း မှုတ်တယ် ။ နောက်ဆုံး ပြီးခါနီးမှာ ပိုဆိုးတယ် ။ လေးမောင်မောင်က ညိုညိမ်း ပါးစပ်ထဲကို ကော့ကော့ဆောင့်ထိုးတယ် ။ “ ဟား….ပြီး….ပြီး……” လို့ အော်ရင်း သူ့လိင်တန်ကြီးကို ညိုညိမ်း ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန် ပန်းထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည်ပျစ်ပျစ်တွေက ညိုညိမ်းရဲ့ မျက်နှာပေါ်
သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်တာ ရပ်လဲသွားရော ထိပ်ဖူးက အပေါက်မှာ အရည်တချို့ ပေကျံနေတဲ့ လိင်တန်ကို ညိုညိမ်း ပါးစပ်နားကို တိုးကပ်ပေးလိုက်တော့ ညိုညိမ်းက တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုတ်ပေးနေ
“ အိုး..အရမ်း ကောင်းတာဘဲ ညိုညိမ်းရယ် .မင်းရဲ့ ပုလွေကတော့ ထိပ်တန်း ရှယ်ဘဲကွာ…..”
လေးမောင်မောင်က ထရပ်လိုက်ရင်း ပြောတယ် ။ ပုဆိုးကို ပြန်ဝတ်တယ် ။ ကုလားထိုင်မှာ ချိတ်ထားတဲ့
သားရေ ပုခုံးစလွယ် သေနတ်အိတ်ကို သူ ပြန်ဝတ်လိုက်တယ် ။
“ ဟေ့ကောင်….မင်း အချိုးကို ငါ မကြိုက်ဘူး ..မင်းက အာခံတာလား…..စောစောက မိုးပြောဂျိုးပြောနဲ့”
ဟန်ဝင်းအောင် ဆီကို သူလျှောက်သွားရင်း လက်သီးတွေကို ကျစ်ကျစ်ဆုပ်ရင်း ပြောလိုက်တယ် ။
သူတကယ် နွှာတော့မည် ဆိုတာကို သိတဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း အသားအနာ မခံတော့ …။
“ အာမခံပါဘူးဗျာ…ကျနော် အာမခံရဲပါဘူး…ဆောရီးဗျာ…ကျနော် မှားတာတွေ စိတ်မရှိပါနဲ့…..”
ဟန်ဝင်းအောင်က တောင်းပန်နေလို့ သူခက်သွားတယ် ။
ဒီအချိန်မှာ ညိုညိုညိမ်းက “ ဘိုက်ဆာလိုက်တာ အကိုရယ် …တခုခု စားချင်တယ် …” လို့ ပြောလာတယ် ။ လေးမောင်မောင် ကိုယ်တိုင်လည်း ဆာလောင်နေသလိုဘဲ ..။
သည် အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲကို သတိထားရမည် ။ သူတို့က လူတွေကို ပါချယ်ပြနေကျ ..။ ဉာဏ် သိပ်များ
တဲ့ ဖိုးတွမ်းတီးတွေ ။
ဟိုတယ်က စားပွဲထိုးလေးကို ဖုန်းနဲ့ လှမ်းခေါ်လိုက်တယ် ။
လေးမောင်မောင်က စားပွဲထိုးလေး ရောက်လာတဲ့အချိန် အခန်းထဲမှာ သူ လက်ထိပ်ခတ်ထားတဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ကို မတွေ့စေချင်လို့ အခန်းပြင်ကို သူ ထွက်သွားလိုက်တယ် ။
“ ဆရာ..ဘာလုပ်ပေးရမလဲခင်ဗျ…” ဆိုပြီး တရိုတသေ လာမေးတဲ့ ကောင်လေးကို ခေါက်ဆွဲ ထမင်း အ
ခေါက်ကင် အသားကင် ဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ အရက်က တပုလင်း …။
ဒီအချိန်မှာ ဖုန်းလာတယ် ။ သူ့သတင်းပေး တယောက်ဆီ က …။ ရန်ကုန်မှာ ဇော်ကြီးတို့အုပ်စုကရော
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်တို့ကရော အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲကို အပူတပြင်း လိုက်ရှာနေတယ်လို့ ပြောပြတာ ။
“ မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ မြေလှန်ရှာနေပြီ….”
“ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ အကို..ညိုညိမ်းတို့ အပြင်ထွက်ရင် ပက်ပင်းတိုးနိုင်တယ်..မြောင်းမြမှာ မတိုးရင်
တောင် တနေရာရာမှာပေါ့ …”
လေးမောင်မောင် လည်း တကယ်တော့ လစ်ချင်လှပြီ ။ သူတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း ညိုညိုညိမ်းနဲ့ဟန်ဝင်းအောင်တို့ကို လိုက်ရှာကြမည်ဆိုတာ
တံခါးခေါက်သံကြောင့် လေးမောင်မောင် တံခါးဆီကို ထလျှောက်သွားပြီး ဖွင့်လိုက်တယ် ။ ဘိုက်ဆာနေ
ကြပြီလေ ။ တံခါးလဲ ပွင့်သွားရော သူမျှော်လင့်ထားနေတဲ့ ဟိုတယ်က ကောင်လေး မဟုတ်ဘဲ မထင်
မှတ်ထားတဲ့ လူတယောက်ကို တွေ့လိုက်ရလို့ မှင်သက်အံ့သြသွားပြီး စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ကြောင်ငေးသွားတဲ့အချိန် ဒီလူက ဝုန်းကနဲ သူ့ဆီ ကို ခုန်ဝင်ပြီး သူ့ကို တွန်းပစ်လိုက်သည် ။
ရုတ်တရက်မို့ လေးမောင်မောင် ခံလိုက်ရသည် ။
ဒီလူတွန်းလိုက်တဲ့ အရှိန်က ပြင်းသည် ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို နောက်ပြန် လန်ကျသည် ။
ပက်လက် အနေအထားကနေ ဒီလူကို တိုက်ခိုက်ဖို့ သူ့ပုခုံးစလွယ်အိတ်ထဲက သူ့သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် ဒီလူက သူ့ထက်မြန်သည် ။ သူ့လက်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ သေနတ်ကို ခြေထောက်နဲ့ ခတ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည် ။ သေနတ်က ခပ်ဝေးဝေးကို လွင့်
စင်သွားတဲ့အချိန် လေးမောင်မောင်က ဒီလူရဲ့ ခြေထောက်တွေကို သူ့ခြေထောက်တွေနဲ့ရိုက်လှဲချလိုက်
သည် ။ ဒီလူလဲကျအသွား လေးမောင်မောင် က သူ့အပေါ်ကို ခုန်အုပ်သည် ။
ဒီလူကို သူ သိသည် ။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့က ရဲ ။ ဘာအဆင့်လဲတော့ မသိ ။
ခဏခဏ တွေ့ဖူးနေသည် ။ အရပ်ဝတ်နဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့လူ ။
ဒီလူက သွက်သည် ။ သူ့လက်ထဲမှာ သေနတ်တလက် ရောက်နေပြီ ။ မဲနက်နက် ပြောင်းတို ခြောက်
လုံးပြူး တလက် ။ လေးမောင်မောင်က သေနတ်ကိုင်လက်ကို လက်ဝါးစောင်းနဲ့ ခုတ်လိုက်သည် ။
ဒီလူ အားကနဲအော်ပြီး သေနတ် လက်ထဲက လွတ်ကျသည် ။ လေးမောင်မောင်ကို အောက်ကနေ ဒူး
နဲ့ ပင့်တိုက်ပြီး ဘေးကို လှိမ့်ထွက်သွားသည် ။ အတိုက်အခိုက် အတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဖြစ်မည် ။ လေးမောင်မောင် က သူလွတ်ကျသော သေနတ်ကို ပြေးကောက်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဒီလူ ဒူးနဲ့ တိုက်
တာကြောင့် လုပ်ချင်တာ မဖြစ် ။ ဘေးကို လဲကျချိန် ဒီလူက သေနတ် ပြန်ရသွားသည် ။ လေးမောင်မောင်က ခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီး လူးလဲထသည် ။ ဒီလူရဲ့ သေနတ်ကို ကန်မိပေမယ့် ဒီတခါတော့ သေနတ်က လွတ်မသွား ။ ကျည်ဆံထွက်သွားသည် ။ ဒိန်းကနဲ ယမ်းပေါက်ကွဲသံက ကျယ်
လောင်လှသည် ။ ကျည်ဆံက လေးမောင်မောင်ရဲ့ လည်ပင်းကို ထိမှန်သွားသည် ။ လေးမောင်မောင်
ခွေကနဲ လဲကျသွားသည် ။ သည်လူ လေးမောင်မောင်ဆီကို ပြေးပြီး သေနတ်မှန်တဲ့ ဒါဏ်ရာကို ကြည့်
သည် ။ “ ဟာ..သောက်ဂွဘဲ …ငါက ပစ်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူးကွာ….”
သည်အချိန်မှာ ဒိန်းကနဲ သေနတ်သံတချက် ထွက်လာပြီး ဒီလူ ဝုန်းကနဲ ကြမ်းပေါ်ကို လဲကျသွားသည် ။
“ ဟင်..ညိုညိမ်း ….. မင်း ပစ်..ပစ်လိုက်တယ်….”
ဟန်ဝင်းအောင်က ယမ်းငွေ့လေးတွေ ပြောင်းဝမှာ ဝေနေတဲ့ လေးမောင်မောင် လွင့်ကျခဲ့တဲ့ သေနတ်ကို ဆုပ်ကိုင်ချိန်ထားတဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
“ ဟုတ်တယ်…ညိုညိမ်းတို့ မဟုတ်ရင် လက်ထိပ်နဲ့ ရန်ကုန် ပြန်ပါသွားမှာ…မထူးဘူး….သန်းခေါင်ထက်
ညဉ့်မနက်တော့ပါဘူး..ကဲ..အမြန် ပြေးကြရအောင် …”
ညိုညိုညိမ်းက အသက်မရှိတော့တဲ့ လေးမောင်မောင်နဲ့ သူပစ်လိုက်တဲ့လူ ကို သေမသေ သေချာစွာ
စစ်ဆေးပြီးမှ လေးမောင်မောင်ရဲ့ နံရံက ချိတ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ တိုက်ပုံအကျ င်္ီထဲက လက်ထိပ်သော့ကို
နှိုက်ယူပြီး ဟန်ဝင်းအောင်ကို ခတ်ထားတဲ့ လက်ထိပ်ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်သည် ။
လူစိမ်းရဲ့ ကိုယ်ကို နှိုက်ချွတ် ရှာဖွေလိုက်တော့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးက ဒုရဲအုပ်ကျော်စွာဦး
ဆိုတဲ့ စီစစ်ရေးကပ်ပြား ကို တွေ့သည် ။
“ ရဲနှစ်ယောက်တော့ သေနေပြီ ညိုညိမ်းရေ …အမြန်ဆုံး ပြေးကြမှ ဖြစ်မယ်…လာ..လာ…”
ကျောက်တွေပါတဲ့ လက်ဆွဲသေတ္တာပြားလေးကို အဓိက ထားပြီး ဆွဲယူကာ ဟိုတယ်ထဲက ထွက်သည် ။
သူတို့ကို မြင်ကြတဲ့လူတွေ တော်တော်များသည် ။ သေနတ်သံ နှစ်ချက်ကြောင့် လူတွေ လာကြည့်ကြ
ဟိုတယ်ကနေ သူတို့ ထွက်သွားကြပြီး နဲနဲလှမ်းတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုက်ကားတစီး တွေ့လို့ ကားဂိတ်ကို
အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲလည်း သေနတ်နှစ်လက်..ကုဋေနဲ့ချီတန်တဲ့ ကျောက်တွေ ပါတဲ့ လက်ဆွဲသေတ္တာလေးနဲ့
မြောင်းမြမြို့ကနေ အမြန်ဆုံး ထွက်ခွာသွားကြသည် ။
နပိုလီယန် ညောင်ပင်ကြီးဆိပ်ကို ရောက်သွားပြီ ။
သူငယ်ချင်းဇင်ကြီးက အဲဒီမှာ ပွဲစား လုပ်စားနေတဲ့လူ ။ လင့်ရိုဘာကား တစီးနဲ့ ဘီယာလေးမော့ပြီး
ကောင်းစားနေတဲ့သူ ဖြစ်သည် ။
နပိုလီယန်က ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်မို့ အပြင် မထွက်ချင်ဘူး ။ အိမ်ထဲဘဲ ပုန်းနေချင်တာ ။ ဇင်ကြီး
က နပိုလီယန် ဘာဖြစ်လာသလဲ မသိတော့..ညဖက် ကေတီဗီဆိုင်တွေကို ခေါ်သွားချင်သည် ။ သူ့မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ နပိုလီယန်ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်သည် ။
ဒီနေ့ ညနေဖက် နပိုလီယန်ကို ကေတီဗီဆိုင်ကို အတင်းခေါ်သည် ။ မလိုက်ချင်ဘူးလို့ ပြောလို့လည်း
မရဘူး ။ ကေတီဗီဆိုင်က ကောင်မလေးတွေက နပိုလီယန်ကို မဖမ်းစားနိုင်ဘူး ။ သူ့အန္တရာယ်က ကြီး
မားနေသည် ။ သူ့ကို လိုက်ရှာနေတဲ့လူတွေ လက်ထဲ မိမသွားဖို့ကဘဲ သူ့အတွက် အရေးအကြီးဆုံး
ဇင်ကြီးကို မငြင်းသာလို့ လိုက်သွားရသည် ။ အဆိုးဝါးဆုံးကတော့ ဇင်ကြီး ခေါ်ဖိတ်လိုက်တဲ့ မိတ်ဆွေ
တွေထဲမှာ ရဲတယောက် ပါနေတာ ..။ မုံရွာက ရဲ ..။ စခန်းမှူးညွန့်ရွှေ…တဲ့ ။ စခန်းမှူးညွန့်ရွှေက အရေးထဲ စပ်စုနေသည် ။ ဘာအလုပ်လုပ်လဲ..ရန်ကုန်မှာ ဘယ်မှာ နေသလဲ …။
ကေတီဗီမှာ ဇင်ကြီးက သူ့အသံပြဲကြီးနဲ့ ရှေးခေတ်က ဟင်္သတထွန်းရင်နဲ့ တွံတေးသိန်းတန် သီချင်း
တွေကို အော်ဆိုနေတဲ့ အချိန် စခန်းမှူးညွန့်ရွှေ…ရပ်ကွက်လူကြီးဦးအောင်ပွင့်…ဟိုတယ်မန်နေဂျာဦးထွန်း
သိန်း ဆိုတဲ့ ဇင်ကြီးရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ နပိုလီယန်က အရက်အတူတူ သောက်ရင်း စကားပြော
နေသည် ။ ကေတီဗီက ကောင်မလေးတွေကတော့ ပေါင်ပေါ်လာထိုင်လိုက် အရက်ငှဲ့ပေးလိုက်နဲ့ ။
သေးပေါက်ချင်လာတာနဲ့ အိမ်သာကို ထသွားလိုက်သည် ။ စီးကရက်အနံ့တွေ မွှန်ထွန်နေတဲ့ အရက်ဝိုင်းကို စိတ်ပျက်မိနေသည် ။ အိမ်သာခန်းက တော်တော်ဘဲ ညစ်ပတ်သည် ။ အနံ့နံရုံမက ကြမ်းတွေကလည်း စိုပေနေသည် ။ အိမ်သာသွားအပြီး လက်ဆေးဖို့ လုပ်တော့လည်း အဆင်မပြေဘူး ။
ဒီအချိန်မှာ လူနှစ်ယောက် အိမ်သာခန်းထဲ ဝင်လာသည် ။ အထဲရောက်တာနဲ့ လက်ဆေးဖို့ လုပ်နေတဲ့
သူ့ကို ပြေးထိုးကြ ကန်ကြသည် ။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ထင်မထား ..မမျှော်လင့်ထား.။ ပက်လက်လန်
ကျသည် ။ သူတို့က နံကြားကို ကြုံးကန်ကြသည် ။ လူးလဲထဖို့ကြိုးစားတဲ့သူ့ကို ဒူးနဲ့တိုက်သည် ။
သူ့နှာခေါင်းကို ထိုးမိလို့ သွေးတွေလျံကျလာသည် ။ လက်သီးတတောင် လက်ဝါးစောင်းတွေ က အဆက်မပြတ် သူ့ခေါင်း ဇက်ပိုးနဲ့ ဘိုက်ကို ထိုးနှက်နေကြသည် ။
“ တော်..တော်ကြပါဗျာ..ကျုပ် ဘာလုပ်မိလို့လဲ …ဘာကြောင့် ဒီလောက် ၀ိုင်းဆော်နေကြတာလဲ..”
လူနှစ်ယောက်က တကယ့် မိုက်တီးပုံတွေ ။
အသားမဲမဲ နဲ့ ကုလားဆင်ကောင်က ..“ ဘာလုပ်မိလို့လဲ..ဟုတ်လား…..ဟားဟားဟားဟား…..မင်း ဘာလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ မင်း သိမှာပါကွာ….” လို့ ပြောရင်း သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို အနောက်ကို ဆွဲပူး
ပြီး ကြိုးနဲ့ တုပ်ချည်လိုက်သည် ။ ကျန်တဲ့ တယောက်က သူ့ဇက်ပိုးကို လက်သီးနဲ့ ထပ်ပြီး ထိုးနေဆဲ ။
“ ဟေ့…ဒေးဗစ်..သူ့ပါးစပ်ကို တိပ်နဲ့ ပိတ်စမ်းကွာ….”
ကုလားဆင်ကောင်က ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက တိတ်အမဲရောင်ပြားကြီးကို ထုတ်ယူပြီး နပိုလီယန်ရဲ့ ပါးစပ်မှာ ပိတ်ကပ်လိုက်သည် ။
“ ကဲ…သွားစို့…ဒေးဗစ်..အပြင်ဖက် လူရိပ်လူခြေ ထွက်ကြည့်စမ်း …. ”
နပိုလီယန့်ကို ဆိုင် အနောက်ဖက်ပေါက်ကနေ ခေါ်ထုတ်သွားကြသည် ။ မှောင်ရိပမှာ စက်နှိုးထားတဲ့
ကားတစီးရပ်ထားတဲ့ဆီကို သူ့ကို ချုပ်ကိုင်ပြီး ခေါ်သွားကြသည် ။ ကားထဲလည်း ရောက်ရော အမဲရောင်
ခေါင်းအုံးစွပ်လို အဝတ်အိတ်ကြီးတအိတ်ကို သူ့ခေါင်းပေါ်ကို စွပ်လိုက်ကြသည် ။ ကားနောက်ခန်းမှာ သူ့ကို အလည်ကထားပြီး သူတို့က ဘေးတဖက်တချက်ကနေ ညှပ်ထိုင်လိုက်ကြသည် ။
“ အေးအေးဆေးဆေး လိုက်ခဲ့ကွာ…တတ်နိုင်ရင် ငါတို့ ထပ် မလုပ်ချင်တော့ဘူး…..”လို့ ကားရှေ့ခန်း
မှာ ထိုင်နေတဲ့ လူက ပြောလိုက်သည် ။ သူတို့ လုပ်ထားတာလည်း ကွဲပြဲဖူးယောင်နေပြီ ။ တလမ်းလုံး ဒါဏ်ရာတွေ က တစစ်စစ် နာကျင်ကိုက်နေသည် ။ မျက်နှာကို အိတ်စွပ်ထားပေမယ့် အမြန်လမ်းမကြီး
မှာ မောင်းနေတယ် ဆိုတာတော့ နပိုလီယန် သိနေသည် ။ ရန်ကုန်ကိုဘဲ ဦးတည်နေတာ ဖြစ်မည် ။
သည်လူတွေ ကျောက်ဖုရားရဲ့ လူတွေ ဖြစ်ဖို့များသည် ။
ရဲမှူးကိုကိုလင်း နဲ့ ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးတို့ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ရဲ့ တိုက်အိမ်ကြီး ရဲ့ မလှမ်းကမ်းမှာ ရောက်နေကြသည် ။ ကားတစီးထဲမှာ ထိုင်ရင်း အခြေအနေကို အကဲခတ်နေတာ ။
မကြာခင်ကဘဲ ဦးဇော်မြင့်တိုက်ကြီးထဲကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားတဲ့ လူတယောက်ကို အတင်းဆွဲခေါ်
သွားတယ်လို့ သတင်းပေးလို့ သူတို့ ရောက်လာတာ ။
ရဲမှူးကိုကိုလင်းနဲ့ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးတို့ မြောင်းမြမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရမ်း အလုပ်များ
နေကြတယ် ။ သူတို့ အသွင်ယူထောက်လှမ်းဖို့ လွှတ်ထားတဲ့ ဒုရဲအုပ်လေးမောင်မောင်က အိပ်ဖေါ်တီး
စုံတွဲနောက်ကို လိုက်သွားပေမယ့် သူ မြောင်းမြမှာ ရောက်နေတာကို သူတို့ကို ထိန်ချန်ထားတယ် ။
လေးမောင်မောင် မရိုးမသား တခုခုတော့ လုပ်နေပြီ လို့ ရဲမှူးကိုကိုလင်း က ယူဆခဲ့တာကြောင့် လေးမောင်မောင် အနောက်ကို ဒုရဲအုပ်ကျော်စွာဦး ကို လွှတ်လိုက်တယ် ။ အခုတော့ ရဲမှူးကိုကိုလင်းရော ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုး ရော အရမ်း တုန်လှုပ်သွားတယ် ။
မြောင်းမြက ရဲစခန်းမှူးက ဖုန်းဆက်တယ် ။ ကျော်စွာဦးကော လေးမောင်မောင် ကော ဟိုတယ်ခန်း
ထဲမှာ သေနတ်ဒါဏ်ရာ နဲ့ သေနေတဲ့အကြောင်း …။
သူတို့ ချက်ချင်းလိုက်သွားကြတယ် ။ အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲ လစ်သွားတာကို မြင်တဲ့ မျက်မြင်သက်သေတွေ
ရှိတယ် ။ သူတို့ကို အထက်က ကောင်းကောင်း ကြိမ်းမောင်းတော့တာဘဲ …။
ဒုရဲအုပ်ကျော်စွာဦး နဲ့ ဒုရဲအုပ်လေးမောင်မောင်တို့ အလောင်းတွေကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ သူတို့သေနတ်တွေနဲ့ တယောက်ကို တယောက် ပစ်ခတ်ထားတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရတယ် ။လေးမောင်မောင်ရဲ့ ကိုယ်ထဲက ကျည်ဆံက ကျော်စွာဦးသေနတ်က ကျည်ဆံ ဖြစ်သလို ကျော်စွာဦးရဲ့ ကိုယ်ထဲက ကျည်ဆံက လေးမောင်မောင် ရဲ့ သေနတ်က ပစ်တယ် ဆိုတာ တွေ့ရှီရလို့ ..။ သေနတ်နှစ်လက်ကတော့ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းတို့ လက်ထဲကို ပါသွားတယ် လို့ ယူဆကြတယ် ။
ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးက “ ရဲမှူးရယ်…ကျနော်တော့ လေးမောင်မောင် အဖြစ်ကို ယုံတောင် မယုံနိုင်ဘူး..
ကျနော်က ဒီကောင်လေး အရမ်း ရိုးအတယ် ထင်ထားခဲ့တာ….” လို့ ပြောနေတယ် ။
ရဲမှူးကိုကိုလင်းက “ လူရိုး ဆိုတာသင်းချိုင်းကုန်းမှာတောင် မရှိတော့ဘူး…အခုခေတ်က မီးသဂြိုလ်တဲ့
ခေတ်လေ….” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။
ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုး လက်ထဲက ဝေါ်ကီတော်ကီက အသံထွက်လာတယ် ။
“ ကျနော်တို့ ပတ်ပတ်လည်မှာ ၀ိုင်းထားပြီ..ဆရာ.ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ …” တဲ့ ။
“ စတင်းဘိုင် ငြိမ်နေပါ …ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာ ညွှန်ကြားမယ်….”လို့ ရဲအုပ်ဦးဇော်တိုးက ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။
ဦးဇော်မြင့်တိုက်ကြီးထဲကို မဝင်သေးဘဲ အခြေအနေကို သူတို့ စောင့်ကြည့်နေကြတယ် ။
“ ဗျာ..ရဲမှူး”
“ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က မိသားစု မရှိဘူးလား….”
“ မရှိဘူး..ရဲမှူး..သူက တကိုယ်တည်း နေနေတဲ့ လူလွတ်..သူ့မိဘ ညီအကိုတွေတော့ မိုးကုတ်မှာ နေကြတယ် ….”
“ လူတယောက်ကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီး သူနေတဲ့ အိမ်ကို ခေါ်လာတယ် ဆိုတော့ မရမ်းကားလွန်းဘူးလား….ခင်ဗျား ဘယ်လို ထင်သလဲ….”
“ အင်း..သူက တအား ချမ်းသာတော့…အချမ်းသာလွန်နေတော့ သူဘာလုပ်လုပ် ဖြစ်နေတယ် လို့ ထင်နေတာပေါ့ ရဲမှူး..သူက ကျနော်တို့ တပ်ဖွဲ့ထဲက ထိပ်ပိုင်းတွေကို တော်တော်ကြီး ပိုင်တယ်..”
“ ချွေလွန်းတော့ ရံတဲ့လူတွေ များတာပေါ့ ရဲမှူးရယ်…..”
“ ဟော..ကားတစီး…. လာနေတယ်..ခြံထဲ ဝင်တော့မယ်..ကြည့်စမ်းဗျာ..ဦးဇော်တိုး…. ဘယ်သူလဲ…”
ဦးဇော်တိုးက ညကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်လိုက်တယ် ။
“ ကားကတော့ ကျောက်ဖုရား စီးနေကျ ကာ..သူဘဲ ဖြစ်မယ်…ရဲမှူး…”
“ သူ အခုမှ အိမ်ပြန်လာတာကိုး…..”
ဒီအချိန်မှာ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ရဲ့ တိုက်ကြီးထဲမှာ ခေါင်းကို အနက်ရောင်အိတ် စွပ်ပြီး လက်ပြန်ကြိုး အတုပ်ခံနေရတဲ့ နပိုလီယန်သည် လူလေးယောက် ခြံရံလျက်နဲ့ တစုံတယောက်ကို စောင့်နေရ
တယ် ။ မကြာခင် တိုက်ကြီးထဲကို ဝင်လာတဲ့ လူတွေရဲ့ ခြေသံတွေ ဖိနပ်သံတွေကို သူ ကြားလိုက်ရတယ် ။
သူ့ဘေးက လူတယောက်က သူ့ခေါင်းက အဝတ်အိတ်နက်ကြီးကို ဆွဲဖယ်လိုက်တယ် ။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဆွဲဖယ်လိုက်တာ ။
“ လူလိမ် ….မင်းဘယ်ကို ပြေး မလဲ …..တောက်..ငါလိုကောင်ကို လာဘတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်……”
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်….မီးဝင်းဝင်းတောက်နေသည် လို့ တင်စားရမယ့် ဒေါသထွက်နေလို့ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြူးထွက် တောက်ပြောင်နေတဲ့ သူ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ နပိုလီယန့်
ကို စိုက်ကြည့်ပြီး လက်သီးဆုပ်ကြီးတွေ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားနေတယ် ။
“ ဘယ်မှာလဲ…..အိပ်ဖေါ်တီး စုံတွဲ……လူလိမ်တွေ…ဘယ်မှာလဲ..မင်းဘော်ဒါတွေ……”
“ မသိဘူး..ကျနော့်ကိုလည်း ဘတ်သွား…..”
“ မလိမ်နဲ့ …..မင်းတို့ တကျိတ်ထဲ တဉာဏ်ထဲတွေ..မင်း သိကို သိရမယ်…..”
“ တကယ် မသိတာပါ….တကယ်ပါ..မညာဘူး…”
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ရဲ့ လက်သီးဆုပ်ကြီးတွေက နပိုလီယန့် မျက်နှာပေါ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် မိတ်ဆက် ထိတွေ့လာတယ် ။
“ မင်း ညာနေတယ်…မင်း သူတို့နဲ့ ငါ့ကျောက်တွေကို ငါ့ဆီကို ပြန်ခေါ်လာပေးရမယ် ….”
“ သူတို့ ဘယ်မှာ ရှိတယ် ဆိုတာ ကျနော် တကယ် မသိတာပါ..ဦးဇော်မြင့် ..တကယ်ပါ ….”
“ မလိုချင်ဘူး….ပြန်ခေါ်မလာရင်..မင်း နောင်တ အကြီးအကျယ် ရသွားရလိမ့်မယ် ….ဒီကိစ္စတွေကို အနောက်က ဘယ်သူ ကြိုးကိုင်နေသလဲ ဆိုတာလည်း မင်းရဲ့ ပါးစပ်က အခု ချက်ချင်းပြော..မင်း ပြောကို ပြောရမယ်..ဘာလို့လဲ သိလား….ဟေ့ ..အုန်းမြင့်..ခေါ်ခဲ့စမ်း..အထဲက တယောက်ကို ….”
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ရဲ့ အမိန့်အရ အုန်းမြင့် ဆိုတဲ့ သူ့တပည့် က အတွင်းခန်းကို ဝင်သွားပြီး မိန်းကလေးတယောက်ကို ဆွဲခေါ်ထုတ်လာတယ် ။ ဒါကို မြင်ရတဲ့ နပိုလီယန် တကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်ခါအောင် တုန်သွားတယ် ။
သူ အရမ်းချစ်တဲ့ သူ့ညီမလေး မိုနာလီဇာ …။ မိုနာလီဇာရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်အစား တော်တော့်ကို နည်းပါးနေတယ် ။
အပေါ်ပိုင်းမှာ ဘရာစီယာ သေးမျှင်မျှင် ဖြူဖြူလေး နဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ပင်တီ ဖြူ ဖြူ လေး ဘဲ ရှိနေတယ် ။ မိုနာလီဇာရဲ့ မျက်လုံး လှလှကြီးတွေကနေ မျက်ရည်လုံးကြီးတွေ လိမ့်ကျလာနေတယ် ။
( ညီမလေး !!!!)
ဘရာစီယာလေးကဘဲ ဆိုက်သေးနေလို့လား ..မသိဘူး ..။ မိုနာဇီဇာရဲ့ နို့ကြီးတွေက ဘရာစီယာထဲကနေ အတင်းကြီး တွန်းရုန်းထွက်နေကြတယ် ။ ကိုယ့်ညီမ အရင်းခေါက်ခေါက်ကို အကိုဖြစ်တဲ့
လူက ဒီလို အနေအထားနဲ့ မမြင်သင့်ဘူး ။
ဒါပေမယ့် မြင်နေရတယ် ။
“ တွေ့လား လူလိမ်…တစ်….မင်းတို့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူတွေ ရှိသလဲ….နှစ်…..အိပ်ဖေါ်တီးအတွဲ ဘယ်မှာလဲ…ဒါတွေကို ပြော..မင်းပြော……မပြောရင်….”
ကျောက်ဖုရားက ပြောလက်စ စကားကို ရပ်လိုက်ပြီး မိုနာလီဇာ ဆီကို တိုးကပ်သွားတယ် ။
နပိုလီယန်လည်း ညီမလေး မိုနာလီဇာကို အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း မဖြစ်စေချင်ပါ ။ အနာတရလည်း မဖြစ်စေချင်ပါ ။ သို့သော် သူ အိပ်ဖေါ်တီး မောင်နှံ ဘယ်အရပ်မှာ ဆိုတာကို တကယ် မသိပါ ။
ကျောက်ဖုရားက မိုနာလီဇာ့ အနားကို ရောက်သွားပြီး ဆူဖြိုးကော့တင်းတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ စန္ဒယား ခလုပ်တွေကို နှိပ်သလို နှိပ်လိုက်တယ် ။
မိုနာလီဇာက လက်တွေကို ချုပ်ထားခံနေရပေမယ့် ကိုယ်လုံးတွေကို ဘယ်ညာ လှုပ်ပြီး ငြင်းဆန် ရုန်းကန်တယ် ။
နပိုလီယန်က“ သူ့ကို မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ…..ညီမလေးကို မကိုင်ပါနဲ့…..တောင်းပန်ပါတယ်…..တကယ့်ကို တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ…” လို့ ငိုကြီးချက်မနဲ့ ပြောလိုက်တယ် ။
ကျောက်ဖုရားက “ ဒါဆိုရင် ပြောလေ..အိပ်ဖေါ်တီး ဘယ်မှာလဲ..နောက်ပြီး မင်းတို့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်ကောင်တွေ ရှိတာလဲ…..ပြောပေါ့..မပြောရင်တော့…..ဟီး….ီးလိုလေး…..” လို့ ပြောရင်း
မိုနာလီဇာရဲ့ ပင်တီထဲကို သူ့လက်ချောင်းတွေ သွင်းလိုက်တယ် ။
မိုနာလီဇာက ငိုယိုပြီး ရုန်းကန်တယ် ။
“ အိပ်ဖေါ်တီးက ကျနော့်ကိုလည်း ဘတ်သွားတာပါ….ကျနော် တကယ် မသိပါဘူး …ဘရားစူးရစေရဲ့…..ကျနော်တို့ နောက်ကွယ်မှာ ပါတဲ့ လူတွေက ဇော်ကြီးပါ…ဦးလူကြီးရဲ့ တပည့် ဇော်ကြီး….”
ကျောက်ဖုရားက ပြုံးလိုက်တယ် ။
“ အော်..ဒီလိုလား….ဇော်ကြီး..ဦးလူကြီး……..အိုကေလေ…..ဟုတ်ပြီ….ဒါပေမယ့် ဟို လူလိမ်မောင်နှံ ဘယ်မှာလည်း ဆိုတာတော့ မင်း မပြောဖူးပေါ့….”
“ တကယ် မသိလို့ပါဗျာ..ကျနော့်ညီမလေး ကို ဘာမှ မထိခိုက်စေချင်ပါဘူး..တကယ် သိရင် ပြောမှာပါ..မသိလို့ပါ …..”
“ အုန်းမြင့်..မင်း လက်သံ ဘယ်လောက် ပြောင်သလဲ ဆိုတာ ပြလိုက်စမ်းကွာ…..”
မိုနာလီဇာ့ကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကျောက်ဖုရားရဲ့ တပည့်ကျော်ကြီး အုန်းမြင့်က မိုနာလီဇာလေးကို တဖျန်းဖျန်းနဲ့ ဘယ်ပြန်ညာပြန် ပါးရိုက်ပါတော့တယ် ။
နပိုလီယန်လည်း ညီမလေး အနာတရ ဖြစ်တာကို မကြည့်ရက်ပါ ။
“ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ..သူ့မှာ ဘာ အပြ့စ်မှ မရှိပါဘူး … ကျနော် ရှာပေးပါမယ်…..ညီမလေးကို လွှတ်ပေးပါ …..ကျနော် မတွေ့တွေ့အောင် လိုက်ရှာပေးပါမယ်…..”
နပိုလီယန်ရဲ့ ဘေးက လူနှစ်ယောက်က နပိုလီယန်ကု ဖမ်းဆွဲထားကြသလို ဘိုက်နဲ့ ကျောကုန်းကို လက်သီး တတောင်တွေနဲ့ ထုရိုက်ထိုးနှက်ကြပါတယ် ။ ကျောက်ဖုရားက “ ကောင်းပြီလေ ….
မင်း ညီမလေးကို ငါ ခေါ်ထားလိုက်မယ်..မင်း ဟိုနှစ်ကောင် နဲ့ ငါ့ဆီ ပြန်လာရွေး…..” လို့ ပြောလိုက်ပြီး မိုနာလီဇာရဲ့ ပင်တီလေးကို ရုတ်တရက် ဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ် ။
အမွှေးပါးပါး ဖုံးနေတဲ့ ဆီးစပ်လေး ပေါ်သွားတာကို နပိုလီယန် မကြည့်ရဲ မကြည့်ရက်ပါ ။
“ ဟဟားဟားဟား……အချိန်နဲ့ နာရီက လူကို မစောင့်ဘူးနော..ကဲ..မင်း သွားရှာ..ပြန်ခေါ်လာခဲ့……မင်း အချိန်မှီ ပြန်မရောက်လာလို့ကတော့ မင်း ညီမ နုနုထွတ်ထွတ်လေး ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ
ဆိုတာ တွေးကြည့်..မင်းလည်း လူလည်တယောက် လူလိမ်တယောက်ပါဘဲ…”
နပိုလီယန်ကို သူတို့ လက်ပြန်ကြိုး ဖြေပေးလိုက်ကြတယ် ။
နပိုလီယန်ကို တိုက်ထဲက မောင်းထုတ်လိုက်ကြချိန် ကျောက်ဖုရားရဲ့ တပည့်တယောက် ရောက်လာပြီး ခြံပတ်ပတ်လည်မှာ ရဲကားတွေ ရောက်နေတဲ့အကြောင်း ကျောက်ဖုရားကို ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ကျောက်ဖုရားက တုန်လှုပ်ဟန် လုံးဝမပြဘူး ။ ဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်တယ် ။
ရဲမှူးကိုကိုလင်းက တိုက်ကြီးထဲက လူတယောက် ထော့နဲ့ ထော့နဲ့ နဲ့ ထွက်လာတာကို တွေ့တော့..“ ကဲ ဦးဇော်တိုး..ကျနော်တို့ ဟောဟိုက ထွက်လာတဲ့ လူကို စစ်မေးကြရအောင်..” လို့ ပြောရင်း ကားထဲက ထွက်ဖို့ တံခါး လက်ကိုင်ကို ကိုင်လိုက်တဲ့ အချိန် သူ့ဖုန်း မြည်လာသည် ။
အိုး..သူ့အထက်လူကြီး ဦးရှိန်ဝင်းတောက်ပ ရုံးက ခေါ်တာ ..။
ချက်ချင်း ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ ဟိုဖက်က ဘာတွေ ပြောလိုက်တယ် မသိ …ရဲမှူးကိုကိုလင်း တုန်တုန်ရီရီနဲ့ “ ဟုတ်..ဟုတ်..ဟုတ်…..” နဲ့ ပြောပြီး ဖုန်းကို ပိတ်လိုက်သည် ။ ပြီးတာနဲ့ ရဲအုပ်
ဦးဇော်တိုးကို “ အဖွဲ့အကုန်လုံးကို သိမ်းလိုက်..ပြန်ကြမယ်…..အကုန် ပြန်မယ် ….” လို့ အသံတုန်တုန် နဲ့ ပြောလိုက်တယ် ။
ဦးဇော်တိုးက ရုတ်တရက် ကြောင်ကြည့်နေတော့….“ စက်နဲ့ ပြောလိုက်လေဗျာ . .ယူနစ်အားလုံး တပ်ခေါက်မယ်…..ပြန်မယ်…လို့..” လို့ ခပ်ငေါက်ငေါက် ပြောလိုက်ပါတယ် ။
သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဦးလူကြီးရဲ့ တပည့် ဇော်ကြီးတို့ အုပ်စု ..ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်တို့ အုပ်စု ..ရဲမှူးကိုကိုလင်းနဲ့ ရဲအုပ်စု က အပြင်းအထန် လိုက်ရှာနေတဲ့အချိန် ဟန်ဝင်းအောင် နဲ့ ညိုညိုညိမ်းတို့
က ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဘဲ ပြန်ရောက်နေကြတယ် ။ နပိုလီယန်ကလည်း သူ့ညီမလေးကို ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က ဓါးစာခံအဖြစ် ဖမ်းထားပြီး သူ့ကို အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲကို ရှာခိုင်းထားတာကြောင့် အပူမီး
ရင်မှာ ပိုက်ပြီး ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ လိုက် စုံစမ်းနေတယ် ။
သူတို့နှစ်ယောက်ကို ညိုညိုညိမ်းရဲ့ အသိ ဦးသိန်းထွန်းကျော် ဆိုတဲ့ လူကြီးက ကူညီမစလိုက်လို့ မြောင်းမြမြို့နေ ရန်ကုန်မြို့ကို ပြန်ရောက်လာကြတာပါ ။ မြောင်းမြမြို့ ဟိုတယ်ကနေ သူတို့
ထွက်ပြေးလာကြတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ ဦးသိန်းထွန်းကျော် နဲ့ ဆုံမိကြတာ ။ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ညိုညိုညိမ်းကို မှတ်မိနေတယ် ။
ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ညိုညိုညိမ်းနဲ့ တချိန်တုံးက အလုပ် တွဲလုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ လူတယောက်ပါ ။
အဲဒီတုံးက ထွက်ပေါက် မရှိ ပိတ်မိနေတဲ့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်ကို ညိုညိုညိမ်းက ကယ်တင်ခဲ့ဘူးတယ် ။ ဒီအချိန်က သူ့ကို ကယ်တင်ခဲ့ဘူးတာကို မှတ်မိနေတဲ့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က အခု ညိုညိုညိမ်း
အကူအညီ လိုအပ်နေတာကို တွေ့တော့ ပြန်ပြီး ကူညီချင်တယ် ။
လိမ်စားညာစား ဒုစရိုက်လောကသား တယောက် ဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ညိုညိုညိမ်းတို့ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ စစချင်းမှာ မသိသေးပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့ကို ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ လူသတင်း လူ
ချင်းဆောင်ပြီး သိသွားခဲ့တယ် ။ သတင်းစာနဲ့ ဂျာနယ်များမှာလည်း သူတို့ ဖြစ်ပျက်တာတွေ ပါသင့်သလောက် ပါတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်က “ ညိုညိမ်း..ဒီလူကြီးကို စိတ်ချရပါ့မလား..တော်ကြာ ကျနော်တို့ကို ထိုးကျွေး ရောင်းစားလိုက်မှဖြင့် …” လို့ တီးတိုး မေးတယ် ။ ညိုညိုညိမ်း က “ လတ်တလော ပြေးပေါက်
ပိတ်နေတဲ့ အချိန် သူကလွဲလို့ အကူအညီ မဲ့နေတော့လည်း သူ့ကိုဘဲ အားကိုးနေရတာပေါ့…မီးစင်ကြည့်ကတာပေါ့..သူ ညိုညိမ်းတို့ကို ကူတဲ့အတွက် ညိုညိမ်းတို့က သူ့ကို ကျေးဇူး ဆပ်မယ်
ဆိုတာလည်း သူ သိပါတယ်..ဒီတော့ မလုပ်လောက်ပါဘူး ..” လို့ ပြန်ဖြေတယ် ။
သူတို့နှစ်ယောက် ဦးသိန်းထွန်းကျော်ရဲ့ ကိုးမိုင်ခွဲက ခြံဝင်းကြီးထဲမှာ ငြိမ်နေကြတော့ သူတို့ ရန်ကုန်မှာ ရှိတယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိကြသေးဘူး ။
ဦးသိန်းထွန်းကျော်ကလည်း ရန်ကုန် ရောက်ပြီးတဲ့ အချိန် သူတို့ သတင်းတွေကို ကြားတော့ သူတို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲ ထုတ် မေးတယ် ။ သူတို့နှစ်ယောက် ဘာဖြစ်ချင်ကြသလဲ…မေးတယ် ။
သူတို့က နိုင်ငံခြားတနေရာရာကို ထွက်ပြေးမှကို ဖြစ်မယ်….အကူအညီပေးနိုင်မလား..လို့ မေးကြတော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က သိပ်တော့ မလွယ်ဘူး..ဒါပေမယ့် သူ ကူညီမယ် လို့ ပြောတယ် ။
သူက ဦးလူကြီးတို့ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်တို့လို အကောင်မကြီးဘူး ။ ဒါပေမယ့် သူ အစွမ်းကုန် အကူအညီ ပေးမယ် လို့ ပြောတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းနဲ့ ဟန်ဝင်းအောင်ကို ဦးသိန်းထွန်းကျော်က အခန်းတခန်းထဲမှာဘဲ ထားတယ် ။ ရန်ကုန်ကို ရောက်ရောက်ချင်း ညက ဦးသိန်းထွန်းကျော်ရဲ့ အိမ်မှာ ဘာမှန်းမသိသေးလို့ အရာရာကို
ထိတ်လန့်နေကြရတဲ့ အချိန် ဟန်ဝင်းအောင်က ညိုညိုညိမ်းကို ဆွဲဖက်ပြီး နမ်းလို့ ညိုညိုညိမ်းက “ ကိုအောင်..စိတ်ညစ်ရတဲ့ ကြားထဲကွာ….ဘာလုပ်တာလဲ..” လို့ ပြောရင်း ဟန်ဝင်းအောင်ကို
တွန်းလွှတ်ပေမယ့် ဟန်ဝင်းအောင်က အတင်းဘဲ ကုတင်ပေါ်ကို ဆွဲလှဲချတယ် ။
လေးမောင်မောင်ကို ပုလွေကိုင်ပေးတာ မကျေနပ်ဘူးလို့ ပြောတယ် ။ ပြီးတော့လေးမောင်မောင်ကို ပုလွေကိုင်ပေးနေတဲ့ အချိန် သူ့လီးလည်း အရမ်းတောင်တယ် လို့ပြောရင်း သူ့ပုဆိုးကို ဖြေချွတ်ပြီး
မာကျောတောင်မတ်တဲ့ သူ့တန်ဆာချောင်းကြီးကို စုတ်ခိုင်းတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းလည်း သူ့တန်ဆာချောင်းကြီးကို ငုံစုတ်ပေးလိုက်တယ် ။ ထိပ်ပေါက်က အရည်ကြည်လေးတွေ စို့နေတာကြောင့် ငံကျိကျိ အရသာကို ရလိုက်ပေမယ့် ဟန်ဝင်းအောင်က ညိုညိုညိမ်း နို့တွေ
ကို ကလိပေးနေတာကြောင့် ညိုညိုညိမ်းလည်း စိတ်ပါလာပြီး တန်ဆာကြီးကို အားရပါးရဘဲ စုတ်ပေးလိုက်မိတော့တယ် ။
နှစ်ယောက်သား ကိုယ်ပေါ်က အဝတ် မှန်သမျကို ချွတ်ပစ်လိုက်ကြပြီး စိတ်ရှိလက်ရှိ စပ်ယှက်ပစ်လိုက်ကြတယ် ။ “ ပျော်ပျော်ဘဲ နေကြတာ ကောင်ါးတယ် ညိုညိမ်းရယ်..ဖြစ်လေသမျှပေါ့….” လို့
ဟန်ဝင်းအောင်က ပြောရင်း အားနဲ့ မာန်နဲ့ လုပ်ခဲ့သမျှကို ကုတင်ပေါ် ပက်လက် လှဲလျောင်း အမောဖြေလိုက်တယ် ။
အိမ်တွင်း အောင်းနေကြအပြီး နှစ်ရက်လောက် ကြာတော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ညိုညိုညိမ်းကို နိုင်ငံခြားကို ထွက်ဖို့ အကူအညီ ရဖို့အတွက် လုပ်စရာလေးတွေ ရှိတယ်..ဒီည သူနဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ လို့
ခေါ်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်း တယောက်ထဲ လိုက်ခဲ့ရင် ရပြီ..ဟန်ဝင်းအောင် မလိုအပ်ဘူး လို့ ပြောတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းက အပြင်ထွက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား လို့ မေးတော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ပြုံးလိုက်တယ် ။
“ ဒါကြောင့် ညဖက် ထွက်ဖို့ စီစဉ်တာပေါ့..ကျုပ်ရဲ့ ကားကလည်း မှန်အမဲရောင်တွေလေ…” လို့ ပြောတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ညိုညိုညိမ်း တယောက်ထဲ လိုက်ပါသွားရတာကို သိပ်တော့
ဘဝင်မကျချင်ပေမယ့် ဦးသိန်းထွန်းကျော်က နှစ်ယောက်တွဲသွားရင် လူမှတ်မိနိုင်တယ် လို့ ပြောလိုက်တော့ ဟုတ်မှန်နေတာနဲ့ ငြိမ်နေလိုက်ရတာ ဖြစ်တယ် ။
သူတို့ကို ကူညီမယ့် လူတယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့လို့ ပြောတာကြောင့် ညိုညိုညိမ်းလည်း ဦးသိန်းထွန်းကျော် ခိုင်းတဲ့အတိုင်း မိတ်ကပ် ဆံပင် ကို လှလှပပ ပြင်ဆင်ရတဲ့အပြင် အဝတ်အစား လည်း
သားသားနားနား ဝတ်စားခဲ့လိုက်ရတယ် ။
ဦးသိန်းထွန်းကျော်က သူကိုယ်တိုင် ကားမောင်းတယ် ။
“ ဘယ်အထိ သွားကြရမှာလဲ အကိုကြီး…”
“ သိပ် မဝေးပါဘူး …ကျနော့်ရဲ့ အင်းတိုင်က ခြံကိုပါ ..”
“ အကိုကြီးက အင်းတိုင်မှာ ခြံ ဝယ်ထားတာလား…”
“ အင်း..ကြာပါပြီ….အေးအေးဆေးဆေး အနားယူဖို့ပေါ့..စားပင်လေးတွေလည်း စိုက်ထားတယ်လေ …အခု ဒီခြံမှာ ညိုညိမ်းတို့ကို ကူညီမယ့် လူနဲ့ ဆုံပေးမှာ….ဘာမှ မပူနဲ့ သူက ညိုညိမ်းတို့ကို လိုက်ရှာနေတဲ့ လူတွေနဲ့လည်း အဆက်အစပ် မရှိဘူး..အဲ..တခုဘဲ ရှိတယ်..သူ့ကို ညိုညိမ်း နဲနဲတော့ ကျေးဇူးဆပ်ရလိမ့်မယ်…ဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်လား….”
“ အို..ကိုယ့်ကို ကူညီမယ့်လူကို ဆပ်ရမှာပေါ့..သူ့ကို ငွေဘယ်လောက် ပေးရမှာလဲဟင် ….”
ဦးသိန်းထွန်းကျော်က “ သူက ငွေမလိုဘူး..ညိုညိမ်းရဲ့…” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
“ ဟင်…ဒါ..ဒါဆို…ညိုညိမ်းက ဘာပေးပြီး ဆပ်ရမှာလဲဟင်..အကိုကြီး….” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ ညိုညိမ်း ဆိုလိုတာက သူတို့မှာ ရထားတဲ့ မိုးကုတ်ကျောက်တွေထဲက ခွဲပေးရမှာလား ဆိုတဲ့ သဘော ..။ ဒါပေမယ့် ဦးသိန်းထွန်းကျော် ပြောလိုက်တာက ကျောက်တွေ စိန်တွေ မဟုတ်ဘူး ..။ ညိုညိမ်းရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပေးရမှာ ဖြစ်နေတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းလဲ သက်ပြင်းချမိတယ် ။ ဘဝ အဆင်ပြေရေး..အခက်အခဲတွေ ရှိလာရင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ရေး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ယောက်ျားတွေနဲ့ အိပ်ခဲ့ရတာ သူတို့ အလိုကျ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပေးခဲ့ရတာ တော်တော် များခဲ့ပြီ ။ အခုလည်း ပေးဆပ်ရအုံးမယ် …။ ဟင်း..မလွယ်ပါလား…။
တတက်စားလဲ ကြက်သွန်..နှစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန် ..။
မထူးတော့ပါဘူး..။ သန်းကောင်ထက် ညဉ့်မနက်တော့ပါဘူး …။
“ ဟင်..ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား ..သူက ပိုင်တယ်..ညိုညိမ်းတို့ကို ဘာ အတားအဆီးမှ မရှိဘဲ နိုင်ငံခြားအရောက် သူက ပို့ပေးမှာ….”
“ အင်း..ဟုတ်..ဟုတ်..အကိုကြီး . . .”
ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ကားကို လက်တဖက်နဲ့ ဘဲ ထိန်းမောင်းနေပြီး ကျန်တဲ့ လက်တဖက်က ညိုညိုညိမ်း ပေါင်တန်တဖက်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်တယ် ။
“ ညိုညိမ်းက အရင်လိုဘဲ..လှဆဲ…နုဆဲ….”
ညိုညိမ်းလည်း သူ့အကူအညီကို အကြီးအကျယ် ယူနေရတော့ သူ့ကို မတားချင်ပါ ။ မတားလိုက်ပါ ။ သူ့လက်ဖဝါးကြီးက ပေါင်ကြားကို ရောက်လာတယ် ။ ညိုညိမ်းရဲ့ အင်္ဂါစပ် နှုတ်ခမ်းသားတွေကို သူ ပွတ်နေတယ် ။
“ အကိုကြီးလဲ လိုချင်တာပေါ့လေ..ဟုတ်လား….”
“ ဟင်းဟင်း..အင်း..ညိုညိမ်းလို စိုပြေလှပ ဆူဖြိုး တောင့်တင်းတဲ့ မိန်းမတယောက်ကို မကြိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ လူ ရှိပါ့မလား…..ဟိုတုံးထဲက ညိုညိမ်းကို အကိုကြီးက သဘောကျနေခဲ့တာပါ…”
“ တကယ်ဘဲလား..အကိုကြီးရယ် ….ညိုညိမ်းကို အကိုကြီးက ကူညီနေတာဘဲ..ညိုညိမ်း မငြင်းပါဘူး..အကိုကြီး စိတ်ကြိုက်ပါ..”
“ အို…ဝမ်းသာလိုက်တာ ညိုညိမ်းရယ် …..”
သူ့လက်တွေက ညိုညိမ်း အင်္ဂါစပ်ကို ကျကျနနကို ကိုင်တွယ် ထိုးနှိုက်တော့တာဘဲ …။
“ အကိုကြီး…အဝတ်တွေ ကြေမွကုန်မယ်..ခြံထဲ ရောက်မှလေ..နော်..နော် …..”
“ ခြံထဲရောက်ရင် ဟိုဆရာကြီး လက်ထဲကို ညိုညိမ်းကို ထိုးအပ်ရမှာ…..အချိန်လဲ မရှိတော့ဘူး …နေလဲ မနေနိုင်တော့ဘူး ….”
“ ဟင်းဟင်း..အကိုကြီးရယ် ….ညိုညိမ်းက ဘယ်ကို ထွက်ပြေးမှာ မို့လဲ..အကိုကြီးရဲ့ အိမ်မှာဘဲ နေနေတာဘဲ မဟုတ်လားလို့….”
ဦးသိန်းထွန်းကျော် က ကားကို လမ်းဘေး မှောင်ရိပ် တနေရာကို ထိုးရပ်လိုက်တယ် ။
“ အကိုကြီးကို မှုတ်ပေးမလားဟင်…”
ဦးသိန်းထွန်းကျော်က သူ့ပုဆိုးကို ဖြေချွတ်လိုက်ပြီး ညိုညိုညိမ်းရဲ့ လက်တဖက်ကို ဆွဲယူလိုက်ကာ ပုဆိုးထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းလဲ ပူပူနွေးနွေး မာမာ လိင်တန်ကြီးကို ကိုင်မိလိုက်
“ ဟယ်တော့…အကြီးကြီး..မာမာကြီး ဖြစ်နေပြီတော့…ခိခိ…..”
ဦးသိန်းထွန်းကျော်လည်း ဟီးဟီး..လို့ ရယ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကို ခပ်လျှောလျှော ထိုင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းလည်း တုတ်ခိုင် ရှည်လျားတဲ့ လိင်တန်ကြီးကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ်ဆုပ်ညှစ်ပေးလိုက်တယ် ။
“ မှုတ်ပေးတော့ ညိုညိမ်း…..”
လောကြီးနေတဲ့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်ကို မျက်စောင်းလေးထိုးပစ်ရင်း လိင်တန်ကြီးကို နှုတ်ခမ်းလေးကြားထဲ ငုံခဲလိုက်ပြီး စုတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ် ။
ဦးသိန်းထွန်းကျော် ဆီက ညည်းသဲ သဲ့သဲ့ ထွက်လာတယ် ။
ပုလွေမှုတ်သံ ပြွတ်ကနဲ ပြတ်ကနဲ တွေ ထွက်လာတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းလည်း ခြံထဲရောက်ရင် အထူးအရေးကြီး ဆရာကြီးနဲ့ ကြုံရအုံးမှာမို့ အခု ကိစ္စကို အမြန်ဖြတ်မှဘဲဆိုပြီး ဦးသိန်းထွန်းကျော်ကို ကျကျနန မှုတ်ပေးနေတယ် ။ ဦးသိန်းထွန်းကျော်လည်း မှုတ်ခါစမှာတော့ ငြိမ်နေပေမယ့် တော်တော်လေး ကြာလာတော့ ညိုညိုညိမ်း ပါးစပ်ထဲကို ကော့ကော့ထိုးလာတယ် ။
ပါးစပ်ကလည်း တအားအားတဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းငြူနေတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းရဲ့ လျာထိပ်က ဦးသိန်းထွန်းကျော်ရဲ့ ဒစ်ဖူးကြီး ကြားထဲကို ကလိထိုးဆွပေးနေတော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်လည်း ဖင်တကြွကြွနဲ့ အရသာ ထူးကဲနေရပြီး ညိုညိုညိမ်း နှုတ်ခမ်းထူထူပြဲပြဲ ကြားကို ကော့ထိုးထည့်နေတာကြောင့် မကြာခင်ဘဲ တအား ကောင်းတက်လာရတော့တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းလည်း ဒီလူကြီး ပြီးတော့မယ် ဆိုတာ သိလာရပြီး ဖိဖိ စုတ်ပေး ကလိပေးတော့ မကြာခင်မှာဘဲ ဦးသိန်းထွန်းကျော် အိုးအားအီးအီး ဆိုတဲ့ အသံတွေ ရေရွတ်ရင်း ပြီးသွားရတယ် ။
သုတ်ရေတွေ တဖျောဖျော ညိုညိုညိမ်း ပါးစပ်ထဲမှာ ပန်းထွက်ကုန်တယ် ။
ညိုညိုညိမ်း လည်းအဝတ်အစားတွေ ပေရေကုန်မှာစိုးလို့ ကားထဲလည်း ဖြစ်လို့ ထွေးမထုတ်တော့ဘဲ သုတ်ရည်တွေကို မြိုချပစ်လိုက်ပါတယ် ။
ဦးသိန်းထွန်းကျော် လည်း သူပြီးသွားပြီးတာတောင် ဒစ်လုံးမှာ ကျန်နေတဲ့ သုတ်ရည်အစအနတွေကို
ရှင်းလင်းတဲ့အနေနဲ့ လျာလေးနဲ့ ယက်ပေးနေတဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို အရမ်းကျေနပ် သဘောကျသွားပါတယ် ။
ဦးသိန်းထွန်းကျော် ပုဆိုးကို သေသေချာချာ ပြန်စည်းပြီး ကားကို ဆက်မောင်းလိုက်တယ် ။
အင်းတိုင်က သူ့ခြံလေးထဲကို ရောက်တော့ ညိုညိုညိမ်းလည်း ရေချိုးခန်းကို ဝင်ပြီး နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး
ပြန်ဆိုး..မိတ်ကပ်ပြန်ဖို့တယ် ။ စောစောက ကားထဲမှာ ပုလွေမှုတ်ခဲ့လို့ ပြန်လည်မွမ်းမံခြယ်သတာပါ ။
မကြာခင်မှာ ဦးသိန်းထွန်းကျော်ရဲ့ ခြံလေးထဲကို ကားကြီးတစီး ဝင်လာတယ် ။ ပရာဒိုကားအသစ်ကြီး
တစီး ပေါ့ ။ မှန်အမဲရောင်တွေနဲ့မို့ အထဲကို မမြင်နိုင်တဲ့ ကားမျိုး ။
လူတယောက်ကားပေါ်က ဆင်းလာတယ် ။ ဒီလူက လူရွယ်တယောက်ဘဲ ။ ဦးသိန်းထွန်းကျော် ပြောတော့ ရာထူးရာခံကြီးတဲ့ လူကြီးတယောက်တဲ့..။ ဘယ်လို ဖြစ်တာပါလိမ့် ..။
ဦးသိန်းထွန်းကျော်က တံခါး ပြေးဖွင့်ပေးတယ် ။
ဒီလူရွယ်က မျက်နှာထား တော်တော် တင်းတာဘဲ ။
“ ဘယ်လိုလဲ…အိုကေလား…” လို့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်ကို မေးလိုက်တယ် ။ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က “ အဆင်သင့်ပါဘဲ…အားလုံး အိုကေပါတယ် ..” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။ လူရွယ်က ကားဆီကို ပြန်သွားလိုက်ပြီး ကား နောက်ခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပေးတယ် ။ ကားထဲက လူကြီးတယောက် ဆင်းလာတယ် ။
ခေါင်းဖြူဖြူ နဲ့ အသက်ကြီးကြီး ပေါ့ ..။
ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ပြာပြာသလဲ ပြေးကြိုတယ် ။
အိမ်လေးထဲ ရောက်တော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ဒီခေါင်းဖြူကြီးနဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို မိတ်ဆက်ပေးတယ် ။
အတွင်းက အိပ်ခန်းကို သူကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ပေးတယ် ။
မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ လူရွယ်ကတော့ အပြင်ခန်းမှာဘဲ ကျန်ခဲ့တယ် ။
ခေါင်းဖြူဖြူ အဖိုးကြီးက သေသေချာချာ ကြည့်တော့ သိပ် မအိုသေးဘူး ။ ဆံပင်တွေ ဖြူနေလို့ အဖိုးကြီး ပုံပေါက်နေတာ ။ ရွှေရောင်ကိုင်း မျက်မှန်နဲ့ ဒီလူကြီးကို ညိုညိုညိမ်း သတင်းစာထဲ ဂျာနယ်ထဲမှာ တွေ့ဖူးသလိုလိုဘဲ ။
“ ဦးကို တွေ့ဖူးလိုဘဲ ..သတင်းစာထဲမှာလား မသိဘူး ..” လို့ ပြောလိုက်တော့ လူကြီးက ရယ်တယ် ။ “ ထင်လို့ပါ..ရုပ်ဆင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…..” တဲ့ ။ ညိုညိုညိမ်းလည်း “ နှိပ်ပေးရမလား..ဦး….” ဆိုတော့ သူက ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ “ ကောင်းသားဘဲ..” လို့ ပြန်ပြောတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းလည်း “ ဒါဆို ဦး အဝတ်တွေ အားလုံး ချွတ်လိုက်နော်..ညိုညိမ်း ချွတ်ပေးမယ် ..” လို့ ပြောပြီး သူ့အဝတ်အစားတွေ အားလုံး ကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ အဖိုးကြီးက ပိန်ပေမယ့် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ပေါင်ကြားက ဒုတ်ကြီးကလည်း နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး ။ တွဲလောင်းကျနေပေမယ့် ထုနဲ့ ထည်နဲ့ ။ဟူး….တွေ့ကြပြီ….ညိုညိမ်းနဲ့…။
သူ့ကို ကုလားထိုင်တလုံးမှာ ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် ။သူ့ကို စနှိပ်ပေးလိုက်တယ် ။ ဇက်ကျော ပုခုံး ကို နှိပ်ပေးရင်း..“ ညိုညိမ်းက ဦးကို ဘယ်လို ခေါ်ရမှာလဲဟင်…” လို့ မေးလိုက်တော့ သူက ပြုံးပြီး “ ဦး ” လို့ဘဲ ခေါ်ပေါ့လို့ ပြန်ပြောပါတယ် ။ညိုညိမ်းကို အနှိပ်ရပ်ပြီး သူ့ရှေ့ကို လာခဲ့ဖို့ ပြောလို့ သူ့အနောက်ဖက်ကနေ နှိပ်ပေးနေရာက ညိုညိမ်းလည်း သူ့ရှေ့ကို လာခဲ့ရပါတယ် ။
သူက ညိုညိမ်းကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်ပြီး..“ မင်း အဝတ်တွေကို အကုန် ချွတ်လိုက်ပါလား…” လို့ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ညိုညိမ်းလည်း ဘယ်လောက်ဘဲ ယောက်ျားအတွေ့အကြုံ များခဲ့များခဲ့..ကိုယ့်ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ လူတယောက်ရှေ့မှာ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ဖို့ ရှက်သလိုလိုဘဲ ။ မီးကလည်း ထိန်ထိန်လင်း ဖွင့်ထားတယ် လေ ..။
“ ရှက်မနေပါနဲ့..ချွတ်လိုက်စမ်းပါ …မင်းကိုယ်ကို အဝတ်မပါဘဲ မြင်ချင်လို့ပါ ..”
ညိုညိမ်းလည်း သူ့အမိန့်ကို တသွေမတိမ်း နားထောင်လိုက်ပါတယ် ။ ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကို တခုပြီး တခု ချွတ်ချပစ်လိုက်ပါတယ် ။ သူ့အနားကို တိုးလာဖို့ ပြောပါတယ် ။ သူ့အနားကို ရောက်တော့ ညိုညိမ်းရဲ့ လုံးဝန်းတဲ့ နို့တွေကို သူကိုင်ပါတယ် ။ ဖွဖွလေး ပွတ်နေတာ ။ ညိုညိမ်းရဲ့ နို့သီးလေးတစုံကလည်း မာထောင်နေကြပြီ ။ သူ့လက်ချောင်းတွေက နို့သီးတွေကို ပွတ်နေတယ် ။ ကိုင်တယ် ဆွဲတယ် ။
“ အိုး ”
“ မင်းနို့တွေက အရမ်းလှတာဘဲ….So beautiful …. ” လို့ သူ လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်တယ် ။ နို့အုံတခုလုံးကို သူ ဆုပ်ကိုင်နေပြန်တယ် ။ ညိုညိမ်းလည်း သူ့အကူအညီကို ရချင်တာနဲ့ သူဘာလုပ်လုပ် လုပ်ပါစေတော့ ဆိုပြီး မျက်လွှာချပြီး ခံနေလိုက်ပါတယ် ။ သတင်းစာထဲ ပါပါနေတဲ့ လူကြီးတယောက်နဲ့ အခုလို ပတ်သက်ခွင့်ရတာကိုလည်း ညိုညိမ်း အံ့သြကျေနပ်နေတာပါ ။
နို့တွေပြီးတော့ ညိုညိမ်းရဲ့ ဖင်တွေကို သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး လက်ဖဝါးနဲ့ ပွတ်သပ်ပါတယ် ။ ညိုညိမ်းရဲ့ ဖင်တွေကလည်း ယောက်ျားတွေ က စစ်ကိုင်းအိုး လို့ ပြောတတ်ကြတဲ့ ဖင်မျိုးပါ ။ စွင့်ကားပြီး ကော့နေတဲ့ ဖင်တုံးတွေပါ ။ သူက ဖင်တုံးတွေကိုလည်း ဖျစ်ညှစ်လိုက် ဆုပ်နယ်လိုက် ဖျတ်ကနဲ ဖျတ်ကနဲ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဆော့ကစားနေပါတယ် ။
“ နဲနဲ ကုန်းလိုက်ပေးမလား …”
“ ဟုတ် …. ”
ဒီလို ကုန်းလိုက်ရင် ဖင်ကြားကနေ အဖုတ်ကြီး ပြူးနေတော့မယ် ဆိုတာ ညိုညိမ်း သိတယ် ။
“ အိုး …. Wow…whatawonderful thing!!!!…ဒီလောက်လှတဲ့ အင်္ဂါစပ်မျိုး တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူး….”လို့ သူပြောလိုက်ပြီး ညိုညိမ်းရဲ့ အဖုတ်ကို သူ့လက်ဖဝါးနဲ့ အုပ်ကိုင်လိုက်..သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပွတ်သပ်လိုက် လုပ်နေတာ အကြာကြီးပါ ။ သူ့ကို အမှတ်တမဲ့ ငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ အာပါးပါး သူ့ပေါင်တန်ပိန်ကျစ်ကျစ်တွေ ကြားက ဒုတ်ညိုညိုကြီးက တအားကြီးထွား မာကျော မတ်ထောင်နေပြီ ။
တကယ့်ကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ အင်္ဂါချောင်းကြီးပါဘဲ…။ ဒစ်လုံးကြီးက မှိုပွင့်ကြီးတပွင့်လိုဘဲ ။ လုံးပတ် တုတ်တုတ်ကြီးကလည်း အသဲယားစရာကြီး ။ အကြောကြီးတွေ အပြိုင်းပြိုင်းထောင်လို့ …။
“ ဦးရဲ့ ဟာကလည်း တအား ကြီးတာဘဲ…ဟီး…တကယ်လှတယ် …. ” လို့ ညိုညိမ်းက သူ့ကို ပြောလိုက်တော့ သူက “ စုတ်မလား….” လို့ ပြန်မေးပါတယ် ။ ညိုညိမ်းကလည်း ခေါင်းညှိမ့်ပြီး…“ အင်းစုတ်ချင်တယ်..”လို့ ဖြေလိုက်ချိန်မှာ သူ့ဒုတ်ကြီး ဆတ်ကနဲ လှုပ်သွားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။
သူထိုင်နေတဲ့ရှေ့ ဒူးလေးတုပ် ထိုင်ချပြီး လက်တဖက်က သူ့ဟာကြီးရဲ့ အရင်းပိုင်းကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးထိပ်ဖူးဒစ်ကြီးကို စ စုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ညိုညိမ်း ပါးစပ်ထဲကို သူ့ဟာ တုတ်တုတ်ကြီးက မဆန့်မပြဲ ဝင်နေတာကို သူ သေသေချာချာ ငုံ့ကြည့်နေပါတယ် ။ ညိုညိမ်းလည်း သူခိုက်သွားစေချင်လို့ ပုလွေပညာရပ်မျိုးစုံကို အသုံးပြုပြီး သူ့ကို စုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ညိုညိမ်းက ဦးသိန်းထွန်းကျော်တုံးကလိုဘဲ သူ့ကို ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးစေချင်ပေမယ့်သူက အပြီး မစုတ်ခိုင်းပါဘူး ။
ညိုညိမ်းကို ကုတင်စောင်းမှာ ဖင်ထောင်ခိုင်းပြီး သူက ကုတင်အောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်ရက်နဲ့ လုပ်ပါတယ် ။ သူ့လုံးပတ်တုတ် ဒုတ်ကြီးက ညိုညိမ်း အဖုတ်ထဲမှာ အပြည့်ပါဘဲ ။
ညိုညိမ်း ဘဝမှာ ယောက်ျားတွေနဲ့ ခဏခဏ ကြုံပေမယ့် ဒီလူကြီးနဲ့ ဖြစ်ရတာကို စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ် သဘောကျမိပါတယ် ။ သူ့အတန်ကြီးကလည်း စွဲမက်စရာကြီပါဘဲ ..။ သူက တချီဘဲ ချပေမယ့် သူလုပ်တာတွေကြောင့် ညိုညိမ်းလည်း “ ပြီး ”ရတာ မို့ အရမ်းသဘောကျမိပါတယ် ။
သူက ပြန်ခါနီးမှာ “ ထပ်တွေ့ချင်သေးတယ် ..သူ နိုင်ငံခြား သွားတဲ့အခါ သူနဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ ..ဘာမှ မပူနဲ့..” လို့ ပြောတယ် ။
ညိုညိမ်းလည်း သူနဲ့ ထပ်တွေ့ချင်ပါသေးတယ် ။
ဦးသိန်းထွန်းကျော်နဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က “ ညိုညိမ်း..ဒီည မောပြီလား..” လို့ မေးပါတယ် ။ ဘာလို့လဲ..လို့ ညိုညိမ်းက မေးတော့..“ မမောသေးရင် ကိုယ်နဲ့ လာအိပ်ပါလား..” လို့ပြောပါတယ် ။ သူနဲ့ သွားအိပ်ဖို့ကျတော့ ဟန်ဝင်းအောင်က ဂျေဝင်အုံးမှာ လေ ။
“ ဦးရယ်…ညိုညိမ်း ဘဲက ရှိနေတော့ လုပ်ချင်ရင် ဒီမှာဘဲ လုပ်လိုက်ပါလား..” လို့ ညိုညိမ်းက သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ သူ သဘောပေါက်ပါတယ် ။ သူ့ကို ဟိုလူကြီနဲ့ ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာဘဲ ပေးလိုက်တယ်။ ညိုညိမ်းကို ပေါ်က တက်လုပ်ခိုင်းတယ် ။ သူ့ဒုတ်က ဟိုလူကြီးလောက် မကြီးပေမယ့် မဆိုးပါဘူး ။ သူကျေနပ်သွားပါတယ် ။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူက “ အနည်းဆုံး ဘန်ကောက်အထိ အစစ်အဆေး အတားအဆီး မရှိဘဲ ရောက်သွားမှာပါ ညိုညိမ်း …” လို့ ပြောပါတယ် ။ ညနက်နေပြီ ။ ဟန်ဝင်းအောင်က “ ညိုညိမ်း ဘယ်တွေ သွားပြီး ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွာ..” လို့ မေးတယ် ။ ညိုညိမ်းလည်း နိုင်ငံခြားကို ထွက်ဖို့ တိုင်ပင်ပြင်ဆင်နေတယ် လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
နှစ်ရက်လောက် ကြာတော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က သူနဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်ပြန်တယ် ။
ဟိုလူကြီးနဲ့ နောက်တခါ ထပ်တွေ့ရတော့ ညိုညိမ်းလည်း အရင်တခါလိုဘဲ သူကျေနပ်အောင် ကောင်းကောင်း မှုတ်ပေးလိုက်သလို အပေါ်က တက်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူ အရမ်းသဘောကျသွားပြီး သူ ခရီးထွက်တော့မယ်..အသင့်ပြင်ထားတော့..သူနဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ…လို့ ပြောသွားတယ် ။ ဘန်ကောက်ကို ရောက်သွားတယ် ။ ဘယ်သူမှ မတွေ့ဘဲ ပါသွားတာ ။ ညိုညိမ်းတို့ ဘန်ကောက်ကိုရောက်တော့ ဟိုတယ် တခုမှ နေပြီး ဦးသိန်းထွန်းကျော် ပေးလိုက်တဲ့ အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ ကျောက်တချို့ကို ရောင်းချလိုက်ကြတယ် ။ ဘန်ကောက်မှာက ယာယီဘဲ နေကြပြီး တခြားတနိုင်ငံကို ခရီးဆက်ကြဖို့ စဉ်းစားကြတယ် ။ ပိုက်ဆံပေါနေတာကြောင့် ပတ်တရာ ကမ်းခြေကို သွားလိုက်ကြတယ် ။
“ ကိုအောင်..ဒီကိုတော့ ကျောက်ဖုရားတို့ ဇော်ကြီးတို့ လိုက်မလာနိုင်ပါဘူးနော် …” လို့ ညိုညိမ်းကစိတ်ပူပြီး မေးလိုက်တော့ ဟန်ဝင်းအောင်က “ သူတို့က နယ်စပ်လောက်အထိဘဲ လိုက်ရှာကြမှာပါ..”လို့ ပြန်ဖြေတယ် ။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် လည်း နပိုလီယန် သူ့ကို ဟိုနှစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းပြီး ဘတ်တာကို ခံပြင်းလွန်းလို့သူ့ညီမလေး မိုနာလီဇာကို ဖမ်းခေါ်ပြီး ဟိုကိုင်ဒီပွတ်လုပ်..တပည့်ကို ပါးရိုက်ခိုင်း လုပ်လိုက်ပေမယ့်ချောလွန်းတဲ့ ချစ်စရာ ကောင်မလေးကို ကြည့်ပြီး သနားစိတ်ဝင်သွားတယ် ။ ဒါပေမယ့် နပိုလီယန်ကို ခြောက်ချင်လို့ တကယ်ဘဲ မုဒိန်းကျင့်တော့မလို ပုံစံဖမ်းထားခဲ့တယ် ။
ကောင်မလေးကို သူ့ရဲ့ ခြံတခြံ မှာ ဓားစာခံ အဖြစ် ဖမ်းခေါ်ထားပြီး နပိုလီယန်ကို သူ့တပည့်တယောက်နဲ့ တွဲပြီး ဟိုနှစ်ယောက်ကို လိုက်ရှာခိုင်းထားတယ် ။
တကယ်တော့ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ဟာ စီးပွားရေးသမား ကျောက်တွင်းတူးသမား..ကျောက်သူဌေးတယောက် ဖြစ်ပေမယ့် လူဆိုးလူရမ်းကားစစ်စစ်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါ ။
မိုနာလီဇာလေး ရှိတဲ့နေရာကို သူ ပြန်သွားမိတယ် ။ကောင်မလေး ကို လှောင်ထားတဲ့ အခန်းလေးကို ရောက်တော့ ပါးလေးနှစ်ဖက် နီရဲတွတ်နေပြီးမျက်ရည်ကျနေတဲ့ မိုနာလီဇာလေးကို သူတွေ့တယ် ။ဟာ..ဟိုကောင် အုန်းမြင့် ပါးရိုက်ထားတာ ကောင်မလေး ပါးလေးတွေ နီရဲနေတယ်..တောက် မညှာမတာရိုက်တဲ့ကောင်….။
“ မင်း ဘာလို့ ဒီလောက်လှတဲ့ ပါးနုနုလေးတွေကို ရိုက်ပစ်ရသလဲ …”
“ ငါ ဘယ်လောက်ဘဲ ရိုက်ခိုင်းရိုက်ခိုင်း မင်း ရိုက်စရာလား..မင်း မသင့်ပါဘူး ဘာညာနဲ့ ငါ့ကို ဖြောင်းဖျသင့်တာပေါ့…”
“ မင်းကို အပြစ်ပေးရမယ် …. ”
“ လတ်တလော..သူကလေးနဲ့ ငါ စကားပြောမလို့..မင်း ကို ငါ မမြင်ချင်ဘူး..”
“ မင်းသွားလိုက်ကွာ..ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို မင်း မလာနဲ့..ဝေးဝေးသွား….ခေါ်မှလာ …”
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် တပည့်တွေကို မောင်းထုတ်လိုက်ပြီး မိုနာလီဇာလေးကို အဝတ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ပေးတယ် ။ သူလုပ်မိတာတွေကို တောင်းပန်တယ် ။ မိုနာလိဇာလေးလည်း ကြောင်ငေးနေတယ် ။ဒီလူကြီး ဘာဖြစ်သွားပါလိမ့် ဆိုပြီး…။
မိုနာလီဇာကို ကားပေါ်တင်ပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ် ။ မိုနာလီဇာ့လက်ထဲကို မြွေရေခွံအိတ်လို့ ခေါ်တဲ့ အရင်ခေတ်က ရပ်ကွက်ကောင်စီတွေ ကိုင်တဲ့ အိတ်မျိုးထဲမှာ ငွေငါးထောင်တန်တွေ အထုပ်တော်တော်များများ ထည့်ပေးလိုက်တယ် ။
“ အကိုကြီး အမှားတွေအတွက် လျော်ကြေးပေးတာ…အကိုကြီး နဲနဲ မှားသွားတယ်..မိုနာလီဇာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ…” လို့ ထပ်ပြီး တောင်းပန်တယ် ။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် ရှေ့မှာ နပိုလီယန် ရောက်နေတယ် ။
ခြင်္သေ့ကြီး ရှေ့မှာ ရောက်နေတဲ့ သမင်ပိန်လေးလို တုန်နေတယ် ။
“ ဘယ်လိုလဲကွ..မင်း ဟိုနှစ်ယောက်ကို ပြန်မခေါ်လာပေးပါလား …. ” လို့ မာမာထန်ထန် မေးလိုက်တော့နပိုလီယန် တုန်ခါနေအောင် ကြောက်လန့်နေတယ် ။ သူ့ညီမလေး မိုနာလီဇာကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်လုပ်တာတွေက ဆိုးတယ် ။ မိုနာလီဇာ သူ့လက်ထဲ ရှိနေသရွေ့ သူ့ကို မလှန်ရဲဘူး ။
“ မင်းကို သတ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်..သိလား…မင်းသိရဲ့လား …. ”
“ သိ..သိ…သိပါတယ်….အကိုကြီးရယ်….ကျနော် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ….”
“ ငါ့ကျောက်တွေက နည်းတာ မဟုတ်ဖူးကွ …မင်း အတွက်နဲ့ မင်းညီမလေးတော့ မလွယ်ဘူး …… ငါ့အကြောင်း မင်း သိစေရမယ် …”
“ မ…..မ…..မ…..မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ..ကျနော့်ညီမလေးမှာ ဘာအပြစ်မှ မရှိပါဘူး …ကျနော့်ကိုဘဲ လုပ်ပါ..ညီမလေး ကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ… ”
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် အကြောက်လွန်နေတဲ့ နပိုလီယန်ကို ကြည့်ပြီး ရယ်ချင်နေတယ် ။ ဒါပေမယ့်မျက်နှာထား ပုတ်ပုတ်နဲ့ ဟန်တင်း မာန်ခင်း ထားတယ် ။
“ ဒီတော့ ငါက ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ …. ”
“ ကျနော့်ကိုဘဲ ကြိုက်သလို အပြစ်ပေးပါ….ကျနော်ခံပါ့မယ်..ညီမလေးကို လွှတ်လိုက်ပေးပါ…”
“ မင်း ငါ့ကို ဘတ်တဲ့အတွက် မင်း တခုခု ပြန်လုပ်ပေးရမယ်..ဘယ်လိုလဲ….”
“ ကြိုက်တာ ခိုင်းပါ..ကျနော် လုပ်ပေးပါမယ် ..ညီမလေးကိုသာ လွှတ်ပေးပါ ဆရာရယ်…”
သူမသိသေးဘူး ။ သူ့ညီမလေးကို ကျောက်ဖုရားက ငွေတွေနဲ့ အိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်တာ ..။
“ ဟားဟားဟားဟား…..မင်း ညီမလေးအတွက် တော်တော်ဘဲ စိတ်ပူနေတာကိုး..မပူပါနဲ့..အဆင်ပြေသွားမှာပါ…မင်း လုပ်ပေးရမှာကို ငါပြောပြမယ်…ဒီအနားကို တိုးစမ်း…”
နပိုလီယန်လည်း ကျောက်ဖုရား အနားကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ တိုးကပ်သွားတယ် ။ တခုခု လုပ်လိုက်မှာကို သူကြောက်နေတာ ။
ဦးတင်မောင်လတ်နဲ့ ဇော်ကြီးတို့ နေစရာကို မရှိ ဖြစ်နေတယ် ။
ဦးလူကြီးက သူတို့ကို ကြိမ်းမောင်း ဆူဆဲလို့ ။ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က ဇော်ကြီး သူ့ကို နပိုလီယန်နဲ့အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲကို သုံးပြီး ဘတ်တာကို ဦးလူကြီးကို ပြောလိုက်လို့ ။ ဦးလူကြီးက ငြင်းတော့ နပိုလီယန်ကို ထုတ်ပြတယ် ။ နပိုလီယန်က ဇော်ကြီးရဲ့ အကြံအစည်ပါ လို့ ထွက်ဆိုလိုက်တော့ ဦးလူကြီးက မငြင်းသာဘူး ။ ကျောက်ဖုရားကို ရေလည် တောင်းပန်ရတော့တယ် ။
နပိုလီယန်လည်း မိုနာလီဇာ ပြန်လွှတ်လာတဲ့အပြင် ကျောက်ဖုရားက ငွေထုပ်ကြီး ပေးလိုက်လို့ စိတ်သက်သာရာ ရသွားပြီး ကျောက်ဖုရားရဲ့ တပည့်လုံးလုံး ဖြစ်သွားရတော့တယ် ။
ဦးလူကြီးက ကျောက်ဖုရားကို အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲကို မမိမိအောင် ပြန်လိုက်ဖမ်းပေးပါမယ် လို့ ဂတိပေးတယ် ..။
ဦးတင်မောင်လတ်နဲ့ ဇော်ကြီးလည်း စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အရက်ထိုင်သောက်နေတဲ့အချိန် ဦးလူကြီးရဲ့ သမီးငယ် ဂန္ဒမာလူကြီး ဦးတင်မောင်လတ်ဆီကို ဖုန်းဆက်တယ် ။
“ မေးပါ သမီး…ဘာမေးမလဲ…”
“ ဟန်ဝင်းအောင် ဘယ်မှာလဲ..ခဏ ဆိုပြီး ဦးလတ် ခေါ်ခိုင်းတာ ..အခု သမီးဆီလည်း ပြန်မပို့ပေးဘူး ”
ဦးတင်မောင်လတ် ခက်နေတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်တို့ အကြောင်းတွေ အမှန်အတိုင်း မပြောချင်ဘူး ။
“ အဟဲ..သမီး..သူ ခရီးလွန်နေတယ်…အလုပ်ကိစ္စနဲ့…သမီးအတွက် ဒရိုင်ဘာကောင်းကောင်း တယောက်ရှာပေးမယ်…အဟဲ…စိတ်ချပါ …”
“ ဦးလတ်….ဟန်ဝင်းအောင် ကို အလုပ်ခိုင်းတာ စော်နဲ့ လိမ့်ခိုင်းတာလား…”
“ ဘာ..ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ သမီး..ဦးလတ် နားမလည်လို့ပါ…”းးလတ်.
“ ဦးလတ်..ဟန်ဝင်းအောင် အခု ဘယ်မှာ ရှိလဲ သိလား…”
“ စော်နဲ့ လိမ့်နေတာ..ကဲနေတာ..ဘာအလုပ်ကိစ္စလဲ..ဟွန်း…”
“ ဟုတ်လား..သမီးတို့ တွေ့လို့လား..ဘယ်မှာ တွေ့တာလဲ…”
ဦးတင်မောင်လတ် အရမ်း သိချင်သွားတယ် ။ လောမကြီးဘဲ အသာ မေးလိုက်တယ် ။
“ မီးနဲ့ တွေ့တာ မဟုတ်ပါဘူး..မီး သူငယ်ချင်းနဲ့ တိုးတာ…မီးသူငယ်ချင်း …ဖူးစုံရွှေ..တို့ တွေ့ခဲ့တာ..ခုနဘဲ ဖုန်းဆက်တယ် ..ယိုးဒယား…ပတ်တရာ ကမ်းခြေမှာ….ဟွန်း..သူနဲ့ လိမ့်နေတဲ့စော်က ဘယ်သူလဲ သိလား ..ဟွန်း..ညိုညိုညိမ်း…လေ …အရမ်းကဲနေတာဘဲ တဲ့..”
ဦးတင်မောင်လတ် နဲ့ ဇော်ကြီး အိပ်ဖေါ်တီးတို့ ဘယ်မှာ ရှိတယ် ဆိုတာ သိသွားပြီ ။ ဇော်ကြီး ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်တယ် ။
Walking Street မှာဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းတို့ လက်ချင်းချိတ်ပြီး လမ်းလျှောက်နေတယ် ။နိုက်ကလပ်တွေ အမျိုးမျိုးက ကောင်မလေးတွေက သူတို့ကလပ်ထဲကို လာဖို့ ထွက်ခေါ်နေကြသလို မာဆတ်ခန်းတွေက တူညီဝတ်စုံနဲ့ ကောင်မလေး တွေကလည်း ဖိတ်ခေါ်နေတယ် ။
မနေ့ညက သူတို့စုံတွဲ မာဆတ် အတူတူသွားလုပ်ပြီးပြီ ။ ကုတင်ဘေးချင်းယှဉ်ထားပြီး အနှိပ်ခံကြတာ ။သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး နိုင်ငံခြားကို လုံးဝ မထွက်ဘူးသေးကြတာကြောင့် ဘန်ကောက်နဲ့ ပတ်တရာက သူတို့အတွက်အထူးအဆန်း ဖြစ်နေတယ် ။ ကျောက်ကလည်း ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းထားတာကြောင့် အိတ်ကလည်း ဖေါင်းနေတော့ နှုတ်ခမ်းလည်း စိုတာပေါ့ ။
အဖြူကောင်တကောင် ဟန်ဝင်းအောင်အနားကို ကပ်လာတယ် ။သူ့ကလပ်မှာ စော်တွေ မိုက်တယ် ..လာကြည့်ပါ..ရုရှား အဖြူမတွေ လို့ ပြောတယ် ။
ညိုညိုညိမ်းကလည်း ရောက်ဖူးတယ် ရှိအောင် သွားချင်တယ် ။ “ ကိုအောင် သွားသာသွား..ညိုညိမ်းဂျေမဝင်ပါဘူး …ရောက်ဖူးသိဖူးချင်တယ်…” လို့ တိုက်တွန်းတာနဲ့ ဒီလူနောက်ကို လိုက်သွားလိုက်ကြတယ် ။ ရုရှားမတွေ အများကြီးဘဲ ။ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်း ထိုင်လိုက်ကြပြီး ဘီယာ မှာလိုက်တယ် ။ စင်နိမ့်နိမ်ကလေးပေါ်မှာ ရုရှားမလေးတယောက် တထိန်းထိန်း သီချင်းသံနဲ့အတူ ထိုးထိုးထွန့်ထွန့်ကနေတယ် ။ ကိုယ်တုံးလုံးတော့ မဟုတ်ဘူး ။ ဘရာစီယာနဲ့ ဘောင်းဘီတိုတိုလေးနဲ့ ။
ဟော..လာပြီ …နဲတဲ့ကောင်မကြီး မဟုတ်ဘူး ။ ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့..သူလဲ ဘရာစီယာနဲ့ ဘောင်းဘီပြတ်လေးဘဲ ဝတ်ထားတယ် ။
“ ဟေး…မင်းတို့ ပျော်ရဲ့လား….အပေါ်ထပ် တက်ပြီး ဒီထက် ပျော်စရာတွေ လုပ်လို့လည်း ရတယ်နော်..ဘာမှမကုန်ကျဘူး…နဲနဲပါးပါးဘဲ….” လို့ လာကပ်ပြောတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းက သွားချင်သွားဖို့ ပြောတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်က ညိုညိုညိမ်း မျက်နှာကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့် အကဲခတ်ပြီး “တကယ် ပြောတာလား..ညိုညိမ်း…” လို့ မေးလိုက်တယ် ။
ညိုညိုညိမ်းလည်း ရယ်မောပြီး..“ သေချာပါတယ်..ညိုညိမ်းလည်း အတွေ့အကြုံ အသစ်အဆန်း ကြုံချင်တွေ့ချင်တယ် ကိုအောင် …” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်လည်း နိုင်ငံခြားသူ ရုရှားမတွေကို စိတ်ဝင်စားနေပြီ ။တခါမှ နိုင်ငံခြားသူနဲ့ မလုပ်ဖူးသေးလို့ စမ်းလိုက်ချင်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကလည်း ခွင့်ပြုနေ..ငွေကလည်းလျံနေတယ် ဆိုတော့ လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားပေါ့ ။
“ ဘယ်လောက် ပေးရမှာလဲ …”လို့ သူတို့နဲ့ လာထိုင်နေတဲ့ ရုရှားမကို မေးလိုက်တယ် ။ ရုရှားမက “အမေရိကန် ၁၅၀ ” ပေးရမယ်..အခန်းဖိုး ပေးစရာ မလိုဘူး..မင်း ကြိုက်တဲ့ စော်ကို ရွေးနိုင်တယ်..”လို့ပြန်ပြောတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ကလပ်ထဲ ထိုင်နေတဲ့ ကနေတဲ့ ရုရှားမတွေ အားလုံးကို လျှောက်ကြည့်ပြီးဘယ်ဟာကို ရွေးရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတယ် ။
သိပ်မြင့်မြင့်ထယ်ထယ်ကြီးတွေကျတော့ သူနဲ့ မကိုက်ဘူး လေ ။
ဟော…တယောက် တွေ့ပြီ ။
သူတို့ နောက်မှ ကလပ်ထဲ ဝင်လာတဲ့ မုတ်ဆိပ်ပါးသိုင်းမွေးနဲ့ ကုလားကြီးတွေကို ဧည့်ခံနေတဲ့ မိန်းမ ။
မဆိုးဘူး ။ ဆံပင်က ခါးလောက်ထိ ရှိတဲ့ အရှည်ကြီး ။ရွှေရောင်ဖျော့ဖျော့ ဖြောင့်ဖြောင့် ဆံပင်ရှည် ..မျက်လုံးပြာပြာနဲ့ စော် ။ ကိုယ်လုံးလဲ ပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ ။
“ သူ့ကို ခေါ်လို့ရမလား …”
ရုရှားမကြီးက လှမ်းကြည့်ပြီး..“ ရတာပေါ့..သူက ဒို့ကလပ်မှာ အချောဆုံး..အမိဆုံး…သူဆိုရင်တော့၂၀၀ ပေးရမယ်…မင်းတို့၂ယောက်နဲ့ သရီးဆမ်းကိုင်လိုက်ကြပေါ့..မများပါဘူး..၂ဝဝထဲပါ……အခန်းက.ရေချိုးခန်းလည်း ပါတယ် ..”လို့ ပြောတယ် ။ညိုညိုညိမ်း နဲ့ တိုင်ပင်လိုက်တော့ ညိုညိုညိမ်းက “ အိုကေတယ်…လုပ်လိုက်ကိုအောင် …” တဲ့ ။
ရုရှားမလေးက လက်လေးဖြန့်တယ် ။
“ ငွေအရင် မစပါ…”တဲ့ ။
ညိုညိုညိမ်းက လက်ကိုင်အိတ်ထဲက ဒေါ်လာတရာတန် နှစ်ရွက်ကို ထုတ်ပေးလိုက်တယ် ။
အိုကေပြီ ။ ဒီတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ရုရှားမလေးနဲ့ အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားလိုက်ကြတယ် ။
အခန်းထဲကို ရောက်တော့ ရုရှားမလေးက သူ့နံမည်က အရီနာ…လို့ ပြောပြတယ် ။ အရက် သောက်အုံးမလား..တဲ့ ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ရုရှားမလေးနဲ့ အပေါ်ထပ်ကို သူတို့ လှေခါးကနေ တက်ကထဲကသူ့ဒုတ်က မာနေပြီ ။ ညိုညိုညိမ်းက “ ကိုအောင်..ဘယ်လိုလဲ..ဒီကောင်မလေးရော ညိုညိမ်းကိုရော ဆွဲနိုင်ပါ့မလား…” လို့ မေးလိုက်တယ် ။
“ ရပါတယ်…” လို့ သူ ဖြေရင်း အဝတ်တွေကို စချွတ်တယ် ။
ရုရှားမလေးကလည်း ချွတ်တယ် ။ ညိုညိမ်းကလည်း ချွတ်တယ် ။ တခဏချင်း သူတို့ အားလုံး ကိုယ်လုံးတီးတွေ ဖြစ်ကုန်တယ် ။ အသားညိူစိမ့်စိမ့်နဲ့ ညိုညိုညိမ်း နဲ့ အသားဖြူစွတ်နေတဲ့ ရုရှားမလေးတို့ ခြံရံပြီး ကုတင်ကြီးပေါ်ကို လှမ်းတက်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာ ဟန်ဝင်းအောင် လည်း သူ့ကိုယ်သူ ဂျိန်းစဘွန်းမင်းသား လိုပါလား လို့ စိတ်ထဲ ထင်လိုက်မိတယ် ။
မကြာခင် မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ပွဲကြမ်းတွေ စတော့မှာကို သိလိုက်တဲ့သူ့ဖွားဖက်တော် ငနဲက ခေါင်းတထောင်ထောင် ဖြစ်လာတယ် ။ သံဒုတ်ကြီးတချောင်းလို မာကျောနေပြီ ။
ရုရှားမလေးရဲ့ ပေါင်ကြားကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ရွှေဝါရောင် အမွှေး ခပ်ပါးပါးလေး ကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကတော့ ပေါင်ကြားမှာ အမွှေးရှင်းလင်းထားလို့ ပြောင်တလင်းလေး ။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ နို့တွေကလည်း တင်းမာလုံးဝန်းနေကြဆဲ ။ သူ့ကို ပက်လက်အိပ်ခိုင်းပြီး ညိုညိုညိမ်းနဲ့ အရီနာက သူ့ဒုတ်ရှည်ကြီးကို တပြိုင်နက် အတူတူ စုတ်ပေးကြတော့ ငယ်ငယ်ထဲက ကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြား အပြာဗီဒီယိုတွေထဲကလို ဖြစ်နေတာမို့ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း တအား သဘောကျနေရတယ် ။
ဒီဖက်က အရီနာက ယက်လိုက်တဲ့အချိန် ဟိုဖက်က ညိုညိုညိမ်းကလည်း အားကျမခံ ယက်လိုက်နဲ့ ။နောက်တခါ ညိုညိုညိမ်းက ထိပ်ဒစ်လုံးကို ငုံခဲစုတ်လိုက်တဲ့အချိန် အရီနာက သူ့လဥတွေကို တပြတ်ပြတ်နဲ့ ငုံ့ယက်ပေးတယ် ။
အထိဆုံးကတော့ အရီနာက လဥတွေကို လက်နဲ့ မပြီး သူ့ဖင်ကြားနဲ့ ဖင်ပေါက်ကို ယက်ပေးတာပါ ။“ အိုး..အား….အား…အီး….ဟင်းဟင်း……”ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ အော်ညည်းသံတွေ ထွက်လာတယ် ။ အရီနာလည်း သူကလိတာတွေကြောင့် ဟန်ဝင်းအောင် ဖီးလ်တက်သွားရတာကို သဘောကျ ကျေနပ်ပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ရယ်လိုက်တယ် ။
မိန်းမနှစ်ယောက် အလုအယက် ဆိုသလို စုတ်ယက်ပေးတာတွေကြောင့် သူ့ဒုတ်ကြီးလဲ တွင်းအောင်းချင်နေပြီး တအားကို တင်းမာနေရတယ် ။
“ တော်..တော်ပြီ ……..Please Stop!!!! ”
သူတို့ ဆက်မှုတ်ရင် သူ့သုတ်ရည်တွေ တအား ပန်းထွက်လာတော့မယ် ။ သူတို့ကို ကောင်းကောင်းဗျင်းချင်သေးတယ် ။
“ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လုပ်ချင်သလဲဟင်…”
အရီနာက မေးတယ် ။မျက်တောင်ကော့ကြီးတွေနဲ့ ပြာလဲ့တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ အရီနာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရတာက သူကိုယ်တိုင် အပြာရုပ်ရှင်ထဲ သရုပ်ဆောင်နေရသလို ထင်မိသွားတယ် ။
ပက်လက်အိပ် ပေါင်ဖြဲကားနေတဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို အရီနာက ဖင်ထောင်ပြီး ဘာဂျာကိုင်နေတဲ့အချိန်သူက အနောက်ကနေ အရီနာ့ကို ဖြုတ်တယ် ။ အရီနာရဲ့ ဖင်ဖြူဆွတ်ဆွတ်တွေကို လက်နဲ့ ဖြဲကားပြီးတံတွေးထွေးထည့်ဖို့ လုပ်တော့ အရီနာက မထွေးနဲ့…ကေဝိုင်ဂျယ်လီ ရှိတယ် ဆိုပြီး ဘူးလေး ထုတ်ပေးတယ် ။ အရီနာရဲ့ နောက်ပေါက်ကို လုပ်နေတဲ့အချိန် အရီနာက ညိုညိုညိမ်းကို ဘာဂျာကိုင်တာကိုလည်း သူကြည့်ရတာ တော်တော် သဘောကျမိတယ် ။
ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ စိတ်ကြိုက် ဆွဲလိုက်ကြတယ် ။ ရုရှားမလေးရဲ့ အရှေ့ပေါက် အနောက်ပေါက်နဲ့ ပါးစပ်ကို စိတ်တိုင်းကျ အရသာခံပြီး အားလုံး ပြီးစီးသွားတော့ သုံးယောက်သား ရေအတူတူချိုးရတာလည်း အတွေ့အကြုံသစ်တခုဘဲလေ ..။
ရုရှားကလပ်ထဲက ထွက်ခဲ့ကြပြီး စကားတပြောပြောနဲ့ လျှောက်ကြရင်း လမ်းထိပ်ကို ရောက်လာကြတယ် ။ ညဉ့်လဲ နက်ပြီ ..။ ဟိုတယ်က သိပ်မဝေးတာကြောင့် လမ်းလျှောက်ဘဲ ပြန်ကြမယ် လို့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် ။
လူပြတ်ပြီး မှောင်လာတယ် ။ ဟိုတယ်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့ အချိန် သူတို့ အနောက်ဖက်မှာ တုတ်တုတ်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ သုံးဘီးကားတစီး ထိုးဆိုက်လာပြီး လူငယ်လေးယောက် ဆင်းလာကြတယ် ။ သူတို့အထဲက ခေါင်းဆောင်လို့ထင်ရတဲ့ကောင်က ရှေ့တိုးလာတယ် ။
“ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းလား …”
အဲဒီ ဆံပင်ရှည် ပိန်ညောင်ညောင် ကောင်လေးက မေးလိုက်တယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်က “ မဟုတ်ဘူး….မသိဘူး….” လို့ ချက်ချင်း ပြန်ဖြေတယ် ။ သူတို့ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ညိုညိုညိမ်းကို ၀ိုင်းထားလိုက်ကြတယ် ။
“ သိနေတယ်လေ..မညာနဲ့…မင်းတို့ကိုမနက်ထဲက စောင့်ကြည့်နေတာ.. စကားပြောစရာ ရှိလို့ ခဏ လိုက်ခဲ့ပါ…”
“ မင်းတို့နဲ့ ဘာမှ ပြောစရာ မရှိဘူး ” လို့ သူပြန်ပြောလိုက်ပြီး ပြေးပေါက်ရှာတယ် ။
ဟန်ဝင်းအောင်က သူတို့ ကာမထား ၀ိုင်းမထားတဲ့ ဖက်ကနေ လစ်ဖို့ကြံတယ် ။ ညိုညိုညိမ်း လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး ။
ဘရူးဝူးရူး..ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ အဲဒီဖက်ကလည်း သုံးဘီးတစီး ထိုးဆိုက်လာတယ် ။ ဒီသုံးဘီးပေါ်က နောက်ထပ် လူလေးယောက် ဆင်းလာတယ် ။ ပိတ်မိနေပြီ ။
“ လိုက်ဆို လိုက်ခဲ့…”
သူတို့အနားကို တိုးကပ်လာကြတယ် ။ ဖွက်ကွယ်ပြီး ကိုင်ထားကြတဲ့ ဓါးတွေကို ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်း မြင်သာအောင် ပြကြတယ် ။
“ ကားပေါ်တက်…” တဲ့ ..။
ဒီတခါတော့ ခံလိုက်ရပြီ..လူရှစ်ယောက်နဲ့ ယှဉ်ဖိုက်ဖို့ ဆိုတာကလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး ။ မလွယ်ဘူး ။
“ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ…ခင်ဗျားတို့ လူမှားကြတာဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ..” လို့ အတင်းဇွတ်ငြင်းပြီး သူတို့ကြားကနေ ထွက်သွားဖို့ ကြိုးစားလိုက်သေးတယ် ။ မရဘူး ။
သူတို့ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းတို့လက်တွေကို ဖမ်းဆွဲကြသည် ။ ရုန့်ရင်းဆန်ခတ်တွေ ဖြစ်ကုန်တယ် ။ ဓါးတွေ ဗြောင်ကြီး ထုတ်ပြကုန်တယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်က မှောင်လဲမှောင် လူလဲ ပြတ်နေတယ် ။ ကားသွားကားလာတောင် မရှိဘူး ။
ဒီအချိန်မှာ လင်းကရူစာကားမဲကြီးတစီး ထိုးဆိုက်လာတယ် ။ ဒီလူငယ်အုပ်စုရော ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းကော လှည့်ကြည့်မိကြတယ် ။ ကားထဲက လူတွေ ဆင်းလာတယ် ။ လက်ထဲမှာ သေနတ်ပြောင်းတိုတွေရော အရှည်တွေရော ။ သူတို့အထဲက တယောက်က ထိုင်းစကားနဲ့..“ မင်းတို့ နောက်ဆုတ်ကြ..ဓါးတွေ ပြန်သိမ်းလိုက်ကြ ..ဒီနေရာက ထွက်သွားကြ..ဒါမှမဟုတ် ရဲစခန်းကို လိုက်ခဲ့ကြ”လို့ အော်ပြောလိုက်တော့ စောစောက သုံးဘီးကား နှစ်စီးနဲ့ ရောက်လာဆွဲခေါ်တဲ့ အုပ်စု နောက်ဆုတ်သွားကြတယ် ။ သုံးဘီးကားတွေပေါ်ကိုတော့ မတက်သေးဘဲ စောင်းငမ်းငမ်းတွေ လုပ်နေကြလို့ နောက်ရောက်လာတဲ့လူတွေက သေနတ်တွေနဲ့ ထိုးချိန်လိုက်ကြတယ် ။
“ သွားဆို သွားကြ..ပစ်လိုက်ရမလား…”
ဒီတော့မှ သူတို့လည်း သုံးဘီးတွေအပေါ် ပြန်တက်သွားကြတယ် ။
လင့်ကရူစာကားမဲကြီးထဲက လူတွေက ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို ကားထဲ တက်ခိုင်းတယ် ။သူတို့က မတက်ဘဲ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ် လုပ်နေတော့ ကားနောက်ခန်းထဲက လူတယောက်က လှမ်းခေါ်လိုက်တယ် ။
“ ဟေ့..ညိုညိမ်း…လာလာ..ကားထဲ ဝင်ခဲ့..ဦးတို့ပါ …. ”
ညိုညိုညိမ်းက သေသေချာချာ ကားထဲကို ကြည့်လိုက်တော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်နဲ့ ဟို သတင်းစာထဲခဏခဏ တွေ့ဘူးနေတဲ့ ခေါင်းဖြူဖြူနဲ့ ဦလေးကြီးတို့ ဖြစ်နေတယ် ။
ဒါနဲ့ သူတို့လည်း ကားပေါ်တက်လိုက်ကြတယ် ။
“ ကျေးဇူးပါဘဲ ဦးတို့ရယ် …ဘယ်လို ဘယ်လို ရောက်လာကြတာလဲ …”
“ ဒီလိုဘဲပေါ့ကွယ် …စောစောက ချာတိတ်တွေက ဇော်ကြီးနဲ့ တင်မောင်လတ်တို့ရဲ့ လူတွေပေါ့ ..မင်းတို့စာ သူတို့လက်ထဲ ပါသွားရင် မင်းတို့ ပစ္စည်းတွေ အားလုံး သူတို့ လက်ကို အပ်ကြရမှာ..သူတို့ကနှိပ်စက်ပြီး တောင်းမှာကွ..” လို့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ပြောတယ် ။
ခေါင်းဖြူဦးလေးကြီးကတော့..“ မင်းတို့က ပတ်တရာမှာ လာကဲနေတာကိုး..မင်းတို့ သိထားဖို့က ဒီမှာမြန်မာတွေ အများကြီးဘဲကွ…မင်းတို့ ရောက်နေတဲ့ သတင်းက ရန်ကုန်ကို ချက်ချင်း ရောက်သွားနိုင်တယ် ..ဒီလို ပေါ်တင်ကြီး လျှောက်သွားနေကြလို့ မရဘူးးကွ…” လို့ ပြောတယ် ။
သူတို့လည်း ဦးသိန်းထွန်းကျော်တို့နဲ့ ပါသွားကြတယ် ။
ခေါင်းဖြူဦးလေးကြီးက အနောက်နိုင်ငံတခုခုကို ပို့ပေးမယ်..စားရိတ်စားခတော့ ပေးရမယ်…လို့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က ပြောတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိူညိူညိမ်းတို့လည်း ထိုင်းမှာ မနေရဲကြတော့တာကြောင့် ပေးပါမယ်.လို့ ပြောကြတယ် ။
ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က ဘယ်လောက် တောင်းပန် တောင်းပန် ငွေတွေ ဘယ်လောက် ပေးပေး မိုနာလီဇာလည်း ဒီလူးကြီးကို အရမ်း ကြောက်သွားခဲ့ပြီ ။ ဘရာစီယာနဲ့ ပင်တီလေးဘဲ ချိန်ထားပြီး အကို့ရှေ့မှာ ဟိုကိုင်ဒီကိုင် လုပ်ခဲ့..ပါးရိုက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ လူရောစိတ်ရော ကြမ်းတမ်းတဲ့ လူကြီးကို ဘယ်လိုမှ ထပ် မပတ်သက်ချင်တော့ဘူး ။
ဒါပေမယ့်..ဒါပေမယ့် မိုနာလီဇာလေးကို သဘောကျ သနားသွားတဲ့ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ နောက်ဆုတ်မသွားပါ ။ စိတ်ပျက်လက်လျှော့မသွားခဲ့ပါ ။ နပိုလီယန်ကို သူပိုင်နေမှတော့သူ စိတ်မပူတော့ဘူး ။ နပိုလီယန်နဲ့ မိုနာလီဇာတို့ရဲ့ အမအကြီးဆုံး ဆေးရုံတက်ရတာတွေ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေ ပြရတာတွေ..ဆေးဝယ်ရတာတွေကို သူ အကုန် တာဝန်ယူပေးခဲ့ပြီး မိုနာလီဇာတက်ချင်နေခဲ့တဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွေကို သူအကုန် ပို့ပေးတယ် ။ သူတို့မိသားစု စီးဖို့လည်း ဟွန်ဒါဖစ်ကားလေးတစီး ချက်ချင်းဝယ်ပေးတယ် ။
အခုလည်း သူတို့အိမ်ကို ရောက်လာပြီး ကြည့်တယ် ။ အိမ်ကို ကြည့်တာ ။ မိုနာလီဇာတို့ အမတွေကတော့ သူတို့မိသားစုကို အစစ ဂရုတစိုက် အကုန်ခံနေတဲ့ ကျောက်ဖုရားကို ပြာပြာသလဲ ဖြစ်နေကြတာပေါ့ ။ ကျောက်ဖုရားက သူတို့ကို ဒီအိမ်က စုတ်တယ်..ဒီမှာမနေနဲ့တော့..သူ အိမ်လေးတလုံး စီစဉ်ပေးမယ် လို့ ပြောတယ် ။ သူပြောတဲ့အတိုင်းဘဲ သူတို့ မိသားစုကို အိပ်ခန်းလေးခန်းပါတဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကျယ်ကျယ်ဆီ ပြောင်းပေးလိုက်တယ် ။ နပိုလီယန်လည်း ကျောက်ဖုရားကြီးတော့ ငါ့ညီမလေးကို သဘောကျနေပြီလို့ စိတ်ထဲမှာ သိလိုက်တယ် ။
မိုနာလီဇာလည်း သူတို့မိသားစုအပေါ် အရမ်းကို စေတနာထားတဲ့ ကျောက်ဖုရားကြီး လုပ်ခဲ့တာတွေကိုနဲနဲမေ့လျော့..ပေါ့သွားတယ် ။ သူတို့ မိသားစုလဲ တိုက်ခန်းအကောင်းစားနဲ့နေ ကားအသစ်လေးစီးနေရပြီလေ ။ အကို နပိုလီယန်ဆိုလည်း ဒီလူကြီးရဲ့ တပည့်ဖြစ်သွားပြီး သားသားနားနား ဖြစ်နေပြီ ။
မိုနာလီဇာတို့ မိသားစုက ဒီလောက် ကျေးဇူးတင်နေကြပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က မပြီးသေးဘူး ။ သူတို့ မိသားစုကို လဖက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်ပါ ဝယ်ပေးဖွင့်ပေးလိုက်တယ် ။ အဲဒီမှာ မိုနာလီဇာလည်း ကျောက်ဖုရားကို “ ကိုကြီး ” “ ကိုကြီး ” နဲ့ ဖြစ်သွားရတော့တာဘဲ ။
ငွေအရှိန်အဝါက ကြီးမားလွန်းတယ် ။အခုဆိုရင် ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ရဲ့ ကက်ဒီလက်ကားအသစ်ကြီးက မိုနာလီဇာတို့ ကွန်ဒိုအောက်ကို ထိုးဆိုက်လိုက်တာနဲ့ မိုနာလီဇာလေးက တိုက်ပေါ်က ပြေးဆင်းလာပြီး ကားကြီးထဲကို ဝင်လိုက်တော့တာဘဲ ။
“ မိုမိုလေး …”
“ ရှင်..ကိုကြီး …”
“ စင်ကာပူ ဈေးဝယ်ထွက်ကြရအောင်လား…”
ကျောက်ဖုရားက မိုနာလီဇာလေးကို ပါးရိုက်ဖူးတဲ့ သူ့တပည့်ကို သူ့မျက်စိရှေ့အောက်မှာ မထားတော့ဘဲ မိုးကုတ်က ကျောက်တွင်းတွေမှာ ခိုင်းထားလိုက်တယ် ။ သူ့ကို ကြည်ဖြူနေပြီ ဖြစ်တဲ့ မိုနာလီဇာလေး ဒီကောင့်ကို ပြန်တွေ့ရင် ဟိုတုံးက ခံခဲ့ရတာတွေကို ပြန်သတိရသွားမှာစိုးလို့…။
များမကြာခင်မှာ စင်ကာပူက ကုန်တိုက်ကြီးတွေမှာ ဈေးတွေလိုက်ဝယ်နေတဲ့ မိုနာလီဇာနဲ့ ဘေးက လိုက် ငွေရှင်းပေးနေတဲ့ ပါးစပ်ကြီးဖြဲဟပြီး ကျေနပ်နေတဲ့ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်တို့ကို တွေ့နိုင်ပါတယ် ။
“ သုံး….သုံး..မိုနာလေး သုံးသာသုံး….ကိုကြီး ရှင်းမယ်…အားလုံး..ဝယ်ဝယ် … ”လို့ ပြောရင်း မိုနာလီဇာရဲ့ အနောက်က ပြေးလိုက်နေတယ် ။
ကျောက်ဖုရား အရမ်းပျော်နေတယ် ။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် မိုနာလီဇာလေးက သူ့ကို ပေးကျွေးတော့မှာ သေချာတယ် ။ စားရသောက်ရတော့မယ်ဆိုပြီး ဝမ်းသာလုံးဆို့နေတာ ။
နပိုလီယန်လည်း သူ့ဘောစိက သူ့ညီမလေးကို တကယ် အတည်ကြံနေတယ်လို့ ယုံကြည်လို့ သွားကြီးဖြဲပြီး ကျေနပ်နေတယ် ။ နပိုလီယန်လည်း အိပ်ဖေါ်တီးတို့ စုံတွဲအကြောင်းကို မကြားရတာ ကြာသွားပြီမို့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်နေပြီ ။
တနေ့မှာ သူ့ဆီကို လူတယောက် လူကြုံပစ္စည်း လာပို့တယ် ။ သေတ္တာကြီးတလုံး ။ဘယ်သူပို့တာလဲ ဘယ်ကလည်း ဆိုတော့ “မသိဘူး ” လို့ဘဲ ပြောတယ် ။ အထဲမှာ စာပါလိမ့်မယ်..ဖတ်ကြည့်ပါ” လို့ဘဲ ပြောပြီး သေတ္တာကြီး ချခဲ့ပြီး လစ်ရော ။
နပိုလီယန်လည်း သေတ္တာကြီးကို ဖွင့်ကြည့်တော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေစက္ကူတွေ အပြည့် ဖြစ်နေတယ် ။ စာလေးတစောင်လည်း ရှိနေတယ် ။ ဖွင့်ဖတ်လိုက်တော့..
ရောင်းရင်း နပိုလီယန်..မင်းကို မဘတ်ပါဘူး..အခြေအနေအရ အချိန်မရလို့ ဘတ်သလို ဖြစ်သွားတာကို ခွင့်လွှတ်ပါ..ဒါတွေကမင်းအတွက် ရှယ်ယာ ဝေစု ပါ….
ခင်မင်သော ရောင်းရင်းများ အိပ်ဖေါ်တီး
ဆိုတာကို ဖတ်လိုက်ရတယ် ။
နပိုလီယန်လည်း..“ အင်း..အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲ…ငါ့ကိုတော့ သတိရကြသားဘဲ…လို့ တွေးမိရင်း ပြုံးစိစိနဲ့ ငွေတွေကို ကြည့်နေပါတယ် ။